ခုနဈရကျခုနဈလီ – My Blog
မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံး ဇိမျခံသင်ျဘောကွီး ခိုငျရှဝေါ။ နိုငျငံတကာ အဆငျ့မီ နညျးပညာမြားဖွငျ့ မွနျမာ နိုငျငံ သီလဝါ သင်ျဘောကငျြးတှငျ ဆောကျလုပျသော သင်ျဘောကွီးဖွဈသညျ။ အငျဂငျြစှမျးအား မွငျ့မားသဖွငျ့ မွနျ နှုနျးမွငျ့မားသညျသာမက သင်ျဘောတှငျ ပါဝငျသော ဝနျဆောငျမှုမြားကလညျး အလှနျကောငျးမှနျလှသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြားသာမက နိုငျငံခွားသားခရီးသညျမြားပါ လကျမှတျအလုအယကျဝယျယူ စီးနငျးကွသညျ့ သင်ျဘောကွီးတဈစငျးလညျးဖွဈသညျ။ အခြို့နိုငျငံခွားသားမြားက ကမ်ဘာကြျော တိုငျတနျးနဈ သင်ျဘောကွီး လောကျ မကွီးမားစကောမူ လကျရှိခတျေနှငျ့လြျောညီသညျ့ ခတျေမီဝနျဆောငျမှုမြားကွောငျ့ တိုငျတနျးနဈကိုစီးရ သညျထကျ ပိုကောငျးနိုငျကွောငျး အမှမျးတငျကွလသေညျ။ သူတို့ မှမျးမယျဆိုလညျး မှမျးထိုကျပသေညျ။
သင်ျဘောကွီး၏ တညျဆောကျပုံက လှပသသေပျလှသလို သင်ျဘောကွီး၏ တညျငွိမျမှုထိနျးစနဈကလညျး ခတျေမီနညျးပညာကို သုံးထားသဖွငျ့ ကွမျးပွငျကို နားကပျ ထောငျကွညျ့လြှငျပငျ အငျဂငျြစကျသံ တုနျခါမှုက ကွားရသညျဆိုရုံမြှသာ ရှိသညျ။ တျောရုံ လှိုငျးလလေောကျက ခိုငျရှဝေါကို မှောကျဖို့ဝေးစှ တုနျခါအောငျပငျ မလုပျနိုငျခြေ။ သင်ျဘောပျေါတှငျ စားသောကျခနျး၊ ကလေးကစား ကှငျး၊ မီနီဘောလုံးကှငျး၊ မီနီဂေါကျကှငျး၊ ရကေူးကနျမြား မီနီမါးကတျကလေးမြား ထညျ့သှငျးတညျဆောကျထား သညျသာမက အထပျငါးထပျ၏ အပျေါဆုံးနှဈထပျတှငျ ကွယျငါးပှငျ့ဟိုတယျမြားတှငျပေးသညျ့ ခမျးနားမှုထကျ မညံ့လှသညျ့ နှဈယောကျအိပျခနျး၊ မိသားစုအိပျခနျးမြား၊ တဈယောကျခနျးမြားလညျး ရှိနပွေနျသညျ။
ခေါငျမိုးထကျတှငျမူ လညှေငျးခံရနျ ပကျလကျထိုငျခုံမြား ခပြေးထားသညျ။ မညျသညျ့နရောကို ရောကျနသေညျဖွဈစေ မွနျမာ့ဆကျသှယျရေးဂွိုဟျတုမှ အခပေးငှားရမျးထားသ ဖွငျ့ အမျပီတီ 4G နကျဝါ့ချကို သုံးစှဲနိုငျသညျ့အပွငျ သင်ျဘောမှ အခမဲ့ပေးထားသော မွနျနှုနျးမွငျ့ ဝိုငျဖိုငျစနဈကို လညျး အခမဲ့ သုံးစှဲနိုငျသေးသညျ။ ဝိုငျဖိုငျဖွငျ့ ဖုနျးမှ စာဖတျနိုငျသလို စာအုပျငှားရမျးဖတျရှုလိုပါကလညျး သင်ျဘောလကျမှတျ စမတျကတျဖွငျ့ ငှားရမျးနိုငျသေးသညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ အမြားသူငါ ကွိုကျနှဈသကျကွသညျ ဖွဈလိမျ့မညျ။
သို့သျော ဇိမျခံသင်ျဘော ဖွဈသဖွငျ့ ဇိမျခံနိုငျလောကျသညျ့ လူတနျးစားမြားသာ လိုကျပါစီးနငျး နိုငျ ပသေညျ။ ရနျကုနျ ကော့သောငျး အသှားအပွနျခရီးစဉျက သင်ျဘောခခညျြး တဈယောကျ ငါးသိနျး ပေးရသညျကိုး။ အစားအသောကျကလညျး ကောငျးသလောကျ ဈေးနှုနျးမွငျ့မားလှသညျ။ သင်ျဘောအကွောငျးကို အမှမျးတငျခဲ့သညျမှာ ရှညျလြှားလှနျးနပွေီ။ ထို့ကွောငျ့ အဓိက ဇာတျလမျးပိုငျး ကို ဆကျကွပါစို့။ သင်ျဘောဆိပျတှငျ လူစညျကားလှနျးလှသညျ။ သင်ျဘောပျေါတကျသညျ့သူ ပွနျဆငျးသညျ့သူမြား ပြားပနျး ခတျမြှ ဖွဈနသေညျ။ သင်ျဘောပျေါလိုကျသညျ့ လူမြားသညျလညျး လူမြိုးပေါငျးစုံ၊ အကွောငျးအရာ ပေါငျးစုံလှ ပသေညျ။ အပြျောစီးနငျးသူ၊ အပနျးဖွလေိုသူ၊ စာရေးရနျ ကုနျကွမျးရှာသူ၊ ပနျးခြီဆရာ၊ ဓာတျပုံဆရာ စသညျ စသညျဖွငျ့ မြိုးစုံလှသညျ။
ဘျော…… ဆိုသညျ့ ခနျ့ညားထယျဝါလှသညျ့ ဥသွသံကွီး ထှကျပျေါလာပွီးနောကျ ခရာသံမြား တရှီရှီ ထှကျလာကာ သင်ျဘော၏ ဦးကွိုး၊ ပဲ့ကွိုး၊ ခါးကွိုး၊ ဂုတျကွိုးမြားအား သင်ျဘောဝနျထမျးမြားမှ ဖွညျနပွေီ။ ထိုစဉျ အထုပျအပိုး တပှတေ့ပိုကျနှငျ့ အသကျ ၂၀ အရှယျ လူငယျတဈဦး ပွေးဆငျးလာသညျ။ သင်ျဘောမှာ ကမျးမှ စခှာရနျ တာစူနပွေီဖွဈရာ ကုနျးပတျနှငျ့ ဗောတံတားမှာ သုံးပခေနျ့ကှာနပွေီဖွဈသညျ။ ကံကောငျးထောကျမစှာဖွငျ့ ထိုလူငယျမှာ သင်ျဘောပျေါသို့ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ ခွခေနြိုငျလိုကျသညျ။ သင်ျဘောပျေါ ရောကျသညျနှငျ့ သင်ျဘောလုံခွုံရေးဝနျထမျးမြားက လူငယျ၏ လကျမှတျနှငျ့ လူငယျ၏ခန်ဓာကိုယျတှငျ ဖောကျခှဲရေးပစ်စညျးမြား ပါ မပါ စဈဆေးနသေညျ။ ထို့နောကျ လူငယျအား သူစီးနငျးရမညျ့ အထပျသို့ လမျးညှနျပေးလိုကျလတေော့သညျ။ ထိုလူငယျကား ကြှနျုပျ၏ ဇာတျလမျးတှငျ အဓိက သရုပျဆောငျမညျ့ လငျးကိုကို (ခ) ကိုလငျး ဖွဈပတေော့သညျ။
သင်ျဘော ကပ်ပတိနျဖွဈသူ ဦးအောငျမွတျ သူ့အခနျးထဲမှ ထှကျလာပွီး သင်ျဘော၏ ခေါငျမိုး အရှပေို့ငျး ရှိ ကယျဗငျခနျးထဲသို့ ဝငျသှားသညျ။ အခနျးထဲတှငျ သင်ျဘောမောငျးနှငျသကျတမျး ၂၀ ကြျောပွီဖွဈသော ဦးမိုးကွိုး က ပဲ့ကိုငျဘီးကို ကငျြလညျစှာကိုငျတှယျထိနျးကြောငျးနသေညျ။ ကယျဗငျခနျးနှငျ့ ကပျလြှကျတှငျ ပငျမ ထိနျးခြုပျ ခနျး၊ မွပေုံခနျး၊ လမျးပွအခနျးတို့ရှိကာ သကျဆိုငျရာ အငျဂငျြနီယာမြားက စကျအားညှိခွငျး၊ လမျးကွောငျး တှကျခကျြခွငျးတို့ ဆောငျရှကျနကွေသညျ။ သင်ျဘောကွီးသညျကား ရနျကုနျမွဈဝသို့ ရောကျနပေပွေီ။ ဦးအောငျမွတျ သူ့သင်ျဘောကွီးအတှကျ ဂုဏျယူကနြေပျနပေုံရသညျ။
မွဈဝရောကျနပွေီဖွဈသဖွငျ့ ပငျလယျထဲ သို့ဖွတျသနျးရနျ မိုးလဝေသ အငျဂငျြနီယာအား အခွအေနမေေးလိုကျရာ အခွအေနကေောငျးကွောငျး ပွောလိုကျသညျ။ ဦးအောငျမွတျက သင်ျဘောကွီးအား စကျကုနျဖှငျ့မောငျးနှငျရနျ အမိနျ့ပေးလိုကျလတေော့ သညျ။ လကျထောကျကပ်ပတိနျ ဦးသျောဇငျထှနျးက ကွေးနနျးမောငျးတံကို Full ဆိုသညျ့နရောသို့ ဆှဲခလြိုကျရာ စကျခနျးအငျဂငျြနီယာက တဈနာရီ ရမေိုငျ သုံးဆယျခနျ့ မောငျးနှငျနရောမှ တဈနာရီ ရမေိုငျ ခွောကျဆယျသို့ ဒိုငျခှကျမြားကို စဈဆေးကာ စကျကုနျဖှငျ့လိုကျတော့သညျ။ သင်ျဘော၏ နောကျခွမျးဆီမှ ရမွှေုပျတို့ကလညျး ယခငျကထကျ နှဈဆလောကျ ဆူပှကျလာကာ သင်ျဘောမွနျနှုနျးမှာ သိသိသာသာ ထိုးတကျလာတော့သညျ။ သို့ သျော ပတျဝနျးကငျြတှငျ ပငျလယျကွီး ပတျလညျဝိုငျးနသေဖွငျ့ ခရီးသညျမြားကတော့ မွနျလားနှေးလား မမှနျး တတျပေ။ အခြို့ကလညျး ကုနျးပတျပျေါတှငျ လမျးလြှောကျနကွေသညျ။
အခြို့ကလညျး လသောဆောငျတှငျ လညှေငျးခံနကွေသညျ။ ရကေူးကနျတှငျလညျး ဘီကီနီကိုယျစီ အလှပဂေးလေးမြား ရကေူးနကွေပပွေီ။ သင်ျဘောပျေါမှဟု မထငျရလောကျအောငျ တညျငွိမျလှနျးလှသညျ။ မနကျ ၈ နာရီကနေ စထှကျလာလိုကျသညျ မှာ ဘာလိုလိုနှငျ့ ညနစေောငျးနပေါပွီကော။ နလေုံးကွီးသညျလညျး အနောကျဂေါယာကြှနျးသို့ ယှနျးလုပွီ။ Sun Set ကို ကွညျ့ခငျြသူမြားက အမိုးပျေါတှငျ အပွညျ့နရောယူထားကွသညျ။ အခြို့ကလညျး ကငျမရာဖွငျ့၊ အခြို့ကလညျး ပနျးခြီဆှဲရနျပွငျဆငျနကွေသညျ။ နလေုံးနီနီကွီးသညျ တဖွညျးဖွညျး မှေးမှိနျလာရာမှ မိုးကုတျ စကျဝိုငျးကွီးအောကျသို့ တဖွညျးဖွညျး ငုပျလြှိုးသှားလပွေီ။ သင်ျဘောတှငျ တပျဆငျထားသော လြှပျစဈမီးမြားမှာ အလငျးရောငျအာရုံခံစနဈ တပျဆငျထားသဖွငျ့ အလငျးရောငျနညျးသှားသညျနှငျ့ အလိုလို လငျးလာခွငျး ဖွဈ သညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ တဈနကေုနျ တိတျဆိတျနသေော ထမငျးစားဆောငျနှငျ့ စားသောကျဆိုငျမြားမှာ လူစညျကားသော အဖွဈသို့ ပွနျလညျရောကျရှိလတေော့သညျ။ ထမငျးစားသောကျပွီးနောကျ ကုနျးပတျပျေါတှငျ ကွို့တို့ကြဲတဲ သှားလာလမျးလြှောကျနကွေသညျ။ အခြို့က သင်ျဘောရုပျရှငျရုံတှငျ ရုပျရှငျ ဝငျကွညျ့ကွသညျ။ သင်ျဘော၏ နောကျမွီးပိုငျးတှငျ ၁၈ နှဈအရှယျ မိနျးမခြောလေးတဈဦး ထိုငျနသေညျ။ သူမြားတကာတှေ အဖျောမြားနှငျ့ လြှောကျသှား ပြျောပါးနသေညျက သူမနှငျ့ ဆိုငျပုံမရခြေ။ အနောကျတှငျ တဖှားဖှားထနသေော ပနျကာဒလကျရစေီးကွောငျးမြားဆီသို့သာ အဓိပ်ပာယျမဲ့ ငေးကွညျ့နလေသေညျ။ သူမ၏ အမညျကား ဖူးပှငျ့ဝေ။ သူမတှငျ ငယျစဉျကတညျးက တဈသကျမက ဆယျသကျပငျစားမကုနျသညျ့ စညျးစိမျခမျြးသာမြားကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ သညျ။
သူမ၏ ဖခငျက နိုငျငံတကာတှငျ လှညျ့လညျနသေညျ့ ကြောကျမကျြကုနျသညျကွီးဖွဈသလို သူမ၏ မိခငျ ကလညျး ရနျကုနျတှငျ နာမညျကွီးရှဆေိုငျကွီးတဈဆိုငျပိုငျရှငျ ဖွဈနသေညျ။ သို့သျော သူမလိုခငျြသညျကား ထို စညျးစိမျခမျြးသာမြား မဟုတျခြေ။ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပငျဖွဈသညျ။ ရတာမလို လိုတာမရ ဆိုသကဲ့သို့ သူမ၏ ဖခငျ ဖွဈသူမှာ လုပျငနျးရှငျကွီးအခြို့၏ သဘောသဘာဝအတိုငျး မိနျးကလေးမြား ဝိုငျးဝိုငျးလညျကာ သမီးဖွဈသူကို ဂရုမစိုကျနိုငျသလို မိခငျလုပျသူမှာလညျး လုပျငနျးကိုစီမံခနျ့ခှဲနရေသညျနှငျ့ အခြိနျကုနျရာ သမီးဖွဈသူမှာ အိမျ တှငျးပုနျးရငျးသာ အခြိနျကုနျနရေလတေော့သညျ။ သူမအား စဉျဆကျမပွတျ စောငျ့ကွပျနသေညျ့ မိနျးကလေး လုံခွုံရေးဝနျထမျးမြားကွောငျ့ အပွငျထှကျရနျလညျး မစှမျးသာပေ။
သို့နှငျ့ ဖခငျဖွဈသူကို အသညျးအသနျပူဆာ ရာမှ ဒီသင်ျဘောနှငျ့ အပနျးဖွခေရီးသှားခှငျ့ရရှိခွငျးဖွဈသညျ။ ဒါတောငျ လုံခွုံရေးဝနျထမျးမလေး နှဈယောကျကို အတငျးထညျ့ပေးလိုကျသေးသညျ။ ကံကောငျးသညျက ထိုဝနျထမျးမြားမှာ ဆငျးရဲနှမျးပါးသဖွငျ့ ဖူးပှငျ့ဝကေ သူမတို့နှဈဦးကို ငှနှေဈသိနျးစီ ထုတျပေးကာ သူမနောကျသို့မလိုကျရနျနှငျ့ ရနျကုနျပွနျရောကျမှသာ ဆကျသှယျမညျဖွဈကွောငျးပွောကာ ခြော့မော့ထားခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ လူအမြိုးမြိုး သောကအထှထှေေ မဟုတျပါလား။ သင်ျဘောကွီး၏ မိုးလဝေသအရာရှိ ကိုဇျောကွီးတဈယောကျ မိုးလဝေသခနျးထဲတှငျ ကောငျးကောငျးကွီး အိပျငိုကျနသေညျ။ ဒီလို မိုးလဝေသကောငျးမှနျသညျ့ကာလတှငျ ခရီးထှကျရရာ သူ့အတှကျတော့ ပငျြးစရာကွီး ဖွဈနပေသေညျ။ သူ့ရှတှေ့ငျ လတေိုကျနှုနျး၊ လဖေိအား၊ ရစေူး အစရှိသညျတို့ ညှနျပွသညျ့ စကရငျနှငျ့အတူ ရပွေငျအထကျမှ အရာအားလုံးကို ထောကျလှမျးနိုငျသညျ့ ရဒေါစကရငျနှငျ့ ရအေောကျမှ သင်ျဘောပကျြ အစရှိသညျ့ အရာအားလုံးကို ထောကျလှမျးနိုငျသညျ့ ဆိုနာစကရငျတို့က သူ့အလုပျသူလုပျနသေညျ။ မိုးလဝေ သ ကောငျးမှနျနသေဖွငျ့ သူစိတျခလြကျခြ အိပျငိုကျနိုငျခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့အပွငျ ဒီသင်ျဘောကွီးက တျောရုံတနျရုံ မုနျတိုငျးလောကျကို မဖွုံသညျကိုလညျး သူသိသညျ။ သူအိပျငိုကျနစေဉျမှာပငျ သင်ျဘောကွီး၏ ကံကွမ်မာကို ပွောငျးလဲစမေညျ့ တဈစုံတဈခုဆီသို့ ဦးတညျနသေညျကိုကား သူမသိရိုးအမှနျပါ။ အစိမျးရောငျ မဉျြးကွောငျးက ပတျပတျလညျ လှညျ့ပတျနရောမှ ဆိုနာစကရငျပျေါတှငျ ထငျထငျရှားရှား အရာတဈခု ဗဟိုသို့ ခဉျြးကပျနပွေီး ရဒေါစကရငျတှငျမူ မှိနျပွပွ အရာတဈခုက ဆိုနာရှိအရာနှငျ့ တဈနရော တညျးဆီမှ ခညျြးကပျလာနသေညျ။ အိပျပြျောနသေညျ့ ကိုဇျောကွီးကတော့ မသိရှာပေ။ ထိုအရာကို ထငျထငျရှားရှားမွငျလိုကျရသညျက သင်ျဘောရကွေောငျးပွ အငျဂငျြနီယာ ကိုသနျးစိုး။ ကိုသနျးစိုးလညျး အစက ရှကေို့ မကွညျ့မိပါ။ သင်ျဘောက လမျးကွောငျးမှနျအတိုငျး သှားနသေညျကို သံလိုကျအိမျမွှောငျဖွငျ့ စဈဆေးပွီး ဖွဈရာ စိတျခရြသညျပဲ။
သူ့လမျးပွမြှျောစငျ အောကျဘကျရှိ ရကေူးကနျတှငျ ရကေူးနကွေကုနျသော လှပြိုဖွူမြား၏ တငျပါး၊ ရငျသားမြားကိုသာ ဘီကီနီထုတျခငျြးပေါကျမတတျ ဂလုနလေတေော့သညျ။ ထိုအခြိနျ တှငျ သူခြောငျးနသေညျကို မွငျသညျ့ လှပဂေးလေးတဈယောကျက နှာဘူးကွီးရေ ဟု လှမျးအျောစလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ မသိခငျြယောငျဆောငျကာ သင်ျဘောဦးဘကျသို့ ပွနျလှညျ့လိုကျသညျ။ ထိုစဉျ ဆာ့ချြလိုကျမြား ထိနျနအေောငျ ထိုးထားသညျ့ အလငျးရောငျတှငျ ရိပျကနဲ တှလေို့ကျသညျက ဖွူဖွူအရာတဈခု။ သခြောအောငျ မှနျပွောငျးနှငျ့ ရှသေို့ လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ညကွညျ့မှနျပွောငျးအတှငျး ထငျထငျရှားရှားမွငျလိုကျရသညျက ကြောကျဆောငျကွီးတဈခု၏ အစှနျးပတေညျး။ ကိုသနျးစိုး ဆံပငျထောငျသှားသညျ။ ကိုကျ ၅၀၀ ခနျ့သာ လိုတော့သညျလေ။ ဒီနှုနျးထားအတိုငျး ဆကျသှားနလြှေငျ စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးမှာ ဝငျတိုကျမိတော့မညျ။
ကိုသနျးစိုး ကမနျးကတနျး အိုငျကှနျဖွငျ့ လှမျးအျောရသညျ။ ပဲ့စငျပျေါမှ ဦးမိုးကွိုးက ခကျြခငျြးတုနျ့ပွနျသညျ။ သနျးစိုးဘာတှသေ့လဲ တဲ့။ ကြောကျဆောငျ ကြောကျဆောငျ ဘယျကှေ့ ဘယျကှဟေု့ အသံကုနျ ဟဈလိုကျ သညျ။ ဦးမိုးကွိုး ထိတျလနျ့တကွားဖွငျ့ ပဲ့ထိနျးဘီးကို ဘယျဘကျသို့ ကမနျးကတနျး ဆှဲလှညျ့လိုကျသညျ။ ပါဝါ စတီယာရငျ စနဈဖွဈသဖွငျ့ သုံးပတျမြှလှညျ့ပွီးတော့ ပဲ့ဆုံးသှားပွီ။ သင်ျဘောက သှားနသေညျ့အရှိနျမြားနေ သဖွငျ့ မကှသေ့ေး။ ဦးမိုးကွိုး စကျခနျးသို့ Reverse Signal ပို့လိုကျသညျ။ ကလငျကလငျဟုမွညျကာ မြှားတံ က Reverse နရောသို့ညှနျနသေဖွငျ့ စကျခနျးအငျဂငျြနီယာ အံ့သွသှားသညျ။ သို့သျော သင်ျဘောသှားနစေဉျ ကပ်ပတိနျအမိနျ့ ပွီးလြှငျ ပဲ့ထိနျးသူ၏ အမိနျ့က အရေးကွီးဆုံးမဟုတျပါလား။
စကျအားလုံး၏ လောငျစာစနဈ အားလုံး ဖွုတျခလြိုကျသညျ။ သင်ျဘောကွီး၏ စကျမကွီး ပိတျသှားသညျ့အကွောငျး မီးအနီလေးက ပွနသေညျ။ မီးအနီလငျးလာသညျနှငျ့ နောကျပွနျဂီယာပွနျထိုးကာ စကျပွနျနှိုးလိုကျပွီး စကျကုနျပွနျဖှငျ့လိုကျသညျ။ သို့သျော နောကျကသြှားပပွေီ။ ပငျလယျပွငျတှငျ ထီးတညျးထိုးထှကျနသေညျ့ ကြောကျတောငျအစှနျးက သင်ျဘော၏ ဝမျးဗိုကျကို ထိုးခှဲသှားသညျသာမက ပနျကာရှကျမြားကိုပါ ဖွတျခသြှားသဖွငျ့ နောကျပွနျမဆုတျ နိုငျ တော့ပေ။ ထိနျးခြုပျခနျးအတှငျး ရဝေငျသညျ့သင်ျကတေမီးမြား တဈလုံးပွီး တဈလုံး လငျးလာရာ ရလေုံခနျးမြား ပိတျရနျ ခလုတျမြားကို အနားရှိမဉျြးလုံးဖွငျ့ တပွိုငျတညျးဖိခလြိုကျသညျ။ မရတော့ပါ။ ရဝေငျသှားသဖွငျ့ ရလေုံ ခနျးတံခါးအခြို့ အလုပျမလုပျတော့ခြေ။ ရမြေားက ဝမျးထဲသို့ ဥဒဟို ဝငျလာတော့သညျ။
သင်ျဘောပျေါမှာ ရကေူးနသေော လှပြိုဖွူကလေးမြားကလညျး ရမြေားဘောငျဘငျခတျကာ အထိတျတလနျ့ ဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာ အခနျးမြားသို့ ဝငျပွေးကုနျကွလပွေီ။ လှမြေားခသြူက ခနြပွေီ။ တိုငျတနျးနဈမှာလို လှမေလောကျ မှာတော့ ပူစရာမလိုပေ။ သင်ျဘောမထှကျခငျကတညျးက သကျဆိုငျရာက လာရောကျစဈဆေးထားပွီးသားဖွဈ သညျ။ လူအငျအားထကျ ပိုလြှံသညျ့ အသကျကယျလှအေရအေတှကျကို ယူဆောငျလာပွီးဖွဈသညျ။ လူအကုနျ အသကျကယျလှမြေားဖွငျ့ လှတျမွောကျပွီးနောကျ သင်ျဘောကွီးမှာလညျး တဖွညျးဖွညျး နဈမွုပျသှားလတေော့သညျ။ အပွောကယျြလှသညျ့ ပငျလယျပွငျကွီးထဲတှငျ ကမျးမမွငျ လမျးမမွငျလမျးမမွငျ ဘဝကွီးကို ဖွတျသနျးရမညျ့ လှမြေား မနညျးမနောပါလား။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ လှမြေား စုဝေးနရောမှာ တဈစီးနှငျ့ တဈစီး ဝေးကှာသှားတော့သညျ။ လှမြေားတှငျ အသကျကယျစားစရာမြား အခကျြပွမီးမြား ရမြေား ထညျ့သှငျး ပေးထားပွီးဖွဈသညျ။ သို့သျော ကံဆိုးပစှေ။ ပငျလယျပွငျသညျကား အမွဲအစိုးရနသေညျမဟုတျပေ။
ခုန ကွညျ လငျနသေော ပငျလယျပွငျကွီးသညျ ရုတျခညျြးပငျ မဲမှောငျလာကာ လှိုငျးကွီးမြား ကွီးလာတော့သညျ။ လှပေျေါ ရှိ ခရီးသညျမြားသညျလညျး လှပေျေါက လှငျ့မကရြေး လှပေျေါရှိကွိုးမြားဖွငျ့ လကျကောကျဝတျကို ခညျြနှောငျ ကာ အသကျလုကွလတေော့သညျ။ မုနျတိုငျးတိုကျခတျခွငျးမဟုတျဘဲ လပွေငျးသာတိုကျခတျခွငျးဖွဈသဖွငျ့ နာရီပိုငျးအတှငျးမှာပငျ သူမဟုတျသလို ပွနျလညျငွိမျသကျသှားသညျ့ ပငျလယျပွငျကွီးမှာ ဆနျးကွယျပစှေ။ ကိုလငျး ခေါငျးထဲတှငျ မူးဝနေောကျကြိနသေညျ။ ပါးစပျထဲမှလညျး အလှနျငံလှသညျ့ အရသာကွီးက ကွီးစိုးနသေညျ။ ကိုယျတှလေကျတှတေဈကိုယျလုံး ကိုကျခဲနသေညျ။ သူ့ကိုယျသူ ဘယျကို ရောကျလို့ ရောကျ နမှေနျးလညျး မသိ။ လူတဈကိုယျလုံး ပူခွဈတောကျနသေညျကို သတိထားမိသညျ။ ကောငျးကောငျး သတိရလာ တော့မှ သူ သောငျပွငျကွီးတဈခုပျေါမှာ အိပျပြျောနသေညျပဲ။
သခြောပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့ ညကလား ဟိုတနညေ့ကလား မသခြော။ သင်ျဘောမွုပျသညျ။ အသကျကယျလှနှေငျ့ လူအပွညျ့ပါလာသညျ။ မုနျတိုငျးတိုကျတာလားဘာလားမသိ။ တခြို့ ကကြနျြရဈခဲ့သညျ။ တခြို့ လှကေိုဖကျတှယျထားသညျ။ သူတို့တှရေော ဘယျမှာလညျး မသိ။ ဘေးဘီကို သတိထားကွညျ့တော့ ပစ်စညျးတခြို့ တဈစစီ ပွနျ့ကြဲနသေညျ ကိုသာ တှရေ့သညျ။ အငျး ကြှနျးတဈခုခုပျေါ ရောကျနတောလား၊ ဘယျနိုငျငံနယျနိမိတျထဲမှာလဲ၊ ကမျးရိုးတနျး လား မသခြော။ လောလောဆယျ ဗိုကျတအားဆာနသေညျ။ ဘာစားလို့ရမလဲ စဉျးစားသညျ။ ကြှနျးဆိုတော့ အုနျးပငျကတော့ ပေါသညျ။ အုနျးသီးစားပွီးအသကျဆကျလို့ ရနိုငျသညျပဲ။ အသကျတော့ မသလေောကျပေ။ ဒါနဲ့ပဲ အားယူပွီးထလိုကျသညျ။ သူ့တဈကိုယျလုံးလဲ စုတျပွဲပရေနေပွေီ။ အို ကြှနျးပျေါမှာ လူရှိတော့ လညျး တောငျးဝတျတာပေါ့၊
မရှိတော့လဲ မဝတျ ဘာဖွဈတာမှတျလို့။ ရှကျစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒီလိုမြိုး တှေး လိုကျသညျ။ သူနဲ့အတူ ကြှနျးပျေါရောကျလာသညျ့ ပစ်စညျးမြားထဲမှ အသုံးဝငျမညျ့ ပစ်စညျးမြား ပါလမေလား လိုကျရှာကွညျ့သညျ။ အမှိုကျကောကျသမားလို ရှိသမြှပစ်စညျး အကုနျယူသညျ။ အသုံးမတညျ့လောကျသညျ့ ဘရာစီယာလိုဟာမြိုးတော့ လှငျ့ပဈလိုကျသညျ။ နောကျဆုံးတော့ သူ့ဆီမှာ ပစ်စညျးအခြို့ပိုငျဆိုငျသှားသညျ။ အသုံးအတညျ့ဆုံးက ၉ မမ လူဂါပစ်စတို တဈလကျနှငျ့ ကညျြဆနျ ၁၀၀ ခနျ့ ပါသညျ့ အိတျတဈလုံးဖွဈသညျ။ အိတျက ရထေဲနဈရမညျဖွဈသျောလညျး အသကျကယျအင်ျကြီနှငျ့ ခြိတျနသေဖွငျ့သာ လှိုငျးပုတျကာ ဒီနရောသို့ လာတငျနခွေငျးဖွဈသညျ။ ဓားမွှောငျ တဈလကျ၊ ခပျစုတျစုတျ မှနျပွောငျးတဈလကျ၊ လပေေါကျထှကျသှားသညျ့ အသကျကယျလှေ တဈစီးတို့ပငျ တညျး။
အသကျကယျလှကေ တဈခြိနျခြိနျမှာ အသုံးတညျ့လာနိုငျသညျ။ အသကျကယျလှတှေငျ လအေိုးတဈလုံး တှဲလကျြပါသျောလညျး လကေ တဈခါသုံးဖွဈသဖွငျ့ ကုနျသှားပပွေီ။ တှဲလြှကျ တပျဆငျထားသော Survival Kit အတှငျးမှ စညျသှတျအလုံပိတျထားသညျ့ သောကျရသေနျ့ဘူးအခြို့၊ အရညျပြျောနသေညျ့ သကွားလုံး အထုပျ အနညျးငယျလညျး တှရေ့သညျ။ အသုံးအတညျ့ဆုံးမှာ မီးကညျြတှဲ ဖွဈသညျ။ အကယျလို့သာ အနီးအနားမှ သင်ျဘော တဈစီးစီး ဖွတျသနျးသှားသညျရှိသျော အကောငျးဆုံးမိတျဆှအေဖွဈ ရပျတညျပေးမညျ့ ပစ်စညျး တဈခု ဖွဈနသေညျ။ စားစရာကတော့ အရေးတကွီး လိုအပျနပွေီ။ ရှိသမြှအားအငျကို စုစညျးကာ အုနျးပငျခွရေငျးသို့ ဒယိမျး ဒယိုငျ လြှောကျသှားလိုကျမိတော့ ကံကောငျးထောကျမစှာ အုနျးသီးအကွှမြေားကို တှရေ့သညျ။ ဓားမွှောငျဖွငျ့ ဖောကျကာ တဝကွီး စားပဈလိုကျပွီး သဲသောငျပွငျပျေါတှငျ အိပျပြျောသှားလတေော့သညျ။
အိပျရာက နိုးလာတော့ ကိုလငျး အနညျးငယျ လနျးဆနျးလာသညျ။ သို့နှငျ့ ပစ်စတိုကို ကညျြထိုးကာ ခါး တှငျ တပျလိုကျပွီး ကြှနျးပတျလညျ လြှောကျကွညျ့မိသညျ။ ကြှနျးက အတျောအသငျ့ကွီးသညျ့ ကြှနျး ဖွဈဖို့မြား သညျ။ အပျေါက စီးမိုးနသေညျ့ ကြောကျတောငျမြားကို မွငျရသညျ။ ဆယျမိနဈခနျ့ လြှောကျလိုကျရာ ကမျးစပျ တှငျ တဈစုံတဈခုကို တှလေို့ကျသညျ။ လူလား ပစ်စညျးတဈခုခုလား မသိ။ ထို့ကွောငျ့ သနေတျကို အသငျ့ခြိနျ ကာ အနားကပျသှားတော့ သခြောစှာ မွငျလိုကျရသညျက လူ။ အသကျ နှဈဆယျ မပွညျ့လောကျသေးသညျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ။ အသားအရကေ ဖွူနုနသေညျ။
ကိုလငျး အသကျရှူ မှားမတတျ ဖွဈသှားရသညျ။ ထို မိနျးကလေးက ဒူးဆဈလောကျသာရှိမညျ့ စကတျတိုလေးနငျြ့ အကငြ်္ီ လကျတို လညျဟိုကျကို ဝတျဆငျထား သညျ။ စကတျမှာ လတေိုကျသဖွငျ့ အထကျသို့လနျနရော တငျပါးလုံးလုံးလေးမြားကို မလုံ့တလုံ ဖုံးထားသညျ့ ပငျတီ အပွာရောငျလေးကို အထငျးသား မွငျနရေသညျ။ အသကျရောရှိသေးရဲ့လား မသိ ။ သသှေားလြှငျ နှမြောစရာ ဂလု။ ကိုလငျး သခြောအောငျ နှာခေါငျးနားကို လကျဖွငျ့ စမျးကွညျ့သညျ။ လကျကောကျဝတျကွော ကို စမျးကွညျ့သညျ။ အသကျရှူသေးသညျ နှလုံးခုနျသေးသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထိုမိနျးကလေးကို ကြောတှငျပိုးကာ သူ့ပစ်စညျးမြား စုပုံထားရာနရောသို့ ချေါသှားလိုကျသညျ။ မိနျးကလေးက သတိမရသေး။ ထို့နောကျ မိနျးကလေးကို ရဘေူးထဲမှ ရဖေောကျကာ ပါးစပျထဲသို့ လောငျးခပြေးလိုကျသညျ။ ရအေေးအေး ပါးစပျထဲသို့ ဝငျသှားသောအခါ မိနျးကလေး အနညျးငယျလူးလှနျ့လာသညျ။
သူမ သတိ ကောငျးကောငျးရလာသောအခါ သူမဘေးတှငျ ထိုငျနသေော ကိုလငျးကို ကွညျ့ကာ ထိတျလနျ့တကွားဖွငျ့ “ဟငျ ရှငျ ရှငျ ဘယျသူလဲ ရှငျ အနားမကပျနဲ့နျော ကြှနျမ အသကျခငျြးလဲပဈလိုကျမှာ´´ ဟု အျောလတေော့သညျ။ ရျော ခကျတော့ ခကျပေ ပွီ။ သူ့အသကျကို ကယျခဲ့သညျကိုမှ မထောကျလခွေငျးဟု ကိုလငျး ဒေါဖောငျးသှားသညျ။ “ဒီမယျ ဒီမယျ အမိ စှတျပွောမနနေဲ့ မငျး ဟိုဘကျနားက ကမျးစပျမှာ မနေ့တောတှလေို့ ငါထမျးလာတာကှ။ ငါက သင်ျဘော နဈပွီး ဒီကို ရောကျလာတာ။ မငျးကရော ဘယျလိုရောကျလာတာလဲ´´ ထိုမိနျးကလေး အနညျးငယျ အခြိုး ပွောငျးသှားသညျ။ “ အို မသိလို့ပွောမိတာပါရှငျ ကြှနျမလဲ သင်ျဘောနဈပွီး ရောကျလာတာပါ၊ သင်ျဘောနဈပွီး မုနျတိုငျးကတြာပဲ ကြှနျမမှတျမိလိုကျတယျ´´ ကိုလငျး အနညျးငယျ သနားသှားသညျ။ သူလညျး ဒုက်ခသညျ ကိုယျလညျး ဒုက်ခသညျ ဖွဈနသေညျကိုး။
“ ဒါဆိုရငျ ငါတို့နှဈယောကျပဲ ရှိနတောလား၊ တခွားလူတှေ ရှိနေ သေးလား မသိဘူး။ လိုကျရှာကွညျ့ရအောငျ´´ “ဟုတျကဲ့အဈကို ကြှနျမနာမညျက ဖူးပှငျ့ဝပေါ ဖူးဖူးလို့ ချေါပါ တယျ အဈကို့နာမညျက…´´ “အဈကို့နာမညျက လငျးကိုကို အားလုံက ကိုလငျးလို့ပဲ ချေါကွတယျ´´ “ ဟုတျ´´ သူမမကျြနှာမှာတော့ စိုးရိမျစိတျ အပွညျ့နဲ့ပါ။ ကြှနျးတဈကြှနျးထဲမှာ ယောကငြ်္ားနဲ့ မိနျးမ နှဈယောကျ တညျးဆိုတော့ ကွောကျရှာမှာပေါ့လေ။ သူမကိုယျသူမ ငုံ့ကွညျ့တော့လညျး စကတျတိုလေးက အောကျနား တှေ စုတျပွတျနပွေီး ပေါငျလယျအထိ ပျေါနပွေီ၊ အပျေါပိုငျးကတော့ ပွောပလောကျအောငျ မဆိုးသေး။ ကိုလငျး ဖောကျကြှေးသော အုနျးသီးမြားကို အဝစားလိုကျကာ ကြှနျးပတျလညျ လိုကျကွညျ့သညျ။ ဘာမှ မတှေ့။ အခြိနျ က ညနစေောငျးနပွေီ။ ထို့ကွောငျ့ အိပျရာပွငျရသညျ။
အိပျစရာ စောငျလညျးမရှိ ခေါငျးအုံးလညျး မရှိ။ ဒါ့ကွောငျ့ အုနျးလကျခွောကျတှကေို စုပုံကာ ကြောကျခဲနှဈလုံး ခတျ မီးရှို့ရသညျ။ မီးရှို့ရသညျကလညျး လှယျ သညျတော့ မဟုတျ။ နာရီဝကျလောကျ ကွိုးစားလိုကျမှ မီးပုံတဈပုံ ဖွဈလာသညျ။ မီးပုံဖိုထားသဖွငျ့ အနားမှ သင်ျဘောမြား ဖွတျသှားလငျြလညျး မွငျသာမညျလေ။ ကြှနျးပျေါမှာ တောရိုငျးသတ်တဝါမြား ရှိလငျြလညျး အကာ အကှယျရမညျ၊ အနှေးဓာတျလညျး ရမညျ။ ထိုအခြိနျကမြှ ပွဿနာအကွီးအကယျြ တကျတော့သညျ။
မီးပုံဘေးမှာက ဖိုနှငျ့ မ နှဈယောကျတညျး။ ဒီနရောမှာ ကိုလငျးက ဖူးဖူးကို အဓမ်မကွံစညျလိုကျရငျတောငျ ဘာမှမတတျနိုငျ။ မာနျလြှော့ရမညျသာ။ သို့သျော ကိုလငျးက မုဒိနျးသမားမဟုတျ။ ဒီလိုတော့ မလုပျဝံ့။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆူဝလောသညျ့ သှေးမြားကို မနညျး အေးအောငျ ထိနျးနရေသညျ။ ကိုလငျးက ကငျးစောငျ့ကာ ဖူးဖူးကို ဘေးတှငျ အိပျစရေသညျ။ ဖူးဖူး တျောတျော နှငျ့ အိပျမပြျောပေ။ သို့သျော မြားမကွာမီ အိပျပြျောသှားသညျ။ တျောတျောကွာတော့ ကိုလငျးလညျး မစောငျ့နိုငျတော့ ။ ဖူးဖူးဘေးမှာပငျ လှဲအိပျလိုကျရသညျ။ ဖူးဖူး အိပျမကျလိုလို တကယျလိုလို ဖွဈနသေညျ။ သူမကို လူတဈယောကျ ဖကျထားသညျ။ သူမ အိပျရာမှ လုံးလုံးလြားလြား နိုးလာသညျ။ သူမကို ဖကျထားသညျက ကိုလငျး။ သူက ဖကျထားရုံမြှမက သူမ၏ ညာဘကျ ရငျသားတဈဖကျကို ကိုလငျးလကျက အုပျကိုငျထားသညျ။ ပထမ သူမရုနျးမလို့ ကွံစညျသေးသညျ။
သို့သျော ကိုလငျးက ကိုငျရုံသာ ကိုငျထားပွီး ဟောကျသံထှကျကာ အိပျပြျောနသေူပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ သူမ မရုနျးတော့ပဲ ငွိမျငွိမျလေးသာ ဆကျနလေိုကျမိတော့သညျ။ သူမရငျထဲတှငျလညျး ရငျခုနျသံ တဒိနျးဒိနျး ခုနျနသေညျ။ သူမ၏ ဘယျဖိုသတ်တဝါမှ မထိဖူးသေးသညျ့ ရငျသားနုနုလေးကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျအုပျကိုငျကာ အိပျပြျောနသေူကား သူမ၏ အသကျသခငျ ကိုလငျးဖွဈနသေောကွောငျ့ပငျ။ ရငျထဲမှာ အမညျမဖျောပွနိုငျသော ဝဒေနာတဈရပျက ကွီးစိုး နသေညျ။ သူမ၏ ပေါငျကွားက မီးတောငျဝကလေးမှလညျး ခြျောရညျမြား တသှငျသှငျ စီးဆငျးနပွေီ။ ကိုလငျးကတော့ သိပုံမရ။ သူမ လကျကလေးကို ပေါငျကွားထဲထညျ့ကာ ပှတျနမေိသညျ။ လှတျလှတျလပျလပျ မဟုတျသဖွငျ့ အဆငျမပွလှေ။ သူမ တဈခကျြတဈခကျြ တုနျခါသှားမိသျောလညျး ကိုလငျး နိုးသှားလြှငျ သူမ ဘာလုပျနသေညျကိုလညျး သိသှားမညျစိုးရိမျနမေိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူမ မသိမသာလေးသာ ပှတျနမေိသညျ။ တဈခါမှ ဒီလိုမပှတျဖူး။ ကငျြကနဲ ကငျြကနဲ အမညျဖျောမရသညျ့ အရသာတဈခုကွီးစိုးနသေညျကိုတော့ သိသညျ။
မနကျမိုးလငျးတော့ စောစောစီးစီး အုနျးရညျသောကျ အုနျးသီးစားလိုကျကွပွီး ကိုလငျး၏ ဦးဆောငျ မှု ဖွငျ့ ကြောကျတောငျ မွငျ့မွငျ့ကွီးမြားပျေါသို့ တကျလာခဲ့သညျ။ ကိုလငျးလကျကို ကိုငျကာ လိုကျတကျရသညျ။ လှယျတော့ မလှယျလှ။ ခြျောမကအြောငျ မနညျး သတိထားနရေသညျ။ မညျမြှပငျ သတိထားစကောမူ တဈခကျြ တော့ ခြျောကသြှားလိုကျသေးသညျ။ ကိုလငျးက သတိရှိသညျ။ ဖူးဖူးလကျကို လုံးဝမလှတျဘဲ ခကျြခငျြး ဖမျးဆှဲ လိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ အားယူကာ ဆှဲတငျလိုကျရာ ကိုလငျးရငျခှငျထဲသို့ ရောကျသှားတော့သညျ။ ကိုလငျးက ခါးကို ခပျတငျးတငျး ဖကျထားရာ သူမ၏ ထှားထှားနုနု ရငျသားတဈစုံနှငျ့ ကိုလငျး၏ ရငျအုပျကားကားကွီးတို့ ရငျတိုကျမှုဖွဈသှားသညျ။ သူမ ရငျတှေ တဒိတျဒိတျ ခုနျသှားသလို ကိုလငျးမှာလညျး အောကျက တငျးမာလာ တော့သညျ။ သို့သျော သူတို့ရောကျနသေညျ့နရောက တောငျပျေါကို ခဲရာခဲဆဈ တကျနရေသညျ့ လမျးကွောငျးမှာ။
တဖွညျးဖွညျး တကျသှားရာ တောငျထိပျရောကျသှားတော့ ပတျဝနျးကငျြကို စီးမိုးကာ မွငျနေ ရသညျ။ တောငျမှာ နှဈခွမျးဖွဈနပွေီး အလယျမှာ ခြောကျတဈခု ခံနသေညျ။ ကြှနျးသညျ သိပျမကယျြလှသလို သိပျလညျး မကဉျြးလှပေ။ သို့သျော သုံးမိုငျလောကျ ရှညျလြားမညျ့ ကြှနျးတနျးတဈခုဖွဈနသေညျ။ ပတျဝနျးကငျြ တှငျလညျး ကြှနျးမြားမတှရေ့။ လူရိပျလူခွလေညျး မမွငျရ။ တောအုပျကဲ့သို့ စိမျးစိုနသေညျ့ ဒီရတေောတဈခု ရှိ နသေညျ။ တောရှိလငျြ မြောကျ တော့ အနညျးဆုံး ရှိမညျထငျသညျ။ သတိတော့ လကျလှတျလို့မရ။ အန်တရာယျ လညျး ရှိနိုငျသညျ။ သောကျသုံးရခြေိုတော့ ရဖို့မသခြော။ ပတျလညျက သောငျပွငျဖွဈနသေညျ။ ခြောကျကမျးပါး အောကျမှာ ရှိနရေငျတော့ မပွောတတျ။ ခြောကျထဲဆငျးရနျ လမျးရှာကွညျ့တော့ ကံကောငျး ထောကျမစှာ ခြောကျကမျးပါးတှငျ ပေါကျနသေညျ့ အပငျမြားကို တှယျဆငျးလငျြ ရနိုငျသညျကို သတိထားမိသှား သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ခြောကျကမျးပါးထဲသို့ တှယျကပျ ဆငျးရနျ ပွငျဆငျရတော့သညျ။
ကိုလငျးက ခွလေငျြ တောငျတကျ အသငျးဝငျဖူးသူမို့ ပွဿနာမရှိလှ။ ဖူးဖူးက အဆငျပွပေါ့မလား။ မတတျနိုငျပါ။ သူ့ကို တောငျ ထိပျမှာ ထားခဲ့ရအောငျကလညျး တခုခု ဖွဈလြှငျ သူအမွနျပွနျတကျကယျဖို့ မလှယျကူလှ။ ထို့ကွောငျ့ သူမကို မရ ရအောငျချေါရတော့သညျ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆငျးကွညျ့တော့ ခြောကျက သိပျမနကျလှပါ။ ပေ ၇၀ လောကျသာ ရှိသညျ။ အောကျရောကျတော့ အပွငျမှာလောကျတော့ မလငျးပေ။ မွငျရသညျဆိုရုံမြှသာ ရှိသညျ။ ဖူးဖူးက မှောငျနသေဖွငျ့ ကွောကျလနျ့နသေညျ။ ခြောကျထဲသို့ရောကျတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ လိုကျရှာကွညျ့မိသညျ။ ဂူပေါကျတဈခု။ သခြောအောငျကွညျ့ သညျ။ ဟုတျသညျ။ ဂူပေါကျတဈခု။ ဂူပေါကျထဲသို့ ဝငျရနျ အလငျးရောငျက မရှိ။ ဒါနဲ့ လှကေ ဖွုတျယူလာ သော Survival Kit ထဲ ဓာတျမီးတဈလကျလောကျမြား ပါလမေလား ထပျရှာကွညျ့သညျ။ တှပေ့ါပွီ။ ဓာတျမီး အပွငျ မီးခွဈနှငျ့ ရလေုံထုပျထားသညျ့ ရနေံဆီမီးခှကျတဈခု။ အငျး အဆငျတော့ပွပွေီ။ ရနေံဆီမီးခှကျကတော့ ဂူထဲမှာ အောကျစီဂငျြမရလငျြ အသုံးမတညျ့သညျ့အပွငျ ဒုက်ခပါ ပေးနိုငျသညျ။ မနကေ့ အလောတကွီး သခြော မရှာဘဲ ကြောကျတုံးနှငျ့ နာရီဝကျလောကျ မီးခတျလိုကျရသဖွငျ့ သူ့နဖူး သူရိုကျမိသညျ။
ဂူထဲသို့ ဓာတျမီးဖွငျ့ ထိုးဝငျလိုကျသညျ။ သနေတျကိုတော့ အသငျ့ခြိနျထားရသညျ။ ဘာကောငျတှေ ရှိ နမေညျဆိုတာ မသခြော။ ဖူးဖူးက သူ့အကငြ်္ီစကို တငျးတငျးဆှဲကာ အနောကျမှ လိုကျလာသညျ။ သခြောစှာ သတိထားနရေသညျ။ ဂူပေါကျက အဝငျဝ လူတဈကိုယျစာမြှသာ ရှိသျောလညျး အထဲရောကျတော့ အတနျအသငျ့ ကယျြဝနျးလာသညျ။ အောကျစီဂငျြ ကောငျးစှာရလို့ထငျသညျ။ မီးကမငွိမျး။ ဒါဆို ပွသနာ မရှိ။ ကယျြဝနျးသညျ့နရောက မွပွေနျ့လေး။ အငျး ဒီနရောမှာ လူနလေို့ရမလားပဲပေါ့။ ဟိုဘကျကို ဆကျထှကျသညျ့ အပေါကျ တဈခု ရှိနသေညျ။ ထိုအပေါကျဖကျကို ဆကျသှားလိုကျသညျ။ ကိုငျထားသညျ့ မီးခှကျက ဒီအတိုငျးပငျ။ သှားရငျး လမျးပိတျသှားပွီ။ သို့သျော ဒီအတိုငျး အပိတျမဟုတျ။ ကြောကျတုံးကွီးတဈတုံးက ပိတျဆို့နသေညျသာ။ ကြောကျတုံးကို တှနျးဖှငျ့လြှငျ လမျးရှိလအေုံးမလား။
ကိုလငျး တဈခကျြတှနျးကွညျ့သညျ။ တုတျတုတျမြှမလှုပျ။ ခပျပွငျးပွငျး ထပျတှနျးကွညျ့တော့ အနညျးငယျ လှုပျသှားသညျ။ ကိုလငျး နညျးနညျး အား တကျသှားသညျ။ ဖူးဖူးကလညျး ဝိုငျးတှနျးသညျ။ တဈခါ….. နှဈခါ…. သုံးခါ…. ပိုပိုပွီး လှုပျလာသညျ။ ခဏနား လိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ထပျတှနျးသညျ တဈခါ….. နှဈခါ….. သုံးခါ….. ….. …. ……… ဆယျ့ငါးခါမွောကျတှငျ ကြောကျတုံးကွီးသညျ လမျးအတိုငျး လိမျ့ဆငျးသှားလတေော့သညျ။ သွျော ဆငျခွလြေောပဲ။ ဓာတျမီးနှငျ့ ကြောကျတုံးကွီး လိမျ့သှားရာဘကျသို့ လိုကျထိုးကွညျ့နရေငျး လငျးကနဲဖွဈသှားကာ လအေေးမြား ဝုနျးကနဲ ဆောငျ့ဝငျလာသညျ။ အေးမွသှားသညျ။ ကိုလငျး အားတကျသရော ဆငျခွလြေောအတိုငျး ဆငျးလိုကျသှားရာ ဂူပေါကျဝမှ ပငျလယျစပျသို့ ပွနျရောကျသှားလတေော့သညျ။
ကိုလငျး ထခုနျမတတျ ဝမျးသာသှားသညျ။ ဒီအ ပေါကျကနေ အပွငျကို ထှကျလို့ ဝငျလို့ရသညျပဲ။ နှဈယောကျသား အပွငျရောကျသှားတော့မှ လအေေးအေးကို အဝရှူလိုကျရတော့သညျ။ ရှဆေ့ကျ ပွီး ပတျကွညျ့တော့ နောကျထပျ ဂူပေါကျတဈပေါကျ သှားတှသေ့ညျ။ တကယျ့ ဂူပေါကျပါပဲ။ သို့သျော အထဲသို့ ပေ ငါးဆယျလောကျသာ ဝငျသညျ။ အပိတျ။ ထိုထဲသို့ ပငျလယျရေ က ဝငျသညျ။ ရတေကျ ရကြေ ရှိသညျ။ သူ တို့နှဈယောကျသား ပငျပနျးလှပွီ။ ပွနျလာလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးကို တဈနရောတှငျ ထိုငျခိုငျးထားပွီး ကိုလငျးက ရေ စပျသို့ဆငျးကာ ဂုံးခရုမြား ကောကျသညျ။ ကွားတော့ ဖူးဖူးပါ မနနေိုငျတော့။ သူမပါ ဝငျကောကျတော့သညျ။ အတျောမြားမြား ရပါသညျ။
ဖူးဖူးက ကိုလငျးရှမှေ့ ကုနျးကုနျးကှကှနှငျ့ ကောကျနရော ကိုလငျးလညျး ဝါသနာ အရ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ကွညျ့လိုကျသညျ။ အောကျစမြား ဖှာနသေော စကတျ တိုတိုကွောငျ့ ကုနျးလိုကျရာတှငျ ပငျတီအပွာရောငျလေးကို ထငျးကနဲ မွငျနရေသညျ။ ကိုလငျး စိတျတှေ ထလာသညျ။ သို့သျော ပွနျထိနျး လိုကျရသညျ။ ဒုက်ခသညျ အခငျြးခငျြးပဲလေ။ ပငျလယျစပျမှာပငျ ခရုမြားကိုခှာကာ အုနျးလကျတံမြားဖွငျ့ သီပွီး မီးကငျရသညျ။ စားလညျးစားသညျ။ နဖေို့ညစာလညျး ခနျြထားသညျ။ ပွီးနောကျ သူတို့ဆငျးလာသော လမျးကွောငျးမှ ဂူထဲ ပွနျဝငျသှားတော့ သညျ။ ဂူထဲကို ဝငျတော့ ဓာတျမီးသုံးစရာ မလိုတော့။
သူတို့ နားနမေညျ့ အကှလေ့ေးထားအထိ လငျးနေ သညျ။ အထဲကို ကှဝေ့ငျတော့မှ မီးထိုးရသညျ။ ဒီညတော့ မီးခှကျရှိသညျပဲ။ မီးပုံဖိုစရာလညျး ထငျးက ပါမလာ။ နောကျနအေ့ပွငျထှကျရငျတော့ ထငျးပါ ရှာယူရမညျ။ အိပျရမညျ့နရော ကွညျ့တော့မှ စိတျညဈသှားသညျ။ ကြောကျသားဖွဈသဖွငျ့ အေးကလညျးအေးသလို ညီညီညာညာလညျး မရှိ။ အိပျပြျောမညျ့ပုံ မပျေါ။ အောကျကိုပွနျဆငျးကာ အုနျးလကျခွောကျမြား နိုငျသလောကျ သယျလာရသညျ။ အုနျးလကျမြား ထူထူ ခငျးလိုကျတော့မှ အကောငျးစားမှရေ့ာဖွဈသှားတော့သညျ။ ကိုလငျးက “ ဖူးဖူး ဒီညတော့ ဖူးဖူးဘေးမှာ ကိုလငျး အိပျမယျနျော´´ ဟု ပွောရာ ဖူးဖူးက “ ဟှနျ့ ညကရော မအိပျတာကနြတောပဲ´´ ဟု ပွနျပွောလိုကျ သညျ။ ကိုလငျး ဖူးဖူးနားတှငျ လှဲအိပျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးဘကျသို့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလြှကျ။ ထို့နောကျ ဘာမပွော ညာမပွော ဖူးဖူး၏ နာမညျနှငျ့လိုကျအောငျ လှပအိစကျနသေညျ့ နှုတျခမျးလှလှကလေးကို စုပျကာ နမျးပဈလိုကျ သညျ။ ဖူးဖူး တှနျ့သှားသညျ။ မထငျမှတျထားသညျပဲလေ။
မကျြလုံးလေး မှေးစငျးသှားသညျ။ ပွီးတော့မှ ကိုလငျးကို “ကိုလငျး လှနျပွီကှာ သူ့ရညျးစားလဲ မဟုတျဘဲနဲ့ လူကို လာနမျးနတေယျ မကောငျးဘူး´´ “ခဈြ လို့ပါ ဖူးဖူးရယျ ကိုလငျးလေ ဖူးဖူးကို စတှတေဲ့နကေ့တညျးက ခဈြနမေိပွီသိလား၊ ဒုက်ခသညျအခငျြးခငျြးဆို တော့ ပွောရမှာ အားနာလို့ပါ အခု ပွောပွီနျော ကိုလငျး ဖူးဖူးကိုခဈြတယျ´´ “ကိုလငျးကလညျး ဖူးဖူးကို တှေ့ တာတောငျ နှဈရကျပဲရှိသေးတယျ တနျးပွီး ခဈြသှားရောလား စဉျးစားပါရစအေုံး´´ “ ဖူးဖူးရယျ ဘယျလောကျ စဉျးစားအုံးမှာလဲ အခုဆို ဒို့နှဈယောကျလုံး လူမရှိသူမရှိ ကြှနျးပျေါမှာ နှဈယောကျတညျးလေ၊
ကိုယျ့ရပျဌာနေ ကို ပွနျဖို့ဆိုတာ စဉျးစားလို့တောငျမရဘူး ဘာဖွဈမယျဆိုတာ မသိသေးဘူး´´ “ကိုလငျးရယျ… ´´ ဖူးဖူး တှဝေသှေားသညျ။ ဘယျနဘေ့ာဖွဈမယျမှနျးမှ မသိတာ ဆိုတာထကျ ကြှနျးပျေါမှာ ဘယျလောကျတောငျ သောငျတငျနအေုံးမညျမသိနိုငျသညျ့ ဖိုနှငျ့ မ လူသားနှဈဦးတညျး ဖွဈနတောကို တှေးမိကာ ရငျခုနျသှားခွငျး ဖွဈသညျ။ ကိုလငျးက သူမမကျြနှာကို သသေခြောခြာ စိုကျကွညျ့နသေညျ။ သူမ ကိုလငျးကို ပွနျပွောလိုကျမိ သညျ။ “ဒါဆို ကိုလငျး ဖူးဖူးကို ကတိပေးရမယျနျော ဖူးဖူးအလိုဆန်ဒမပါဘဲ ဖူးဖူးကို ဘာမှ မလုပျပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိ´´ ။ ကိုလငျးလညျး မွနျမွနျထကျထကျ ကတိပေးလိုကျသညျ။ သူမ အလိုတူရငျတော့ ဖွဈနိုငျသညျပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီညကတော့ စောစောအိပျပြျောအောငျသာ ကွိုးစားရတော့သညျ။ သူရော သူမပါ စောစော အိပျပြျောလိမျ့ မညျတော့ မထငျ။ ဖူးဖူးကလညျး သကျပွငျးမြား အကွိမျကွိမျခလြှကျ။ ည သနျးခေါငျကြျောတော့ နညျးနညျး အေးလာသညျ။ နှဈယောကျစလုံးမှာ စောငျမရှိ။ ခမျြးလာသဖွငျ့ ဖူးဖူးက ကိုလငျးဘကျကို တိုးလာရာ ကိုလငျး ပေါငျကွားမှ မာနသေညျ့ ဒုတျနှငျ့ ဖူးဖူး တငျပါးမြား မိတျဆကျလတေော့သညျ။ ကိုလငျးကလညျး အလောသုံး ဆယျ မလုပျရဲ။ ကိုလငျး၏ ဒုတျက ဖူးဖူး တငျပါးနှဈလုံးကွားထဲသို့ ကကြနြန ထောကျမိနသေညျ။ အိပျမပြျော သော ဖူးဖူး တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားသညျ။
သို့သျော မသိခငျြယောငျဆောငျကာ ငွိမျနလေိုကျသညျ။ ဒူးကို ရှသေို့ ကှေးအိပျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ကိုလငျး၏ ညီတျောမောငျမှာ ဖူးဖူး၏ ညီမလေးဆီသို့ ကကြနြန သှားမိတျဆကျ လတေော့သညျ။ စကတျတဈထပျ ပငျတီတဈထပျ ခံနသေဖွငျ့သာ ဝငျမသှားခွငျးဖွဈသညျ။ ဖူးဖူး အသကျရှူသံ ပွငျးလာသလို ကိုလငျးလညျး အတူတူပငျဖွဈသညျ။ “ကိုလငျး ဘာတှလေုပျနတောလဲ ဖူးဖူး မနတေတျတော့ ဘူးကှာ´´ ဖူးဖူးက ကတုနျကရငျအသံလေးဖွငျ့ ပွောလာသညျ။ ကိုလငျး နညျးနညျးတော့ရငျထိတျသှားသညျ။ သူက ဖူးဖူး လကျမခံဘဲနဲ့တော့ အတငျးမလုပျခငျြ။ ဒါနဲ့ “ဖူးဖူးကို ကိုယျ လကျထပျပါရစေ´´ “ကိုလငျးရယျ စဉျးစားပါအုံး ဒီလို လူမရှိသူမရှိ ကြှနျးကွီးထဲမှာမှ လကျထပျခှငျ့လာတောငျးနသေလားလို့´´
“ဖူးဖူးရယျ လကျ ထပျတယျဆိုတာ လူကွီးမိဘစုံရာနဲ့ တောငျးရမျးလကျထပျသငျ့တာကို ကိုယျသိပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုယျတို့ဘ၀ က ဒီအခကျအခဲက ဘယျအခြိနျ လှတျမွောကျမယျဆိုတာ ပွောလို့မရတဲ့အခွအေနလေေ၊ ကိုယျသိတာက ကိုယျ ဖူးဖူးကို ခဈြမိနပွေီ လကျထပျခငျြတယျကှာ၊ တကယျလို့ ကိုယျ့ရပျဌာနေ ပွနျဖွဈရငျလညျး မိဘတှကေို ထုတျဖျောပွောပွလိုကျမယျလေ ခှငျ့ပွုပါနျော´´ “ကိုလငျးရယျ…. ´´ “ဖူးဖူးလဲ ကိုလငျးကို ခဈြမိနပွေီဆိုတာ ဝနျခံပါတယျ ဒါပမေဲ့ လကျထပျဖို့အထိတော့ မစဉျးစားမိသေးဘူး ကိုလငျးရယျ´´ “တကယျလား ပြျောလိုကျ တာ ဖူးဖူးရယျ ဖူးဖူးရဲ့အခဈြကို ရသှားတာ ကိုလငျးကံကောငျးလှနျးတယျနျော´´“ကဲပါ ကိုလငျးသဘော ဟုတျ ပွီလား လကျထပျမယျနျော ဒါပမေဲ့ ဒီည ဖူးဖူးကို ဘာမှမကြူးလှနျပါနဲ့နျော ဖူးဖူး အဆငျသငျ့မဖွဈသေးလို့ပါ ပွီး တော့ ဖူးဖူးရော ကိုလငျးပါ ညဈပတျနံစျောနတောပဲလေ နောကျ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးဖွဈအောငျ အရငျလုပျပွီးမှ အတူနကွေမယျနျော´´ ကိုလငျး မကျြနှာကွီး မအီမလညျ ဖွဈသှားသညျ။ ဟုတျတော့ ဟုတျတယျလေ။
ဖူးဖူးရဲ့ ဖောငျးအိနတေဲ့ တငျနှဈလုံးကွားထဲက ထောကျထားရလို့ ငပဲက မတျနအေောငျ ထောငျနတော အေးလေ ရှိစေ တော့ ရှိစတေော့ မနကျဖွနျကမြှ တှမေ့ယျ။ ဒါနဲ့ ဖူးဖူးနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး အိပျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး၏ နှုတျခမျး အိအိလေးကို နမျးမိသညျ၊ ရငျသားနုနုလေးကို ကိုငျမိသညျ။ ဘာမှမပွော။
လကျက အောကျကို ဆကျဆငျးမယျ ကွံရငျ အတငျးပွနျဖယျသညျ။ ဒီလိုနဲ့သာ မိုးစငျစငျလငျးခဲ့ရသညျတညျး။ မနကျလငျးတော့ ထုံးစံအတိုငျး စားဖို့သောကျဖို့က အရငျရှာရသညျ။ အုနျးသီးနှငျ့ အုနျးရညျက ပေါ မြားလှသညျ မှနျသျောလညျး ဘယျသူမြှ နစေ့ဉျရကျဆကျ မစားနိုငျ။ အသားလေး ငါးလေး ရလိုရငွား လိုကျရှာ ကွရသညျ။ ဟော တှပေ့ါပွီ။ မနကေ့ ကွညျ့ခဲ့သညျ့ အပွငျက ဂူပေါကျထဲက ရကွေညျကွညျထဲမှာ ကြောကျပု ဇှနျမြား ကူးခတျနသေညျ။ အကောငျသိပျမကွီးသျောလညျး စားလို့ဝနိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကိုလငျး သူ့အကငြ်္ီခြှတျကာ ပုဇှနျခပျသညျ။ ပိုကျကှနျလို မဟုတျသဖွငျ့ သိပျတော့ အဆငျမပွေ။ သို့သျော လေးငါးခါလောကျ ကွိုး စားလိုကျလြှငျ တဈကောငျလောကျတော့ ရသညျ။
ဖူးဖူးကတော့ ပုဇှနျတဈကောငျရတိုငျး ကလေးတဈယောကျ လို ခုနျပေါကျမွူးတူး အားပေးရှာသညျ။ နှဈနာရီလောကျ ကွိုးစားပမျးစား ဖမျးလိုကျတော့ ပုဇှနျ တျောတျောမြား မြား ရလိုကျသညျ။ ပွနျထှကျလာရာတှငျ ကံဆိုးသညျ့ ဂဏနျးတဈကောငျပါ ပုဇှနျမြားနှငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈသှား တော့သညျ။ ထိုရှနေ့ားတှငျ ပုဇှနျနှာခွငျး မီးကငျခွငျး အလုပျမြားကို ဆောငျရှကျသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဖူးဖူးက ရခြေိုးခငျြကွောငျး ပူဆာသညျ။ ရခြေိုးတာက ရသညျ။ သို့သျော ရခြေိုးပွီးလြှငျ လဲစရာ အဝတျက မရှိ။ ကိုယျတုံးလုံးခြှတျခြိုးရနျကတြော့လညျး ဖူးဖူးက သဘောမတူပွနျ။ သို့သျော နောကျဆုံး တဈယောကျ ရခြေိုးလြှငျ တဈယောကျက တဈဖကျလှညျ့နပေေးကွေးဖွငျ့ အပေးအယူတညျ့သှားသညျ။ ကိုလငျးကို အရငျ ခြိုး ခိုငျးသညျ။ ကိုလငျးကတော့ ယောကငြ်္ားလေးပဲ ဘာရှကျစရာရှိတာမှတျလို့။ ပါတဲ့ ဘောငျးဘီခြှတျပဈကာ မိမှေး တိုငျး ဖမှေးတိုငျး ပငျလယျထဲ ဆငျးခသြှားသညျ။
ရခြေိုးတော့ ပငျလယျဘကျကိုလှညျ့မခြိုး၊ ကုနျးပျေါတှငျ တဈ ဖကျလှညျ့ရပျနသေော ဖူးဖူးဘကျသို့ လှညျ့ခြိုးသညျ။ ဖူးဖူး သတိလကျလှတျဖွဈကာ ကိုလငျးကို စကားပွောရနျ လှညျ့လိုကျမိသညျ။ ကုနျးပျေါက ဖူးဖူးကို နောကျကကွညျ့ကာ လောငျတီးနသေော ကိုလငျးကို ဘှားဘှားကွီး မွငျလိုကျရသောအခါ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွငျ့ ကွောငျကွညျ့နပွေီး “အာ ကိုလငျးကှာ အရှကျမရှိဘူး ဟို ဘကျ လှညျ့ခြိုးပါလားလို့´´ ပွောပွောဆိုဆို မကျြနှာကို အတငျးအုပျကာ ဆှဆှေ့ခေု့နျနတေော့သညျ။ “ဟငျး ဘယျသူက ကွညျ့ခိုငျးတာကလြို့ သူ့ဘာသာ ဟိုဘကျမလှညျ့ဘဲ လာခိုးကွညျ့ပွီး ဟဲဟဲ ကောငျမလေး ကရျော ကရျော´´ ကိုလငျးက မရှကျသညျ့အပွငျ ကရျောကရျောပငျ ပွနျလုပျလိုကျသေးသညျ။ ကိုလငျးခြိုးပွီး အဝတျလဲပွီးမှပဲ ဖူးဖူး ရခြေိုးရနျပွငျဆငျတော့သညျ။
ဖူးဖူး အဝတျခြှတျနခြေိနျတှငျ ကိုလငျးက တဈဖကျသို့ လှညျ့နပေေးသညျ။ အကွောငျးရှိသညျ။ မလှညျ့နပေေးလို့ ရမေခြိုးတော့ဘူး လုပျနေ ရငျ ပွဿနာ။ ဖူးဖူး အဝတျလဲသံ၊ ရထေဲဆငျးသှားသံ၊ ရထေဲမှာ တဘှမျးဘှမျးကူးသံကွားတော့ ကိုလငျး လှညျ့ ကွညျ့လိုကျသညျ။ ဖူးဖူးက သူ့အရှိနျနဲ့သူ ရကေူးနတေုနျး။ ကိုလငျးကွညျ့နသေညျကို သတိမရ။ နောကျမှ ကမျး ပျေါကို လှမျးကွညျ့တော့ ကိုလငျးက သူမကို ကောငျးကောငျး ကွညျ့နသေညျ။ ဖူးဖူး တအားရှကျသှားသညျ။ ကို လငျးကို ရနှေငျ့ လှမျးပကျကာ သူမ၏ ဟာလာဟငျးလငျးဖွဈနသေော စနနှေဈခိုငျနှငျ့ တွိဂံနယျမွကေို အသညျး အသနျ ကာကှယျသညျ။ လကျသေးသေးလေးက ဘယျလိုမြား လုံနိုငျပါမညျနညျး။ တဈခုဖုံးလြှငျ တဈခုပျေါ သညျသာ။ ကိုလငျး ဘာမပွော ညာမပွောနှငျ့ ရထေဲသို့ ဆငျးသှားလိုကျသညျ။ ရထေဲတှငျ ဟိုဖုံး ဒီဖုံး လုပျနေ သညျ့ ဖူးဖူးကို အတငျး ဝငျဖကျလိုကျသညျ။
“ဖူးဖူးရယျ ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာ´´ “အို ကိုလငျး ဘာလုပျ တာလဲ မလုပျပါနဲ့ ဖူးဖူးရှကျတယျ´´ “ဖူးဖူးရယျ မရှကျပါနဲ့ ဒီကြှနျးပျေါမှာ ကိုလငျးနဲ့ ဖူးဖူး နှဈယောကျပဲ ရှိ တာလေ ကိုလငျးက ဖူးဖူးရဲ့ ခဈြသူပဲ ဖူးဖူး ကိုယျ့ကို အလိုမလိုကျရငျ ရထေဲက ပွနျမတကျတော့ဘူးနျော´´ “ ကိုလငျး မဆိုးနဲ့ကှာ နျော နျော ညကမြှ ကိုလငျးသဘော နျော´´ ကိုလငျး အာမခံခကျြ ရသှားပွီဆိုတော့ ပွနျလှတျပေးလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးလညျး ကွာကွာမခြိုးတော့၊ ကမနျးကတနျး ပွနျတကျပွီး အဝတျပွနျဝတျတော့ သညျ။ ပွီးတော့ အခမျြးပွေ နဆောလှုံရငျး ပုဇှနျကငျနှငျ့ အုံးရညျသောကျကာ ဇိမျကနြကွေသညျ။ သို့သျော ပငျလယျရေ အစှမျးပွပွီ။ ဓာတျဆားပေါငျးစုံ ပြျောဝငျနသေော ပငျလယျရကေ သူတို့အသားအရကေို စေးကပျ ကပျ ဖွဈနစေသေညျ။ အနရေခကျလှသညျ။
နကေပူလာတော့ ဆားတှပေါ ပှငျ့လာသညျ။ မဖွဈခတြေော့ ရခြေို ရှာရတော့မညျ။ ဟုတျပွီ ခြောကျထဲမှာရခြေိုအိုငျမြားလားပဲ သှားကွညျ့အုံးမှပါ။ သူတို့ ရခြေိုးဖို့ ရသေောကျ ဖို့ ရခြေို မဖွဈမနေ လိုအပျနသေညျ။ နှဈယောကျသား ဂူထဲ အသညျးအသနျပွနျဝငျကာ ခြောကျဖကျသို့ ပွနျထှကျ သညျ။ ခြောကျကွီးထဲရောကျတော့ ရအေိုငျကို ကမနျးကတမျးပွေးကာ ပါးစပျဖွငျ့ သောကျကွညျ့သညျ။ ရငျထဲ အေးမွသှားလိုကျသညျ ဖွဈခငျြး။ ရခြေိုမှ ရခြေိုစဈစဈ။ သူတို့ ရောကျသညျ့အခြိနျကစလို့ အခုထိ အသကျကယျအိတျမှ ရဘေူးမြားကိုသာ သောကျသုံးနကွေသညျ။ အုနျးရညျသောကျနရေတော့ ရမေဆာတာ လညျး ဖွဈနိုငျသညျ။
ရကေ ဒီအတိုငျးပဲ အသလေား အရှငျလား ပွနျကွညျ့သညျ။ အရှငျဗြ၊ အရှငျ။ မွကွေီးထဲမှ အလိုလို စိမျ့ထှကျနကော ဟိုဘကျက ရထှေကျပေါကျတဈပေါကျထဲသို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးစီးဆငျးနသေညျ။ ထို ရထှေကျပေါကျကတော့ ဘယျနရောနှငျ့ ဆကျနသေညျလညျး မပွောတတျပေ။ ဖူးဖူးရော ကိုလငျးပါ အဆငျပွေ သှားသညျ။ ခြိုးရရေော သောကျရပေါ ရပွီ။ ရောကျကတညျး ဖောကျဖောကျသောကျပွီး လှငျ့ပဈထားသော ဘူး ခှံမြား အသုံးဝငျခတြေော့မညျ။ နောကျနေ့ ပွနျယူလာပွီး ရအေပွညျ့ ဖွညျ့ထားရမညျ။ ဒီတဈခါတော့ ဖူးဖူးကို ဦးစားပေးလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးက အရငျဆငျးခြိုးသညျ။ ကိုလငျးပါ လိုကျဆငျးတော့ ဖူးဖူး ဘာမှမပွောတော့ပေ။ ကိုလငျးကလညျး ဖူးဖူး ညကရြငျ ကိုလငျးသဘောဆိုတာကို ယုံစားကာ လောငျတီး နရေုံမှ တပါး ဘာမှ မလုပျရဲ။
ညကမြှ လကျမခံတော့ရငျ ငတျမှာစိုးလို့။ နှဈဦးသား ရခြေိုးလိုကျတော့ လနျးပွီး သနျ့ရှငျးသှားသလို ခံစားလိုကျရသညျ။ ရအေဝသောကျကာ ဂူပေါကျထဲမှ ဝငျကာ ကမျးခွသေို့ ပွနျဆငျးလာ ခဲ့သညျ။ ကမျးခွမှော ဂဏနျးကောကျလိုကျ၊ အုနျးရသေောကျလိုကျ တျောကီဖုတျလိုကျနှငျ့ အပနျးဖွခေရီးသှား နရေသလို ခံစားလိုကျကွသညျ။ ညနစေောငျးတော့ ကမျးစပျမှာပဲ အပေါ့အလေးကိစ်စ ဖွရှေငျးရသညျ။ မဟုတျရငျ အထဲရောကျမှ ပွနျဆငျးရတာ တျောတျော မလှယျလှ။ ဟိုတဈနညေ့ကတော့ ဖူးဖူး ညအိပျကာနီးမှ အိမျသာတကျခငျြသညျ ဆို သဖွငျ့ ပွနျဆငျးပို့လိုကျရသညျ။ နီးနီးလေးဆိုသျောလညျး အတကျအဆငျးနှငျ့ အတျောလေး မောသညျ။ ကိစ်စ ဝိစ်စမြား ပွီးတော့ ဖူးဖူးကို လကျဆှဲကာ ဂူထဲ ပွနျဝငျသှားလိုကျသညျ။
အိပျရာထဲ ရောကျကာနီးတော့ ဖူးဖူး တှနျ့ ဆုတျတှနျ့ဆုတျ ဖွဈလာသညျ။ သို့သျော အတငျးတော့ မရုနျးပါ။ ထှကျပွေးလို့ မရသောကွောငျ့လညျး ဖွဈပေ လိမျ့မညျ။ နှဈယောကျသား အိပျယာထဲ နရောယူပွီးခြိနျမှာ ဖူးဖူးရဲ့ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို ကိုလငျး ပါးစပျဖွငျ့ ငုံကာ အသာ စုပျယူလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး ကိုလငျး လကျမောငျးကို အလိုကျသငျ့ပွနျဖကျထားသညျ။ သို့သျော တုနျ့ပွနျ ကာ စုပျယူရုံမှတပါး လြှာ မကစားတတျသေး။ ကိုလငျး သငျပေးရအုံးမညျ။ ပါးစပျခွငျး တိုကျစဈဆငျနရောမှ ကို လငျး လကျတဈဖကျက ရငျဘတျပျေါသို့ လြှောဆငျးသှားသညျ။ သူမ၏ အကငြ်္ီလေးကို ခြှတျလိုကျသညျ။
ဖူးဖူး မငွငျးဆနျတော့ပေ။ အလိုကျသငျ့ပငျ လကျကလေး မွှောကျပေးသညျ။ ကိုလငျး အားတကျသှားသညျ။ သို့သျော ဘရာစီယာလေးကို ခြှတျမှပငျ ပွဿနာ တကျတော့သညျ။ ကိုလငျး ဘရာစီယာခြိတျကို ရှာမတှေ့။ ခကျတော့ နခေပြွေီ။ ဖူးဖူးက ကြောလေးကွှပေးသညျ။ အဆငျမပွသေေး။ ဖူးဖူးက တမငျညဈကာ ခြှတျမပေး ဘဲ တခဈခဈ ရယျနသေညျ။ ကိုလငျး စိတျညဈသှားသညျ။ နောကျတော့မှ လကျလြှော့လဟေနျ ခြှတျရနျမကွိုး စားဘဲ အပျေါမှသာ အုတျကိုငျတော့သညျ။ ဖူးဖူး သနားသှားပုံရသညျ။ သူ့ဘာသာ ခြှတျပေးတော့လညျး လှယျ လှယျလေးပဲ။
အခုအခြိနျထိ ကိုလငျး၏ လုပျဆောငျခကျြအားလုံးကို တဈခုမှ မတားမွဈသေး။ အငျး ဖူးဖူးလညျး အတှအေ့ကွုံမြားပုံရသညျ။ ကိုလငျး စကတျကိုတော့ မခြှတျတော့ဘဲ လှနျလိုကျကာ ပငျတီလေးကိုသာ ပေါငျမှ လိပျကာလိပျကာဖွငျ့ ခြှတျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ လကျဖွငျ့ ရှကွေိဂံနယျမွကေို ကြူးကြျောတော့သညျ။ ဖူးဖူး၏ အဖုတျကလေးမှာ ဖောငျးတငျးနကော အမှေးအမွှငျလညျး ခပျပါးပါး နူးနူးညံ့ညံ့လေး ဖွဈနသေညျ။ အကှဲကွောငျးထဲမှာ အရညျတှေ ရှဲနဈနပွေီကော။ ဖူးဖူး စိတျတှထေနပေုံရသညျ။ အကှဲကွောငျး လေးကို လကျခလယျထိပျဖြားဖွငျ့ စုနျကာ ပှတျသပျပေးတော့မှ ကွောငျညညျးသလို ညညျးသံလေး ထှကျလာ သညျ။ လကျကလညျး ကိုလငျး လကျမောငျးကို တငျးတငျးလေး ဆုပျကိုငျလာသညျ။ ကိုလငျးက အတှအေ့ကွုံ မြားပွီးသားပါ။
လိုကျဖကျြဆီးသူ မဟုတျသျောငွား ထားဖူးသမြှ ရညျးစားတိုငျးသညျ နယျလှနျပွီးကာမှ အသဈတှရေ့မညျ့ ဇာတာရှငျဖွဈသဖွငျ့ အဖုတျနှငျ့ ဒုတျ စိမျးသူမဟုတျပေ။ ထပျပွီး အစလေ့ေးကို ရှာဖှကော ထိုးစဈဆငျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး၏ ညညျးသံ ပိုကယျြလောငျလာသညျ။ အရညျတှလေညျး ပိုရှဲလာသညျ။ ကိုလငျး လကျခလယျကို အကှဲကွောငျးထဲသို့ နညျးနညျး ထိုးထညျ့ကွညျ့တော့ ဖူးဖူး ကိုလငျးကို တအားကုတျဖဲ့ကာ အသားကုနျညညျးသညျ။ ဂူထဲဆိုတော့ ညညျးသံ အသကျရှူသံမြားက ဟိနျးထှကျနသေညျ။ ကွပျလှခညျြလား။ အတှအေ့ကွုံရှိရငျတောငျမှ အတျောလေး အကွိမျရနေညျးပါးမညျထငျသညျ။ အရညျတှေ တအား ထှကျလာကာ ကိုလငျး လကျကို ပပှေနတေော့သညျ။
ကိုလငျး လုပျငနျးဆကျသငျ့နပွေီ။ ဖူးဖူးခွထေောကျကို ကားထုတျလိုကျပွီးမှ တကျခှလိုကျသညျ။ ကိုလငျး လီးက တအားတောငျနပွေီဖွဈရာ ဖူးဖူး၏ စောကျပတျ အ၀ လေးကို တကေ့ာတကေ့ာနှငျ့ ပှတျသပျပေးလိုကျသညျ။ အစလေ့ေးကို လီးထိပျဖြားနှငျ့ လေးငါးခကျြလောကျ ထိုးဆှပေးလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးမှာတော့ လူးလှနျ့ကော့ပြံနရှောလပွေီ။ ကိုလငျး အလဈအငိုကျယူကာ ဒဈအဖြားကို စောကျပတျထဲသို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ “အား ကိုကို နာလိုကျတာ´´ ဖူးဖူး ခပျတိုးတိုးလေး အျောသညျ။ ခဏ အနားပေးလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ ရှေ့ ကို ဆကျထိုးလိုကျရာ တဈခုခုနှငျ့ ပိတျဆို့ကာ ဒုတျကနဲရပျသှားပွီး ဖူးဖူးလဲ အီးကနဲ အျောသှားသညျ။
ကိုလငျး ထငျမွငျခကျြ တကျတကျစငျအောငျ လှဲလပွေီ။ ဖူးဖူးက အပြိုစငျစဈစဈကလေးပါလား။ ဒါဆို ကိုယျ့ကို ခဈြလှနျး လို့ ဘာမှ မငွငျးဆနျဘဲ အကုနျ လိုကျလြောနခွေငျးဖွဈနတောပေါ့။ ကိုလငျး ဝမျးသာသှားသညျ။ နောကျကို တဈခကျြ ဆုတျလိုကျပွီး အားကုနျ ထိုးသှငျးလိုကျရာ ထုတျကနဲ အထိအတှနှေ့ငျ့အတူ တဈဆုံးဝငျသှားတော့ သညျ။ “အား….. ကိုကို .. ကိုကို.. နာလိုကျတာကိုကိုရဲ့…. အီးဟီး…. ဖူးဖူးဟာလေး ပွဲသှားပွီလားမသိဘူး´´ ဖူးဖူး၏ အာခေါငျခွဈငိုယိုသံက ဂူထဲမှာ ပဲ့တငျထပျသှားတော့သညျ။
ကိုလငျး ခဏငွိမျနပေေးလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး မကျြလုံး အောကျခမျးစပျကို လကျဖွငျ့ စမျးကွညျ့လိုကျရာ မကျြရညျမြား စီးကနြသေညျ။ သွျော အပြိုစငျ စဈစဈ ကလေးဆိုတော့လညျး နာရှာမညျပေါ့လေ။ အတျောလေးကွာတော့ ဖူးဖူး အငိုတိတျသှားသညျ။ “ဖူး နာသေးလား´´ “ဟငျ့အငျး နာတော့ဘူး ကိုကို အထဲမှာ ကွပျပွီး တဈဆို့ဆို့ကွီးဖွဈနတေယျ´´ “အာ့ဆို ကိုယျ နညျးနညျးလောကျ လှုပျကွညျ့မယျနျော ဖူးဖူး မနာအောငျလုပျပေးမယျ အစမို့ပါ နောကျဆို မနာတော့ ပါဘူး´´ ဖူးဖူး ကိုယျလေး ငွိမျ့ကနဲ ဖွဈသှားသညျ ခေါငျးငွှိမျ့လိုကျသညျ ဖွဈမညျ။ အမှောငျထဲမို့မမွငျရ။ ကြှနျတျောတို့ ယောကငြ်္ားတှကေ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါမြိုးကြ ကိုယျလိုရာဆှဲတှေးတတျတာပေါ့ ဟဲဟဲ။ အဲဒါနဲ့ နညျးနညျး အထုတျအသှငျး လုပျကွညျ့သညျ။ ကွပျထုပျနသေညျ။
ဖူးဖူးကလညျး ကွောကျကွောကျနဲ့ ညှဈထားတာက ပို ကွပျနသေလိုပါ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရညျတှေ ထှကျလာတော့ ဖူးဖူးလညျး သိပျမနာတော့။ နာတာကို ကောငျး တာက ဖုံးသှားလပွေီ။ တဈခကျြဆောငျ့ တဈခကျြညညျး ဖွဈလာသညျ။ ပထမ ဖွညျးဖွညျး ဆောငျ့ပေးရာမှ နညျးနညျး အရှိနျတငျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး ဘာမှ မကနျ့ကှကျ။ ညညျးသံသာစိတျလာသညျ။ အမွနျနှုနျး တဖွညျး ဖွညျး မွငျ့လာသညျ။ ဖူးဖူးသညျး ကိုလငျး ကြောကို လကျဖွငျ့ အသားကုနျ ဖကျထားသညျ။ ဖကျထားရာမှ တဈကိုယျလုံး တုနျတကျလာပွီး “ကိုလငျး ကိုလငျး ဘယျလိုကွီးဖွဈလာလဲ မသိဘူး အား အာ့ဟာ အား…. အမေ့….. ရှီး….. အငျးးး အ အား………… ´´ အျောသံနှငျ့အတူ စောကျဖုတျကလေးက လီးကို တဇဈဇဈနှငျ့ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ညှဈကာ ကော့တကျလာပွီးနောကျ ငွိမျကသြှားလတေော့သညျ။ ကို လငျးလညျး ဖူးဖူးပွီးသှားမှနျးသိသဖွငျ့ သုကျရညျမြားကို စောကျဖုတျအတှငျးသို့ ဒရဟော ပနျးထညျ့ပေးလိုကျ ရာ ဖူးဖူးမှာ အရသာကောငျးလှနျးလှသဖွငျ့ မမြေ့ောမတတျ ဖွဈသှားရသညျ။
ထိုညတော့ ငတျမပွသေညျ့ ကာမ ဆားငံရကေို တကျညီလကျညီ သောကျလိုကျကွသညျမှာ သုံးခါ လေးခါပငျ မကတော့။ ဖူးဖူးလညျး စောကျပတျပူထူလာပွီး ကိုလငျးလညျး လီးတဈခြောငျးလုံး ကြိနျးလာသဖွငျ့ သာ အိပျလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ အိပျတော့လညျး တှငျးစိမျရငျး အိပျရသညျမှာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုငျပေ။ မိုးလငျးကာ နီးတော့ တှငျးထဲမှ မွှကေ ခေါငျးထောငျနသေဖွငျ့ လငျးဆှဲလေးတော့ ဆှဲလိုကျသေးသညျ။ မနကျမိုးလငျးတော့ ရခြေိုအိုငျသို့သှားကာ ကိုယျလကျဆေးကွော မကျြနှာသဈလုပျရသညျ။ မလုပျ လို့ မဖွဈ။ တဈညလုံး ဗှကျပေါကျသှားရာ မလုပျလြှငျ ခွောကျကပျကုနျတော့မညျ။ ပွီးနောကျ ထုံးစံအတိုငျး ကမျးစပျ ဆငျးသှားကွတော့သညျ။ ကမျးစပျသို့ ရောကျသောအခါ ထူးခွားမှုကို တှရေ့သညျ။ ဧညျ့သညျတှေ ရောကျနေ ခပြွေီ။ ကမျးစပျသို့ သနေတျအသငျ့ခြိနျကာ သှားကွညျ့လိုကျသညျ။
ရာဘာလှတေဈစီး၊ အကောငျးပကတိ၊ လှေ ထဲတှငျ ကွညျ့လိုကျတော့ လူတဈယောကျ၊ အသကျတော့ မရှိတော့ခြေ။ ပုတျစျောပငျ နံနပွေီ။ သရဲကွောကျ တတျသူဆိုလငျြ လိပျပွာလှငျ့နိုငျသညျ။ လကျတဈဖကျက ငါးစားလို့ ကုနျပွီ၊ အပုတျရညျတှေ တတောကျ တောကျ စီးကကြာလှဘေေးသို့ တှဲလောငျးကနြသေညျ။ ကိုလငျး လှထေဲသို့ ဆငျးလိုကျသညျ။ လှထေဲတှငျ ဖိနပျက သုံးရံ၊ လှေ၏ ဖောငျးကွားတှငျ ညပျနသေညျ။ ဒါဆို လူလေးငါးယောကျ စီးလာသညျ့ အသကျကယျလှမှေ ကနျြသူမြား ပငျလယျထဲတှငျ အကွောငျး အမြိုးမြိုးနှငျ့ ကကြနျြခဲ့လပွေီ။ ဒီလူကလညျး ကမြကနျြခဲ့ဘဲ လှပေျေါမှာ အသကျကုနျသှားပုံ ရ သညျ။ ကိုလငျး မကွောကျနိုငျတော့။ လှပေျေါသို့ တကျကာ အသုံးဝငျသညျ့ ပစ်စညျး ရှာယူလိုကျသညျ။
ရစေို အဝတျအစားမြားပါသော အထုပျနှဈထုပျ၊ စောငျထူတဈထညျ၊ ဆေးဝါးမြား ပါသညျ့ အိတျတဈအိတျ၊ ဓာတျမီး တဈလကျနှငျ့ လကျပတျနာရီတဈလုံး တှရေ့သညျ။ လကျပတျနာရီကို ကွညျ့တော့ အမြိုးအစား သိပျ အကောငျး ကွီး မဟုတျ၊ ဒါပမေဲ့ ရလေုံနသေညျကို တှရေ့သဖွငျ့ ဝမျးသာသှားသညျ။ ဒီကြှနျးပျေါမှာ နာရီ မလိုအပျသျော လညျး ရကျစှဲမြားကွညျ့နိုငျသေးသညျလေ။ လိုတာတှေ အကုနျ ယူပဈလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ထိုအလောငျး ကွီးကို ပငျလယျထဲ မြှောဖို့ စဉျးစားသညျ။ မဖွဈနိုငျ။ ဒီနရောမှာတငျ ဝဲလညျဝဲလညျဖွဈနမေညျ။ လှကေို အကောငျးအတိုငျး ရသဖွငျ့ ပွနျသုံးလို့ ရနိုငျသေးသညျပဲ။ လိုရမယျရ လလြှေော့ပွီး သိမျးထားရမညျ။ ဒါလဲ မဟုတျသေး။ ဒီလှအေမြိုးအစားက လလြှေော့လို့မရ။ ရသျောလညျး ပွနျဖွညျ့မရ။ လှတှေငျ ကပျလကျြပါသော လအေိုးက တဈခါသုံးလအေိုး။ ဒီအတိုငျးပဲ ဟိုဂူပေါကျထဲမှာ ထညျ့ထားရမညျ။
သဲပျေါမှာ ထားရငျတော့ သဲကိုကျသှားမညျ။ အုနျးလကျဖွငျ့ ကငျြးတဈကငျြး တူးလိုကျသညျ။ သိပျအကယျြကွီးလညျး မတူးနိုငျ။ အုနျးလကျဖွငျ့ တူး ရတော့ သဲသောငျပွငျဖွဈသျောလညျး ခရီးမတှငျ။ ကွိုးစာပမျးစားတူးလိုကျတော့မှ ကငျြးတဈကငျြး ဖွဈလာသညျ။ ခုနက လှပေျေါက ပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ ဖိနပျမြားကို မွှုပျလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ ကိုယျ့ဘာသာ သရဏဂုံ တငျပေးလိုကျသညျ။ သသေူတှကေတော့ ဘယျဘာသာဝငျတှလေဲမသိ။ ဖူးဖူးက ကွောကျလို့ ဟိုးဝေးဝေးမှာ ထိုငျနသေညျ။ တဈဖကျကို လှညျ့ထားသညျ။ သူမ မကွညျ့ရဲသောကွောငျ့ ဖွဈမညျ။ ကိစ်စမြား ပွီးတော့မှ ဖူးဖူးကို ချေါကာ ကြှနျးကမျးခွတေဈလြှောကျ လြှောကျကွညျ့သညျ။ ရစေီးကွောငျး သငျ့သဖွငျ့ ရောကျလာသညျ့ ပစ်စညျးအခြို့ တှရေ့သညျ။ အခြို့ကလညျး ရဝေငျ ပကျြစီးသှားပွီ။ ရမေဝငျ မပကျြစီးသညျ့အရာမြားကို တဈနရောကိုပုံထားကာ ဂူဝသို့ ကဲ့ယူရသညျ။ သိပျမြားမြားစားစားလညျး မဟုတျပါ။ အဖိုးဘယျလောကျတနျတနျ ဒီနရောမှာ အသုံးမတညျ့ရငျ တနျဖိုးမရှိပါ။
ရှလေိုမြိုးဟာဆို တဈမြိုးပေါ့။ ကံကောငျး လို့ ကုနျးပျေါပွနျနိုငျရငျ သုံးလို့ရနိုငျသညျ။ တဈခွားဟာတှကေတော့ သိပျမမကျမောလှ။ သယျလာသော ပစ်စညျးမြားထဲမှ ကောငျးနိုးရာရာ ရှေးထုတျကွညျ့သညျ။ ပစ်စတို တဈလကျ ကညျြအပွညျ့ဖွငျ့ ပါလာသောကွောငျ့ ဖူးဖူးကို ပေးထားသညျ။ အကွောငျးရှိရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ကာကှယျလို့ ရ အောငျလို့။ ကိုလငျးသနေတျကကညျြနှငျ့က မတူ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကညျြအပိုပါမလာသညျ့ ဖူးဖူးသနေတျကို မသုံးဘဲ ကိုလငျးက သူ့သနေတျကိုသုံးကာ ဖူးဖူးကို သနေတျပဈနညျး သငျပေးသညျ။ ပစ်စတိုဆိုသညျ့ အမြိုးက သသေေ ခြာခြာ လကေ့ငျြ့သားမဝထားရငျ ထိမှနျဖို့မလှယျလှသဖွငျ့ ကညျြထိုး ကညျြထုတျတတျရုံ၊ ပဈတတျရုံသာ သငျ ပေးထားရသညျ။ ပထမဆုံးကညျြတဈတောငျ့က သဲပွငျပျေါက လေးပလေောကျ ဝိုငျးထားသညျ့နရောကို ပဈခိုငျး ရာ ဘာမဆီညာမဆိုငျ ရှလှေ့မျးလှမျးက အုနျးသီးခိုငျကို ထိကာ ကွှကေသြှားသဖွငျ့ ရယျရသေးသညျ။
စနဈ တကြ ပွလိုကျတော့လညျး လကျဖွောငျ့သညျမဟုတျတောငျ ပေ သုံးဆယျလေးဆယျလောကျတော့ ထိအောငျ ပဈနိုငျသှားသညျ။ ကညျြငါးတောငျ့တော့ ဖွုနျးလိုကျရသညျ။ မတတျနိုငျပါ။ ကိုလငျးသနေတျက ၉ မမ ကညျြ ဖွဈနသေဖွငျ့ ကံကောငျးရငျ ထပျရနိုငျသေးသဖွငျ့သာ သုံးပဈလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ ဖူးဖူးအတှကျမြား ဝတျစရာအပိုလေးရမလား ရှာကွညျ့သညျ။ ကလေး အကငြ်္ီတှေ။ ဖူးဖူးက မခြိသှားဖွဲ လေး လုပျပွသညျ။ ဆပျပွာမှုနျ့လို ဆပျပွာဘူးလိုမြိုး တိုလီထှာလီတှလေညျး ပါသညျ။ လကျဖွငျ့လှညျ့ရသညျ့ မီးအိမျတဈခု အကောငျးပကတိပါလာသညျက ကံကောငျးပစှေ။
ညကရြငျတော့ အသုံးတညျ့ပွီပေါ့လေ။ ပစ်စညျးတှေ သိမျးပွီးတော့ ဖူးဖူးနှငျ့အတူ ဂူထဲ ပွောငျးထညျ့သညျ။ ဆပျပွာမှုနျ့ ရရငျဖွငျ့ ဖူးဖူးအဝတျတှေ လြှျော၊ ကိုလငျးအဝတျတှလေညျး လြှျောပေါ့။ ပစ်စညျးတှေ ဂူထဲထညျ့ပွီးတော့ အဝတျလြှျောခငျြလြှျောရအောငျ ဖူးဖူးကို ပွောရသညျ။ ဖူးဖူးကလညျး လြှျောခငျြနသေညျ။ နှဈယောကျလုံး အဝတျအစားက ငပိစျောနံနပွေီ။ ဒါပမေဲ့ ဒါတှေ လြှျောထားတုနျး ဘာသှားဝတျမလဲ။ နောကျဆုံးတော့ ဖူးဖူးက ညကတညျးက ရှိသမြှအရှကျတှေ ပေးလိုကျပွီပဲ ကိုကိုရယျ ခြှတျလိုကျပါ တော့။ ဖူးတို့နှဈယောကျကို မွငျမဲ့သူလဲ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုငျးသာ နကွေတာပေါ့ ဟုပွောလိုကျရာ ကိုလငျး အကွီးအကယျြ အံ့သွသှားရတော့သညျ။ ညကမှ အပြိုစငျဘဝလေးကို စှနျ့ပေးခဲ့သညျ့ သူ့ခဈြသူတဖွဈလညျး ဇနီးအသဈစကျစကျကလေးက ဒီလိုမြိုး ပွောသညျဆိုတော့ အံ့ဖှယျသရဲပပေ။ နောကျဆုံးတော့ နှဈယောကျလုံး အဝတျဗလာနှငျ့ ဖူးဖူးက နှဈယောကျလုံးစာ အဝတျကို လြှျောကာ သောငျပွငျမှာ အုနျးလကျခငျး လှနျးထားရ သညျ။
အခုမှပဲ အာဒမျနှငျ့ ဧ၀ လိုလို၊ ကြောကျခတျေလူသားလိုလို ဖွဈရတော့သညျ။ ပထမတော့ တဈယောကျ နှငျ့ တဈယောကျ ကွညျ့ကာ ရယျခငျြသလိုလို ဖွဈဖွဈလာသညျ။ သို့သျောလညျး ဖူးဖူး၏ ခဈြစဖှယျ စောကျဖုတျ ဖောငျးဖောငျးကလေးကို မွငျရသညျ့ ကိုလငျးက ခဏခဏ လောငျတီးနသေလို ဖူးဖူးကလညျး စိတျတှေ နိုးကွား နသေညျသာ။ အဝတျတှလှေနျးပွီးတော့ ဂူထဲပွနျဝငျကာ နှဈယောကျသား ခဈြပှဲဆငျကွသညျ။ တရေးအိပျကွသညျ။ ညနကေတြော့ လှနျးထားသညျ့ အဝတျတှေ ပွနျသှားရုပျရငျး ညစာရှာဖို့မသှေ့ားသဖွငျ့ အုနျးသီး၀၀စားကာ ပွနျ ဝငျရတော့သညျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကနြေပျကွသညျလေ။
ညဘကျရောကျတော့ ကိုလငျးက အိပျရာထဲရောကျ ရောကျခငျြး “ဖူးလေး ကိုကိုတို့နှဈယောကျမှာ အဝတျက ဒီတဈစုံပဲ ရှိတာနျော၊ ဒါခညျြးပဲ လြှျောလိုကျ ဝတျ လိုကျဆိုရငျ ကွာရငျ စုတျပွတျသတျကုနျမှာ ကယျမဲ့သူရှိရငျတောငျ အဝတျမပါရငျ ရှကျစရာကွီး၊ ဒို့နှဈယောကျပဲ ရှိတုနျး အဝတျမဝတျဘဲ နကွေရငျ မကောငျးဘူးလားလို့´´ “အငျ ကိုကိုကလညျး ဉာဏျကွီးပဲနျော ဖူးဟာကို တဈခြိနျလုံးမွငျခငျြတိုငျး မသိတာကလြို့ ကောငျးပါပွီရှငျ ကိုကို့သဘောပါ ဟုတျလား´´ “အဲဒါကွောငျ့ ဖူး လေးကို ခဈြရတာ သိလား´´ အိပျရာထဲရောကျတော့ ကိုလငျးက ဖူးဖူးကို အရငျလိုပဲ လုပျပေးလိုကျ ပွီးနောကျ မသိမသာ ပေါငျကွားထဲ ခေါငျးနှဈလိုကျက ဖူးဖူး၏ စောကျဖုတျကလေးကို ပါးစပျဖွငျ့ ငုံပဈလိုကျ သညျ။
ဖူးဖူး ထငျမှတျမထားသဖွငျ့ လနျ့ဖွပျကာ ကိုလငျး ခေါငျးကို အတငျး ဆုပျကိုငျထားသညျ။ “အို ကိုလငျး အဲဒါဘာလုပျတာလဲ ဘုနျးတှေ နိမျ့ကုနျပါ့မယျ မလုပျပါနဲ့ အို အို ပွောလို့လဲမရဘူး ခကျတော့တာပဲနျော´´ ကိုလငျးကတော့ ဖူးဖူး ဘယျလိုပငျတားစကောမူ လုံးဝဂရုမစိုကျ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးထဲသို့ သူ့လြှာ ကွီးကိုသာ ဝငျနိုငျသမြှဝငျအောငျ ထိုးထညျ့လိုကျ၊ စောကျစိလေးကို လြှာနှငျ့ထိုးလိုကျ၊ စုပျယူလိုကျနှငျ့ လုပျခငျြ သလို လုပျနသေညျ။ ဖူးဖူးမှာ တားခြိနျပငျမရ၊ သူ့ဘာသာသူ အသကျရှူတှမှေားကာ ကော့ပြံလနျနတေော့ သညျ။
နောကျဆုံးတော့ ကိုလငျး၏ လြှာစှမျးအောကျတှငျ အညံ့ခံကာ ဖူးဖူး၏ ညီမလေးမှာ မကျြရညျတောကျ တောကျကအြောငျ ငိုရသညျ့အနအေထားသို့ ရောကျသှားတော့သညျ။ ဖူးဖူးကို တဈခြီပွီးအောငျ မှုတျလိုကျရာ အရညျမြား ရှဲနသေဖွငျ့ ကိုလငျး လီးတဈခြောငျးလုံးသှငျးတာတောငျ မအျောတော့ပေ။ ညညျးရုံသာ ညညျးပွီး ကော့ကော့ခံနတေော့သညျ။ “ဖူးလေး ပွီးကာနီးရငျ ပွောနျော ကိုကိုနဲ့ ဖူးနဲ့ အတူတူပွီးရအောငျ´´ “အငျ ကိုကို ဘာပွီးတာလဲ´´ သွျော ဒီငတိမလေးကလညျး ပွီးသာပွီးသှားတယျ ပွီးတယျဆိုတာဘာလဲ မသိသေး။ “ ဖူးလေး ခုနက ဖွဈသလို တအားကောငျးသှားတာ ပွီးတာပေါ့ ဖူးလေးရဲ့´´ ရှငျးပွပွီးနောကျ ကိုလငျး ရပျတနျ့ သှားသော အရှိနျကို ပွနျမွှငျ့တငျလိုကျသညျ။ ကိုလငျးလညျး တအားကောငျးနသေလို ဖူးဖူးလဲ သမေတတျ ကောငျးလှနျးနသေညျ။ ဖူးဖူး ပွီးကာနီးတော့ ကိုလငျးစကား နားထောငျသညျ။
ပွီးတော့မယျ ပွီးတော့မယျ ဆို သညျနှငျ့ ကိုလငျး အားကုနျ အရှိနျမွှငျ့ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ “အာ့ အာ့…. ´´ဆိုသညျ့အသံလေးကွားသညျ နှငျ့ ကိုလငျး သုကျရညျနှေးနှေးမြားကို ဖူးဖူး၏ စောကျပတျထဲသို့ ပနျးထုတျလိုကျရာ “အား… ကိုကို့….. အိ….. အား ကောငျးလိုကျတာ အား……..´´ ဆိုသညျ့အသံနှငျ့အတူ ပွီးသှားလတေော့သညျ။ ကိုလငျးကလညျး သူပွီးပွီးခငျြး မရပျပဈဘဲ ကနျြနသေေးသညျ့ မာကြောမှုလေးဖွငျ့ ဆကျပွီး ဆောငျ့ပေးလိုကျသဖွငျ့ ဖူးဖူး တအား ကောငျးသှားခွငျး ဖွဈသညျ။ ခဈြစခငျစ ကွငျနာစ လငျမယားဆိုတော့လညျး ဒီထဲကကို မထှကျနိုငျလောကျအောငျ အလုပျမြားကွ သညျသာ။ တဈညလုံး ခဈြရညျလူးကွသညျ။ သူတို့နသေညျ့ဂူထဲမှာ သုကျရညျရော စောကျရညျနံ့မြားဖွငျ့ လှိုငျ နသေညျ။
သူတို့ကတော့ ဒီအနံ့ရလေ တဏှာကွှလဆေိုတော့ ခပျကောငျးကောငျးပဲပေါ့လေ။ ဒီလိုနှငျ့သာ ညဆိုလညျး နှဈခြီသုံးခြီ နဘေ့ကျလညျး တဈခြီလောကျတော့ ဆှဲဖွဈကွသညျ။ အစက သူတို့အိပျသညျ့နရောကိုသာ သှားသညျ။ လိုးကွသညျ။ နောကျတော့ အိမျထောငျသကျက လေး ရကျပိုငျးမြှရှိလာတော့ သူတို့နှဈယောကျကလှဲရငျ ရှကျစရာလူ တဈယောကျမှ မရှိသဖွငျ့ နဘေ့ကျ လီးတောငျ စောကျပတျယားလာလြှငျလညျး ဂူထဲသို့ ပွနျမဝငျဖွဈတော့။ အဆငျပွသေညျ့နရောတှငျသာ လိုး ကွသညျ။ တဈခါတရံလညျး ပငျလယျထဲ ရကေူးရငျးနဲ့ မတျတပျဆျောပွဈသညျ။ တဈခါတရံလညျး သောငျပွငျ ပျေါမှာ ဗငျြးကွသညျ။ သောငျပွငျပျေါမှာက သိပျအဆငျမပွလှေ။ အောကျကခံရသညျ့ ဖူးဖူးက ဖငျကွားထဲ သဲ ဝငျသဖွငျ့ ကွမျးရှရှ၊ အပျေါက ကိုလငျးကလညျး ဒူးက သဲပှနျးသဖွငျ့ ကွာကွာမလုပျနိုငျ။
နောကျဆုံးတော့ အကောငျးဆုံးနရော သှားတှသေ့ညျ။ သူတို့လှဖှေကျထားသညျ့ဂူပေါကျထဲရောကျမှ နရောကောငျးတှသှေ့ား ခွငျး ဖွဈသညျ။ လှကေ ရာဘာလှဖွေဈသဖွငျ့ မှယေ့ာသဖှယျ ဇိမျကလြှသညျ။ သို့သျော ညဘကျတော့ မအိပျ နိုငျခြေ။ ပငျလယျလတေဟူးဟူးနှငျ့ အေးလိုကျသညျ့ဖွဈခွငျး။ ကြှနျးပျေါသို့ရောကျသညျမှာ သုံးပတျခနျ့ရှိသညျ။ ဒီနားပတျလညျ လမျးလြှောကျလိုကျကွ၊ ဟိုနားဒီနား သှားလိုကျကွ၊ ကြှနျးအနှံ့ မရောကျသေး။ တဈရကျတော့ တောထဲ ဝငျကွညျ့သညျ။ တောက သိပျနကျလှသညျ မဟုတျပမေဲ့ သဈပငျတော့ထူထပျသညျ။ တောထဲရောကျတော့မှ တောငှကျပြောမြား၊ အခွားအမညျမသိ အပငျ မြား ပေါကျရောကျသညျကို သတိထားမိသညျ။ တိရစ်ဆာနျက တဈခွားတော့ မတှေ့။ တဈခါတလေ မွှတှေသေ့ညျ။ မြောကျမြားလညျး တခါတရံ တှသေ့ညျ။ မွှကေိုတော့ တျောရုံတနျရုံ မသတျပါ။
တဈခါတော့ ဖူးဖူးရပျနသေညျ့ အပငျပျေါမှ လြှောဆငျးလာသညျ့ မွှတေဈကောငျ တှသေ့ဖွငျ့ မလှဲမရှောငျသာ ပဈခလြိုကျ ရသညျ။ မွှသေားကငျတော့ ဖူးဖူးက မစားရဲသဖွငျ့ မစား၊ မြောကျသားတော့ စားသညျ။ မြောကျဖကျြသညျ့ အခြိနျတှငျ အနားမှာ မနတေော့။ လူကလေးနှငျ့ တူသဖွငျ့ သနားလို့တဲ့။ တောထဲ လေးငါးရကျ လြှောကျသှားကွညျ့တော့ လမျးဖွဈလာသညျ။ နရောတှလေညျး မှတျမိလာသညျ ဘယျနားဘာအကောငျရှိတတျတာလညျး သိလာသညျ။ ကိုလငျး တောထဲထှကျတိုငျး ဖူးဖူးက အမွဲတမျး ပါသညျ။ တောထဲတှငျ အမဲပဈလိုကျ၊ စိတျထနျလာလြှငျ တှတေဲ့နရောတှငျ မိုးတိုးမတျတပျရော ပိုးလိုးပကျလကျပါ လိုးလိုကျ ဆျောလိုကျနှငျ့ သာယာနကွေသညျ။ အိမျပွနျခငျြစိတျပငျ မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျ ဖွဈလာတော့သညျ။
ဖူးဖူးလညျး အတျောမြားမြား ကြှမျးလာသညျ။ တဈရကျတော့ ဖူးဖူးက တောထဲသှားနရေငျး “ကိုကို ခဏမကျြစိမှိတျပေးနျော´´ ဟု ထူးထူးဆနျးဆနျး ဆိုလာသဖွငျ့ မကျြစိ မှိတျ ပေးလိုကျသညျ။ ဖူးဖူးက ထိုငျခလြိုကျပွီး ကိုလငျး ဒုတျကို ထောငျလာအောငျ ဆှပေးသညျ။ ဒါဆို ကိုလငျးသဘော ပေါကျလိုကျသညျ။ ဘာမှမပွောဘဲ ငွိမျနလေိုကျသညျ။ ဖူးဖူးက တောငျလာသောလီးကို လကျ ဖွငျ့ အရငျးမှ ကိုငျကာ ဒဈကို ပါးစပျဖွငျ့ ငုံလိုကျသညျ။ အိုး…. ကောငျးလိုကျသညျ့အရသာ။
ဖူးဖူးက ကိုလငျး ရှုံ့ မဲ့သှားသော မကျြနှာကို မကျြလုံးလှနျကွညျ့ကာ ခပျပွငျးပွငျးစုပျတော့သညျ။ သိပျကွာကွာ မခံလိုကျ။ ပွီးခငျြ လာသညျ။ ပွီးတော့မယျဆိုတော့လညျး ပါးစပျထဲကပွနျမထုတျပေး။ ထှကျလာသမြှ အကုနျလုံးကို မြိုခြ လိုကျ တော့သညျ။ ပွီးသှားတော့မှ “ကိုကိုက ဖူးဟာလေးကို ညတိုငျး လကျြပေးတယျ၊ စုပျပေးတယျ၊ အရမျးကောငျး တယျ ကိုကိုရယျ၊ ကိုကို့ကို ပွနျလုပျပေးခငျြတာ၊ ဘယျလိုလုပျရမလဲ စဉျးစားနတော၊ လုပျလဲ မလုပျရဲဘူး၊ အခု တော့ ဖူး ကောငျးသလို ကိုကိုလညျး ကောငျးမလားလို့ လုပျပေးကွညျ့တာ ကောငျးလားဟငျ´´တဲ့။ ကိုလငျး အလှနျ ကွညျနူးသှားသညျ။ သူ ဖူးဖူးကို စပွီးပါကငျဖောကျသညျ့ နောကျနမှေ့စကာ နတေို့ငျး ဂြာပေးသျော လညျး ဖူးဖူးကို မစုပျခိုငျးရကျ။ သူမကိုသာ ကောငျးစခေငျြသညျလေ။ နောကျတော့ ညတိုငျးလိုလို သူမက အရငျ စုပျပေးသညျ။ ကိုလငျးကလညျး ဂြာပေးသညျ။ ပွီးတော့မှ လိုးကွသညျ။
အခြိနျမရှေး လိုးနိုငျသညျ့ အနအေထားမို့ လောဘတကွီး တဈည လေးငါးခြီ မလုပျဖွဈကွ တော့။ တဈည နှဈခြီလောကျသာ လုပျဖွဈတော့သညျ။ မိုးလငျးကာနီး လငျးဆှဲလေးလညျး တဈခါတဈရံ ဆှဲဖွဈသညျ။ “ဖူးလေ ကိုကိုတို့လေ မွောကျကြှနျးကိုမြားရောကျနလေားမသိဘူးနျော´´လို့ ကိုလငျးကပွောတော့ ဖူးဖူးက နားမလညျသောအကွညျ့နှငျ့ “ဘာမွောကျကြှနျးလဲ ကိုကို ဖူး တကယျမသိဘူးနျော´´ဟု ပွနျပွောသညျ။ ကိုလငျးက “ဒီလိုလေ ဖူးရဲ့၊ ဟိုးအရငျတုနျးက ကမ်ဘာကွီးက ပွားတယျလို့ ယူဆတုနျးက ကြှနျးကွီးလေးကြှနျး ပဲရှိတယျတဲ့။ အဲဒီထဲမှာမှ မွောကျကြှနျးမှာ ပဒသောပငျဆိုတာရှိတယျတဲ့၊ အဲဒီပဒသောပငျကနေ လိုသမြှ အကုနျ ခူးယူစားသုံးနိုငျတယျတဲ့၊ ဘယျသူကမှ လောဘမတကျကွဘူးတဲ့၊ ပွီးတော့ အဲဒီမွောကျကြှနျးမှာ ကာမ ဆကျဆံခငျြရငျ လိုးခငျြရငျ ဘယျနရောမှာမဆို လိုးလို့ရတယျတဲ့၊ အဲဒီနရောမှာ ခုနဈရကျခုနဈလီ လိုးကွတယျ တဲ့။
အဲဒီအခြိနျကြ သူတို့ဘေးပတျလညျကနေ သဈပငျတှကေ အုပျမိုးပေးထားတယျတဲ့၊ အခုလညျး ကိုကိုတို့ အဲလို ဖွဈနသေလိုပဲလေ၊ လိုးခငျြတဲ့အခြိနျလိုးတယျ၊ စားခငျြတဲ့အခြိနျ စားခငျြတဲ့ဟာယူစားတယျ ဘာထူးလဲ နော့´´ “သိဘူးကိုကိုရယျ ဖူးကတော့ ကိုကိုနဲ့အတူနရေတာ ပြျောတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အိမျကိုလညျး ပွနျခငျြ တယျ။ ကိုကိုနဲ့ ဖူးနဲ့ အိမျမှာ ပြျောပြျောနကွေရရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ´´ ဖူးဖူးက ဆှေးဆှေးမွမွေ့လေ့ေး ပွောတော့ ကိုလငျးလညျး အိမျကိုသတိရသှားသညျ ဖူးဖူးကိုလညျးသနားသှားသညျ။ သူတို့ ရောကျခဲ့သညျမှာ နှဈလကြျောခဲ့ပွီ။ တဈရကျတော့ ဖူးဖူးက ကိုကို့ကို ပွောစရာရှိလို့ ဆိုကာ ဘယျသူမှမရှိသညျကိုသိသိနှငျ့ နားနားကို တိုးတိုးလေး ကပျပွောသညျ။ ဖူးမှာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီတဲ့။ ကိုလငျး တအား ပြျောသှားသညျ။
ဒါဆို သားလေးရတော့မယျပေါ့။ ဟုတျသေးပါဘူး။ သမီးလေးလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ ဖွဈ ခငျြတာဖွဈ သားဖွဈဖွဈ သမီးဖွဈဖွဈ ခဈြမှာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ သားလေးမှေးမှေး သမီးလေးမှေးမှေး ဒီကြှနျးပျေါမှာ အဆငျပွပွေေ မှေးနိုငျပါ့မလား။ ဆရာဝနျမရှိ၊ ဆေးမရှိ။ သို့ပသေိ ကြောကျခတျေတုနျးကလညျး ဒီလိုပဲ မှေးကွ တာပါပဲလဟေုသာ စိတျဖွလေိုကျရသညျ။
မိခငျလောငျးဖွဈသညျ့ ဖူးဖူးက အပြျောဆုံးပါပဲ။ အဲဒီနကေ့စလို့ သုံး လ ရှောငျရသညျဆိုသဖွငျ့ စိတျကို ခြုပျတညျးရသညျ။ ဖူးဖူးက အလိုကျသိသညျ။ ပါးစပျဖွငျ့ နတေို့ငျး လုပျပေး သညျ။ လကျဖွငျ့လညျး လုပျပေးသညျ။ အလိုကျသိတတျလှနျးသော ဇနီးလေးကို အခဈြပိုရသညျ။ သူမကို အာဟာရဖွဈအောငျ တတျနိုငျသမြှ ကြှေးရတော့သညျ။ ငှကျဥလညျး နှိုကျကြှေးသညျ။ ခရု၊ ငါး၊ ပုဇှနျ ပေါပေါမြားမြား ရအောငျ ရှာကြှေးသညျ ။ မိခငျ ကနျြးမာရေးဒေါငျဒေါငျမွညျမှ ကလေးကို ဆရာဝနျမဲ့ မှေး နိုငျမညျ မဟုတျပါလား။ သုံးလလောကျနတေော့ တဈခါတဈရံ လုပျဖွဈကွသေးသညျ။ သို့သျောလညျး အရငျလို နညျးပေါငျးစုံ မလုပျတော့။ အညငျသာဆုံးနညျးဖွငျ့ လိုးကွသညျ။ ကိုယျဝနျရငျ့မာလာတော့ မလုပျဖွဈတော့ပါ။
မိနျးမ ကိုယျဝနျဆောငျပွီဆိုတော့ လငျလုပျသူ ကိုလငျး စုရဆောငျးရပွီ၊ ကလေးအဝတျကလေးတှကေ အသုံးဝငျလာသညျ။ မိဘတှေ အဝတျမဝတျဘဲနရေငျတောငျ ကလေးကိုတော့ နှေးအောငျထားရမညျ။ ဒီလိုနှငျ့ ကိုးလ လှယျလို့ ဆယျလ ဖှားမညျ့အခြိနျသို့ ရောကျလာသညျ။ တဈရကျတော့ ဗိုကျနာသညျ ဆိုသဖွငျ့ ပငျလယျစပျမှာ မှေးလို့မဖွဈနိုငျလို့ ခြောကျအတှငျးမှ ရခြေိုအိုငျသို့ ထမျးပွေးရသညျ။ ရခြေိုအိုငျနား မှာ သဈရှကျထူထူ ခငျးပေးရသညျ။ ဖူးဖူးက တဈခါမှ ကိုယျဝနျမဆောငျဖူးသဖွငျ့ အတငျးညှဈနသေညျ။ တအား နာမှ ညှဈရနျလညျး ပွောပေးရသေးသညျ။ တကယျတော့ ကိုလငျး လကျတှမေ့မွငျဖူးပါ။ အရငျ တုနျးက You Tube မှ စပျစပျစုစု လြှောကျကွညျ့ထားသညျ့ ကလေးမှေးသညျ့ဗီဒီယိုမြားက အသုံးတညျ့နသေညျ။
ကိုလငျး စိတျတအား ပူနသေညျ။ အဆငျမှ ပွပေါ့မလား။ မပွောကောငျး မဆိုကောငျး ဖူးဖူး ဒုက်ခဖွဈရငျ ကိုလငျးတဈ ယောကျတညျး ကြှနျးပျေါမှာ ကနျြခဲ့မှာ။ ဒါဆိုရငျတော့ အသကျမရှငျလိုတော့။ ပစ်စတိုဖွငျ့ အဆုံးစီရငျပွီး ဖူးဖူး နောကျ လိုကျမညျ စသညျဖွငျ့ တောငျတောငျအီအီ လြှောကျတှေးနသေညျ။
ဖူးဖူး၏ အျောသံ တအားကယျြ လာပွီ။ ကိုလငျးလကျကို ကိုငျထားသညျ။ လကျကို ပွတျထှကျမတတျ ညှဈထားသညျမှာ သူမ ဝဒေနာကို ဖျော ကြူးနသေညျ့နှယျ။ တဈခကျြတော့ တအား ညှဈလိုကျသညျ။ ကံကောငျးပစှေ။ အနအေထား မပကျြယှငျးသညျ့ ကလေးငယျသညျ ယောနိဝမှ ခေါငျးပွူလာသညျ။တဈကိုယျလုံးထှကျလာပွီးနောကျ အခငျြးပါ ထှကျကြ လာသညျ။ ရမှောတောငျ မပေါကျလိုကျသေးသညျလားမသိ။ မဟုတျနိုငျပါ။ ရမှောမပေါကျဘဲ ကလေးမှေးစရာ မရှိ။ ရမှောရညျမရှိဘဲ ကလေးအသကျမရှငျနိုငျ။ ခုနက သူထမျးပွေးတုနျးက ရှဲကုနျသညျမှာ ရမှောပေါကျသညျ ဖွဈလိမျ့မညျ။ နာလှနျးလို့ သေးပေါကျခသြညျထငျလိုကျသောကွောငျ့ သတိမထားမိခွငျးဖွဈသညျ။ ခကျြကွိုးကို ဖွတျရနျ ဓားကို ပွငျပွီးမှ သတိရသဖွငျ့ မီးဖွငျ့ ဓားတဈခြောငျးလုံးကို ကငျလိုကျပွီးမှ အေး အောငျ ရနှေငျ့ အမွနျစိမျကာ ခကျြကွိုးဖွတျပွီး ခပျတငျးတငျးလေး ထုံးလိုကျသညျ။
ဖူးဖူးကတော့ အားအငျကုနျ ခမျးကာ ယဲ့ယဲ့မြှသာ ရှိတော့သညျ။ ကလေးက သမီးလေး။ သွျော သမီးလေး ကံကောငျးပစှေ။ လူမရှိသူမရှိ ကြှနျးပျေါမှာ ဒီလို အဆငျပွပွေေ မှေးနိုငျသညျမှာ နညျးသညျ့ကုသိုလျမဟုတျ။ သမီးလေး၏ အသံစာစာလေး ကွောငျ့ မှိနျးနသေော သူ့အမေ ခေါငျးထောငျကွညျ့သညျ။ အားယူ ထထိုငျလိုကျပွီး သမီးလေးအား နို့ခြို တိုကျ ကြှေးလိုကျသညျ။ အိမျမှာသာဆို ဆေးရုံမှာ လူနာလာကွညျ့သူတှေ စညျကားနရေော့မညျ။ သမီးလေးမကျြနှာ ကို မွငျရသညျ့ မိခငျလုပျသူ ဖူးဖူး မကျြနှာမှာ ခုနက ပငျပနျးနာကငျြမှုတှေ တဈစကျမြှပငျ မရှိလတေော့။ သှေးနုသားနု မိခငျမြား ရှောငျကဉျြရမညျ့အရာမြား ကိုလတျက ဆရာလုပျသညျ။ နနှငျးတကျလညျး မရှူ နိုငျ၊ နှားမွီးလညျး ပွုတျမတိုကျနိုငျ၊ မီးတှငျးလညျး မဝငျနိုငျ၊ သို့သျော ကံတရား၏ ဖေးမမှုဖွငျ့ သမီးလေး ကနျြး မာပါသညျ။
သမီးလေး ခုနဈရကျသမီးအရှယျတှငျ ကိုလငျးက ကငျပှနျးတပျပေးလိုကျသညျ။ ထိုနတှေ့ငျ အုနျး သီးမြား စိတျကာ တောထဲမှ မြောကျမြားကို သှားဝသေညျဆိုပဲ။ မြောကျကတော့ မွငျတာနဲ့ပွေးသညျပေါ့။ ကို လငျးကတော့ သမီးကငျပှနျးတပျ အလှူလုပျသညျဆိုကာ မြောကျကို အုနျးသီးစိတျ သှားကြှေးခွငျးဖွဈသညျ။ နာမညျကိုတော့ အဏ်ဏဝါဟုသာ ပေးလိုကျသညျ။ မှေးရပျဇာတိနှငျ့ လိုကျဖကျညီသညျသာမက နာမညျလညျး လှပါသညျ။ သမီးလေး လေးဆယျ့ငါးရကျပွညျ့တော့ ကိုလငျးကပငျ တောငျးဆိုစရာမလို၊ ဖူးဖူးက အလိုကျတသိ ပငျ တောငျးဆိုလာပါသညျ။ သမီးကိုယျဝနျရှိကတညျးက ကောငျးကောငျးမလုပျရတာကွာနပွေီကိုကိုရယျ ဖူး စိတျတှတေအားလာနတေယျတဲ့။
ဒါနဲ့ သမီးကို အရိပျအောကျမှာ ထားပွီး နှဈယောကျသား လှပေျေါမှာ သှား လိုးကွတော့သညျ။ ငတျနလေို့လားမသိ ခြိုနတောပဲ၊ အဲ မဟုတျပါဘူး အရသာရှိတာကို ပွောတာ။ နှဈခြီ သုံးခြီ ဆကျတိုကျဆှဲလိုကျတယျ။ သမီးတဈယောကျ မှေးထားပမေဲ့ ကယျြမသှားပါဘူး။ မဆိုသလောကျ ညှဈအား လြော့သှားပမေဲ့ အရငျလို ကောငျးတုနျးပါပဲ။ နောကျတော့ သမီးလေး နှဈလသမီးအရှယျလောကျ ရောကျတော့ ကိုလငျးက တောစပျမှာ အိမျလေး တဈလုံး ဆောကျသညျ။ တောထဲမှရသညျ့ သဈ၊ မြော၊ ဝါးမြားဖွငျ့ လုပျထားရာ အိမျကလေးကတော့ သေးသေး လေးပမေဲ့ ကိုလငျးတို့ လငျမယားအတှကျတော့ နတျဘုံနတျနနျးလေးပါပဲ။ ဂူထဲကို သိပျမသှားဖွဈတော့။ တဈခါ တဈလေ မိုးသညျး လထေနျရငျတော့ ဂူထဲပွေးရသညျ။
လကေတော့ ကာပါသညျ။ ကြောကျဆောငျအကှယျထဲ ဆိုတော့ လတေိုကျရိုကျမခတျနိုငျပါ။ လဆေငျနှာမောငျးဆိုရငျတော့ မတတျနိုငျ။ အလုံးလိုကျကြှတျသှားမှာပဲ။ ဘာဖွဈလဲ ပွနျဆောကျမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ရကျတှေ လတှေ တဈလပွီး တဈလ ဖွတျကြျောလာသညျ။ သူတို့ကို ကယျဆယျမညျ့သူ မပျေါ သေး။ သမီးလေးလညျး စကားမပွောတတျသေးတာတောငျ ဟိုဆှဲ ဒီဆှဲ လုပျတတျလာသညျ။ ဝူးဝါးဝူးဝါး စကား ပွောသငျနပွေီ။ တဈခါတဈခါလညျး စိတျအားငယျမိသညျ။ သမီးလေးမကျြနှာက ခှနျအားဖွညျ့ဆေးဖွဈသညျ။ မိဘတောငျ စိတျအားငယျမှတော့ သားသမီးက ဘယျလိုအားရှိပါ့မလဲဟု ကိုလငျးက စိတျကိုတငျးထားနိုငျသညျ။ ဖူးဖူးကတော့ တခါတရံငိုသညျ။ ဖူးဖူးငိုလြှငျ သမီးလေး အဏ်ဏဝါက လိုကျငိုသညျ။ ကိုလငျးက ပွနျခြော့ရသညျ။ တဈနှဈကြျောလာခဲ့ပွီပဲ။ တဈရကျတော့ ဖူးဖူးက ကိုကို ဒီနေ့ ဖူးရောကိုကိုရော အဝတျတှေ ပွနျဝတျကွညျ့ရငျ ကောငျးမယျ၊ ညဘကျသာ တခါတခါ အေးလို့ဝတျဖွဈတာ၊ သိပျမဝတျဖွဈဘူး။ ဒီနေ့ အဝတျဝတျခငျြစိတျ ပေါကျနတေယျ ဟုပွောလာသညျ။
သူစိတျခမျြးသာအောငျ အဝတျတှေ ဂူထဲသှားယူကာ ဝတျလိုကျကွသညျ။ ဖူး ဖူးကလညျး အရငျလို စကတျကလေးနဲ့ အပြိုလေးနဲ့ပွနျတူသှားသညျဟု ကိုလငျးကပွောသဖွငျ့ ဖူးဖူးက တခဈ ခဈရယျတော့ သမီးလေးက ဘုမသိဘမသိ လိုကျရယျသညျ။ ကိုလငျးလညျး ရယျနရေငျး ပငျလယျဘကျ အမှတျ မထငျ လှမျးကွညျ့မိလိုကျသညျ။ မိုးကုပျစကျဝိုငျးအောကျမှာ မီးခိုးတနျးတဈခု၊ ကိုလငျး လှုပျလှုပျရှားရှားဖွဈ သှားသညျ။ ဂူထဲသို့ ဝငျကာ မှနျပွောငျးပွေးယူသညျ။ မှနျပွောငျးဖွငျ့ သခြောစှာကွညျ့သညျ။ ပငျလယျကူး သင်ျဘောတဈစငျးမြားလား။ ထပျကွညျ့သညျ။ ဟုတျသညျ။ သင်ျဘောတဈစငျး။ သူတို့ဘကျကို ဦးတညျ လာနေ သညျတော့ မဟုတျပေ။ ကိုလငျး စိတျလှုပျရှားစှာ ဂူထဲတှငျ သိမျးထားသော မီးကညျြမြား သှားယူသညျ။ မီးကညျြ အဖွူတဈလုံး ပဈဖောကျသညျ။ ဖောငျးကနဲ မွညျသံနှငျ့အတူ ကောငျးကငျတဈခုလုံး ထိနျသှား သညျ။ သမီးလေးက လနျ့ငိုသညျ။ မထူးခွား။ မီးကညျြ အဖွူဆိုတော့ မွငျပုံမရ။
မီးကညျြ အနီက ခွောကျလုံး တညျးသာ ပါသညျ။ တဈလုံး ဖောကျလိုကျသညျ။ ရှီးကနဲ တကျသှားကာ ကောငျးကငျယံတှငျ နီရဲ တောကျပစှာ ပေါကျကှဲသညျ။ တဈလုံး မထူးခွားသေး။ နှဈလုံး မထူးခွားသေး။ သုံးလုံးမွောကျတှငျ သင်ျဘောမှ မီးကညျြ အစိမျး တဈလုံး တကျလာသညျ။ ကိုလငျးရော ဖူးဖူးပါ အတိုငျးမသိ ပြျောသှားသညျ။ ဖူးဖူး ဒီနေ့ အဝတျတှေ ဝတျကွညျ့ ခငျြသညျမှာ ဒီနိမိတျမြားလား မသိတော့ခြေ။ ကိုလငျး မှနျပွောငျးနှငျ့ ထပျကွညျ့သညျ။ သခြောပွီ။ သင်ျဘောဦး ပွနျလှညျ့လာခပြွေီ။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ နီးသထကျနီးလာရာ သင်ျဘောမှာ မွနျမာနိုငျငံက သင်ျဘောတော့ မဟုတျ။ ငါးဖမျးသင်ျဘောလညျး မဟုတျ။ ကြှနျး နှငျ့ ခပျဝေးဝေးမှာ ကြောကျခကြာ ကြှနျးဘကျသို့ ရာဘာလှဖွေငျ့ ကူးလာသညျ။
ကိုလငျးရော ဖူးဖူးပါ ကနျြခဲ့ သညျ့ ပစ်စညျးမြားကို ပွနျယူရနျ စိတျမကူးတော့။ ရာဘာလှကေလေး ကမျးသို့ကပျလာရာ လှပေျေါတှငျ ယောကငြ်္ားနှဈယောကျနှငျ့ မိနျးမတဈယောကျပါသညျ။ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြားဖွဈဖို့မြားသညျ။ တူညီဝတျစုံ မြားနှငျ့ ဖွဈသညျ။ မိနျးကလေးက ဖူးဖူးနှငျ့ သမီးကို လကျဖွငျ့ ကူညီဆှဲတငျသညျ။ ယောကငြ်္ားတဈယောကျက ကိုလငျးကို ဆှဲတငျသညျ။ သူတို့နှဈယောကျလုံး အဝတျအစားမြားက လြှျောထားသဖွငျ့ သနျ့ရှငျးနသေျောလညျး စုတျပွတျ နပေပွေီ။ သင်ျဘောကွီးပျေါတကျလိုကျတော့ ကပ်ပတိနျက စောငျ့နသေညျ။ တကျလာသော သူတို့နှဈယောကျ ကို လကျဆှဲနှုတျဆကျကာ နှဈလိုဖှယျ အပွုံးဖွငျ့ ဆီးကွိုကာ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ နှုတျဆကျသညျ။ ကိုလငျးက အင်ျဂလိပျလို အနညျးငယျပွောတတျသဖွငျ့ ကံကောငျးသှားသညျ။ ကိုလငျးက ပွနျနှုတျဆကျကာ အကွောငျးစုံ ပွောပွသညျ။ မွနျမာလူမြိုးမှနျးသိသှားသောအခါ ကပ်ပတိနျက သင်ျဘောသားထဲတှငျ မွနျမာလူမြိုးတဈယောကျပါ သညျဟုဆိုကာ ချေါပေးသညျ။
သူမနာမညျက ဒျေါနှငျးပှငျ့ဝေ။ အရပျရှညျရှညျ အသကျ(၃၀)လောကျ ရှိမညျ။ သူမက ဖကျလှဲတကငျး မိတျဆကျသညျ။ နောကျတော့ စားစရာသောကျစရာမြား ခကြှေးသညျ။ အဝတျအစား မြားလညျး ထုတျပေးသညျ။ နောကျဆုံးမှ သိရသညျမှာ သူတို့ကိုလာကယျသညျ့ သင်ျဘောသညျ NGO တဈခုမှ သင်ျဘောဖွဈပွီး လှနျခဲ့သညျ့ ရကျပိုငျးလောကျက ပြောကျဆုံးသှားသညျ့ သင်ျဘောကို ရှာဖှရေငျ ဒီနားသို့ ရောကျလာခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ကြှနျးကို မွငျရသျောလညျး လူမနဟေု ယူဆက ပွနျလှညျ့ဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွောငျး၊ မီးကညျြဖောကျပွလို့သာ လူရှိမှနျးသိသဖွငျ့ လှညျ့လာခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သူမတို့လညျး ခရီးစဉျပွီးဆုံးသဖွငျ့ ပွနျ မညျဖွဈကွောငျး၊ သူမတို့အဖှဲ့က စငျကာပူနိုငျငံ အခွစေိုကျဖွဈပွီး စင်ျကာပူသို့ သှားရမညျဖွဈကွောငျး၊ စငျကာပူ ရောကျလြှငျ မွနျမာသံရုံးသို့ အပျနှံပွီး မွနျမာနိုငျငံပွနျရောကျသညျအထိ ဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျး ပွောတော့သညျ။
ဒီကြှနျးသညျ စင်ျကာပူနိုငျငံ ရပေိုငျနကျအတှငျးရှိ ကြှနျးတဈကြှနျးဖွဈပွီး မွပေုံပျေါတှငျ မပါရှိကွောငျး သင်ျဘောမြား ဒီလမျးကွောငျးမှလညျး တျောရုံ ဖွတျလမေ့ရှိကွောငျး ပွောပွသညျ။ တဈနကေုနျ သင်ျဘောကုနျးပတျပျေါတှငျနရေငျ ကြှနျးပျေါတှငျ ဖွတျသနျးရသမြှ ဘဝအတှအေ့ကွုံမြား ကို ပွောကွသညျ။ ဒျေါနှငျးပှငျ့ဝအေပါအဝငျ ကနျြသညျ့ သင်ျဘောသား တျောတျောမြားမြားလညျး လာနားထောငျ ကွသညျ။ သမီးလေး အဏ်ဏဝါကို မှေးနိုငျခဲ့သညျ့ ဖူးဖူး၏ သတ်တ်တိကို ခြီးကြူး မဆုံးတော့ပေ။ ကိုလငျးကိုလညျး ခြီး ကြူးသညျ။ မွငျဖူးသမြှ ဒုက်ခသညျမြားသညျ ဒီလိုမြိုးမဟုတျ၊ ပိနျလှီခွောကျကပျကာ အရိုးပျေါအရတေငျဖွဈနေ သျောလညျး အခု ကယျခဲ့ရသညျ့ မိသားစုမှာ လူမရှိ သူမရှိ ကြှနျးပျေါတှငျ တဈနှဈကြျော နလောခဲ့ရသျောလညျး ဝဖွိုးစိုပွနေသေညျမှာ ယောကငြ်္ားလုပျသူ၏ ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးရှိသောကွောငျ့ ဖွဈသညျဟူ။ ဖူးဖူးက ကွညျနူး ပွုံး ပွုံးသညျ။
ကိုလငျးက ရှကျပွုံးပွုံးသညျ။ သူတို့နှဈယောကျအတှကျ နှဈယောကျအိပျခနျးတဈခနျး ပေးထားသညျ။ ပငျလယျထဲက ကြှနျးပျေါမှာ အခွကေလြာသော သူတို့နှဈယောကျအဖို့ သင်ျဘောပျေါမှ အိပျခနျးကပငျ အနညျးငယျ စိမျးနသေညျ။ နှေးထှေး သလိုတော့ ခံစားရသညျ။ သမီးတျောကလညျး နရောသဈဆိုတော့ တျောတျောနှငျ့ မအိပျ၊ သူ့အအိပျကို စောငျ့ ရသေးသညျ။ သမီးလေး အိပျသှားတော့ လုပျငနျးစတော့သညျ။ ဖူးဖူးက သင်ျဘောက ပေးသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို သုံးက အပွတျ ရှိုငျးထားပွီးပွီလေ။ ကိုလငျး ရသှေားခြိုးသညျ။ ပွနျလာတော့ ဖူးဖူးက စပနျ့သား ဂါဝနျ အပြော့ လေးကို ဝတျထားသညျ။ ကိုလငျး ဖူးဖူး တဈကိုယျလုံးကို တပျမကျမောစှာ ကွညျ့သညျ။ ဂါဝနျလေး ပေါကျထှကျ မတတျပငျ။
ကိုလငျး အိပျယာပျေါတကျလိုကျသညျ။ မှယေ့ာက စပရိနျမှယေ့ာဖွဈသဖွငျ့ အိစကျညကျညော လှသညျ။ ဖူးဖူး၏ ဂါဝနျလေးကို ခေါငျးမှ လြှိုကာ ခြှတျပဈလိုကျသညျ။ မိမှေးတိုငျး ဖမှေးတိုငျး ဖွဈသှားသော ဖူးဖူး၏ နှုတျခမျးလေးကို အသာစုပျနမျးလိုကျကာ လကျတဈဖကျမှ ဖူးဖူး၏ ရငျသားလေးမြားကို ရှရှလေး ကိုငျ တှယျ ဆော့ကစားပေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ဖူးဖူးပေါငျနှဈလုံးကွားသို့ ခေါငျးဝငျကာ စောကျဖုတျကလေးကို အသာလေး လြှာနှငျ့ တို့ ကွညျ့လိုကျသညျ။ ဆပျပွာတိုကျထားသဖွငျ့ မှေးပြံ့နသေညျ။ လြှာပွားလိုကျ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးကို စုနျလကျြလိုကျပွီး အစလေ့ေးကို လြှာထိပျဖြားဖွငျ့ ဖိကာ ပှတျလိုကျသညျ။ ဖူးဖူး အရညျတှေ ရှဲနဈနပွေီ။ လုပျ ငနျး စခြိနျ တနျပွီ။ ခါးတှငျပတျထားသော မှေးပှတံဘကျကွီးကို ဖွထေုတျလိုကျရာ ဒုံးပြံကွီးမှာ ပဈရနျအသငျ့ အနအေထားသို့ ရောကျနပွေီ။ ဖူးဖူး၏ ခါးကငျြကငျြလေးကို ကိုငျကာ စောကျဖုတျအဝသို့ တပေ့ေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ အသာ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ တအိအိ ဝငျသှားသော အရသာကို ကိုလငျးခံစားနလေိုကျသညျ။
ဖူးဖူးလညျး ထို့အတူပငျ ငွိမျငွိမျလေး ဇိမျခံနလေိုကျသညျ။ ထို့နောကျ အသှငျးအထုတျကို နှေးတခါ မွနျတ လှညျ့ လုပျပေးနရောမှ ဖူးဖူး ပွီးကာနီးဖွဈကာ တုနျတကျလာသဖွငျ့ ဆကျတိုကျ အားကုနျဆောငျ့တော့သညျ။ ဖူးဖူးကလညျး တကျကွှစှာ တုနျ့ပွနျသညျ။ နောကျဆုံးတော့ ကိုလငျး သုကျရညျပူပူမြားကို သားအိမျအတှငျး သို့ အရှိနျပွငျးပွငျး ပနျးထုတျလိုကျခြိနျမှာပငျ ဖူးဖူးလညျး ပွီးသှားရလတေော့သညျ။ သူတို့နှဈယောကျ စပွီး ခဈြ ခဲ့ခြိနျမှ ကလေးတဈယောကျရသညျ့အခြိနျအထိ ဒီအခြိနျက အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။ ဘာ စိတျဖိအားမှ မရှိ။ အိမျအပွနျခရီးလေ။ သုံးရကျလောကျသှားတော့ စင်ျကာပူကို ရောကျသညျ။ စင်ျကာပူမှာ ဒျေါနှငျးပှငျ့ဝကေ အကုနျလိုကျပို့ သညျ။ သွျော သင်ျဘောနဈလိုကျကာမှ စင်ျကာပူကို လလေ့ာရေးခရီးတောငျ သှားနရေပါပေါ့လား။
ပွီးတော့ သံရုံးကို လိုကျပို့သညျ။ သံရုံးကလဲ ဖျောရှစှော ဆကျဆံသညျ။ နောကျတဈပတျလောကျ သံရုံးမှာ အောငျးနရေ ပွီးမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ပွနျလာခဲ့သညျ။ လဆေိပျတှငျ ကွိုမဲ့သူ မရှိ။ ဖူးဖူးက ကိုလငျးအိမျကို အရငျပွနျပါဟု ပွောသညျ။ ကိုလငျးအိမျက ပုဇှနျတောငျမှာ။ မွို့ထဲသို့ ဘတျဈကား စီးလာခဲ့သညျ။ အရငျလို တော့ မဟုတျတော့။ YBS စနဈက အကောငျအထညျပျေါနပွေီဖွဈရာ အားရပါးရတကျစီးလာခဲ့သညျ။ သိပျတော့ လဲ မထူးပါ။ စပယျယာတှကေလဲ ဟောကျမွဲပါပဲ။ ကားတှကေလညျး လု မောငျးဆဲပါပဲ။ မျောတျောပီကယျကလဲ ဖမျးဆဲပါပဲ။
ပုံးထဲ ငှထေညျ့ရတာနှငျ့ စပယျယာလာကောကျတာတော့ ကှာသညျ။ အိမျရောကျတော့ ကိုလငျး မိဘတှရေော နှမတှပေါ မကျြလုံးပွူးသှားသညျ။ ကွောငျကွညျ့ကာ တဈမိ နဈလောကျ စကားမပွောနိုငျ။ ပွီးတော့မှ ကိုလငျးတို့ကို အိမျထဲသို့ ချေါသှငျးသညျ။ အမလေုပျသူက သူ့သား သရှောပွနျကွီးကို ပွနျတှရေ့လို့ ငိုတော့သညျ။ အဖလေုပျသူကတော့ ကွညျနူးနသေညျ။ ကိုလငျးက ဖူးဖူးနှငျ့ သမီးကို ပွကာ မိတျဆကျပေးလိုကျသညျ။ အကွောငျးစုံကိုလညျး ရှငျးပွလိုကျတော့ သဘောပေါကျသှားကွ သညျ။ မွေးကိုရော ခြှေးမကိုပါ ခဈြကွသညျ။ ဖူးဖူးကို မေးတော့မှ ပိုအဆငျပွသှေားသညျ။ ဖူးဖူး၏ အဖကေ ကိုလငျးအဖနှေငျ့ သငျတနျးတဈခု အတူတကျခဲ့ဖူးသညျ။ ဘီယာသောကျဖျောမြားဖွဈသညျ။ အိမျမှာတဈရကျနားခိုငျးကာ နောကျနကေ့မြှ ကိုလငျးအဖကေ ကားဖွငျ့ ဖူးဖူးတို့အိမျ လိုကျပို့သညျ။ ဖူးဖူးတို့အိမျက မွောကျဥက်ကလာမှာ။ ရောကျတော့ ကိုလငျးမိဘတှလေိုပငျ ကွောငျကွညျ့နကွေသညျ။
နောကျ မှ ဆှမျးသှပျပွီးတာ တဈနှဈကြျောခဲ့ပွီ သမီးရယျ ဟုပွောကာ ငိုကွလတေော့သညျ။ နှဈယောကျလုံးငိုကွခွငျး ဖွဈ သညျ။ နောကျမှ ကိုလငျးအဖကေ ဦးဆောငျကာ ဖွဈကွောငျးကုနျစငျ ပွောပွလရော ဖူးဖူး၏ ဖခငျရော မိခငျပါ ကနြေပျသှားသညျ။ သူ့သမီး မင်ျဂလာမဆောငျဘဲ ယောကငြ်္ားရသှားသညျကိုလညျး စိတျမဆိုးကွတော့ပါ။ သူတို့ သာဆိုရငျ ဒီလို သမီးလေးတဈယောကျ ကနျြးကနျြးမာမာ မှေးနိုငျမညျမထငျကွောငျးပွောကာ ဖူးဖူးကိုရော ကိုလငျးကိုပါ ခြီးကြူးသညျ။ ထို့နောကျ ကိုလငျးလကျထဲသို့ သော့နှဈခြောငျး ထညျ့ပေးသညျ။ လိပျစာကဒျ တဈကဒျ ထညျ့ပေးသညျ။ ကိုလငျး ပထမတော့ ဘာမှနျးမသိ။ နောကျတော့မှ ဗဟနျးမှာ အိမျတဈလုံးရှိသညျတဲ့။ ထိုအိမျကို လကျဖှဲ့သညျ၊ အိမျမှာ ကားဂိုထောငျထဲ ကားတဈစီးရှိသညျ။
နောကျသော့တဈခြောငျးက အဲဒီ ကားသော့ ဖွဈသညျ။ ကိုလငျး မယူလိုပါ။ သို့သျော ကိုလငျးအဖကေ ယူလိုကျပါသား အဖသေူ့ငယျခငျြးက အဲဒီ လောကျနဲ့ စီးပှားမပကျြလောကျပါဘူးဟု ရယျကြဲကြဲပွောသဖွငျ့ ယူလိုကျရသညျ။ ဖူးဖူးအဖကေ ကိုလငျးအဖေ ကို လကျသီးထောငျပွသညျ။ သွျော ကွညျနူးစရာကောငျးသော ဘဝတဈခုပါလား။ ကိုလငျး မိဘမြားကို ကိုလငျးကိုရော ဖူးဖူးကိုပါ သူတို့ပိုငျသော ကုမ်ပဏီတှငျ အလုပျတဈခုစီပေးသညျ။ ရှယျယာတှလေညျး ခှဲပေးသညျ။ ကိုလငျးတို့မှာ အိမျပိုငျယာပိုငျကားပိုငျ ဖွဈသှားသညျ။ သို့သျော ကြှနျးပျေါမှာ တုနျးကလို လိုခငျြတာ ခကျြခငျြး မရနိုငျတော့ပေ။ ဝယျရသညျ။ မှာယူရသညျ။ ကြှနျးပျေါက အရသာနှငျ့တော့ မတူပါ။
ကြှနျးပျေါမှာ အလိုဆန်ဒတှေ သိပျမရှိလှ။ စားလို့နလေို့ရ တျောပွီပေါ့။ ဒီရောကျတော့ မရတော့။ ကြား ကွီးလာလလေေ ခွရောကွီးလာလလေေ ဖွဈနပေါပွီ။ နှဈယောကျစလုံး ကြှနျးပျေါတှငျ အဝတျဗလာဖွငျ့ ကွိုကျ တဲ့အခြိနျ ကွိုကျသလိုနနေိုငျသညျ့ အရိုငျးဆနျသညျ့ ဘဝလေးကို တဈခါတရံ ဆှေးဆှေးမွမွေ့ေ့ ပွောဖွဈကွ သညျ။ သမီးလေး အရှယျရောကျလာပွီ။ နောကျထပျ သမီးလေးတဈယောကျ ထပျထှနျးကားသညျ။ သမီးငယျ ကိုတော့ ကောငျးကငျမေ ဟု ပေးလိုကျသညျ။ အဏ်ဏဝါရဲ့အဖျောက ကောငျးကငျ ဖွဈရမညျမဟုတျပါလား။ လုပျငနျးမြားအောငျမွငျလာတော့ သူဖွဈခငျြတာကို အကောငျအထညျဖျောခှငျ့ရသညျ။ ကြှနျးကလေးကို တဈ ခေါကျပွနျသှားခငျြသညျ။ စင်ျကာပူကို မိသားစုလိုကျခြီတကျသှားသညျ။ လှယျတော့မလှယျ။
သူလိုကျပါလာသညျ့ သင်ျဘော ပိုငျဆိုငျသညျ့ NGO ကို ရှာရသညျ။ တှတေ့ော့ သူတို့ပါလာသညျ့ သင်ျဘောက ယခု မသုံးနိုငျတော့။ ဒါနဲ့ သင်ျဘော၏ အခကျြအလကျမြားကို ရှာဖှပေေးဖို့ အကူအညီတောငျးရသညျ။ သူလိုခငျြသညျက ထိုရကျစှဲ တှငျ မှတျတမျးတငျခဲ့သညျ့ ခရီးစဉျ အိမျမွှောငျညှနျး။ ရခဲ့ပါသညျ။ ငှကေုနျခံနိုငျတော့ ကံလဲကောငျးလှနျးတော့ လိုခငျြတာကို ရအောငျယူနိုငျခဲ့သညျ။ သင်ျဘောတဈစီး စငျးလုံးငှားရသညျ။ ထို့နောကျ ထိုကြှနျးကို တဈခေါကျ ပွနျသှားသညျ။ ဒီဘကျခတျေ သင်ျဘောတှေ မွနျဆနျလာသညျ။ သုံးရကျလောကျ မောငျးပွနျလာရသညျ့ ခရီးကို တဈရကျ စှနျးစှနျးဖွငျ့ ရောကျသှားသညျ။ ကြှနျးကို မကျြဝါးထငျထငျ မွငျရတော့ အံ့သွသှားမိသညျ။ ထိုကြှနျးတှငျ ယခငျက သူတို့နှဈယောကျတညျးသာ။
အခုတော့ ကြှနျးပျေါတှငျ အိမျကလေးမြား အစီအရီ။ သင်ျဘောလမျးပွကွီးကို မေးကွညျ့တော့ ဒီကြှနျးက ယခငျက လူမနေ။ နောကျတော့ လူနအေိမျမြား ရှိလာသညျ။ အစိုးရ၏ အုပျခြုပျမှုအောကျတှငျ ရှိနပွေီ။ ဥပဒစေိုးမိုးမှုလညျး ရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ ကြှနျးပျေါသို့ တကျသှားတော့ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားက သင်ျဘောပျေါသို့ တကျစဈသညျ။ ကိုလငျး(ခ) ဦးလငျးကိုကိုက စင်ျကာပူသံရုံးမှ ထောကျခံပေးလိုကျသော ထောကျခံစာကို အပျနှံလိုကျတော့မှ ကြှနျးပျေါသို့ အသာတကွညျ ချေါ သှားသညျ။
ကြှနျးက သေးသေးလေး။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျးပျေါမှာ လူနအေိမျကလေးမြား လှလှပပ ဆောကျထားကွ သညျ။ သဈတောကွီးလညျး မရှိတော့။ တောငျကွီးကတော့ ရှိနသေေးသညျ။ ကိုလငျးက သူ ဒီထဲက ဂူထဲမှာ တဈနှဈလောကျ နဖေူးကွောငျး၊ အထဲမှာ ခြောကျကွီးရှိကွောငျး၊ ဟိုဘကျမှာ ဂူပေါကျတဈပေါကျ ရှိကွောငျး ပွောသညျ့အခါမှ ကြှနျးစောငျ့ရဲမြား သွခယြူရတော့သညျ။ သူတို့ဒီထဲကို ရောကျတော့ ပစ်စညျးအခြို့ တှသေ့ညျ။ တဈခြိနျတုနျးက လူနခေဲ့သညျကို တှသေ့ညျ။ ဟောငျးနှမျးစုတျပွတျနသေညျဟုပွောသညျ။ ထိုပစ်စညျးပိုငျရှငျကို အရှငျလတျလတျ တှရေ့သဖွငျ့ အံ့အား သငျ့ကုနျကွခွငျး ဖွဈသညျ။ ထို့နောကျ ကြှနျးစောငျ့ရဲမြားနှငျ့ စကား ဖောငျဖောငျပွောရငျ ကြှနျးပျေါလှညျ့ပတျပွသညျ။
သွျော ဒီနရောက ဘာလုပျခဲ့သညျ့နရော၊ စသညျဖွငျ့ ဇနီးသညျကို တိုးတိုးလေး ကပျပွောတော့ ဇနီးသညျ ဖူးဖူး ရှကျသှေးဖွာရသညျ။ သမီးကွီး အသကျ နှဈဆယျ ကြျောပွီဖွဈရာ သူလညျး လေးဆယျစှနျးစှနျး ဖွဈနပွေီမဟုတျပါလား။ သမီးတို့ကိုလညျး သူတို့နခေဲ့သညျ့ နရောမြား၊ ရထှေကျအိုငျတို့ကို လိုကျပွသညျ။ ကြှနျးပျေါမှာ တဈညနရော ကြှနျးစောငျ့ရဲအဖှဲ့က ပငျလယျစာမြား ဖွငျ့ ကောငျးကောငျး ဧညျ့ခံသဖွငျ့ တဝကွီး တှယျလိုကျကွသေးသညျ။ နောကျတဈနေ့ မနကျမိုးလငျးတော့မှ စင်ျကာပူသို့ ပွနျလာကာ ထိုမှတဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလာ ကွ တော့သညျ။ နောငျတဈခြိနျ အဏ်ဏဝါနှငျ့ ကောငျးကငျမကေ သူတို့ညီအဈမ ဒီကြှနျးကို ရောကျအောငျ ပွနျလာ အုံးမညျဟု ပွောကွသညျ။ သူတို့ သှားနိုငျကွမှာပါ။ ကိုလငျးနှငျ့ ဖူးဖူးတို့ သားသမီးနှဈယောကျ ထကျမွကျကွ ပါသညျ။ သမီးကွီးဖွဈသူရော သမီးငယျဖွဈသူပါ အိမျထောငျမပွုကွဘဲ အပြိုကွီးမြားဘဝဖွငျ့သာ မိဘနှငျ့ အတူ နကွေရငျး ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးလာခဲ့သညျ….ပွီး။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီး ခိုင်ရွှေဝါ။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ နည်းပညာများဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ သီလဝါ သင်္ဘောကျင်းတွင် ဆောက်လုပ်သော သင်္ဘောကြီးဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်စွမ်းအား မြင့်မားသဖြင့် မြန် နှုန်းမြင့်မားသည်သာမက သင်္ဘောတွင် ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကလည်း အလွန်ကောင်းမွန်လှသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်များပါ လက်မှတ်အလုအယက်ဝယ်ယူ စီးနင်းကြသည့် သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းလည်းဖြစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံခြားသားများက ကမ္ဘာကျော် တိုင်တန်းနစ် သင်္ဘောကြီး လောက် မကြီးမားစေကာမူ လက်ရှိခေတ်နှင့်လျော်ညီသည့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် တိုင်တန်းနစ်ကိုစီးရ သည်ထက် ပိုကောင်းနိုင်ကြောင်း အမွှမ်းတင်ကြလေသည်။ သူတို့ မွှမ်းမယ်ဆိုလည်း မွှမ်းထိုက်ပေသည်။
သင်္ဘောကြီး၏ တည်ဆောက်ပုံက လှပသေသပ်လှသလို သင်္ဘောကြီး၏ တည်ငြိမ်မှုထိန်းစနစ်ကလည်း ခေတ်မီနည်းပညာကို သုံးထားသဖြင့် ကြမ်းပြင်ကို နားကပ် ထောင်ကြည့်လျှင်ပင် အင်ဂျင်စက်သံ တုန်ခါမှုက ကြားရသည်ဆိုရုံမျှသာ ရှိသည်။ တော်ရုံ လှိုင်းလေလောက်က ခိုင်ရွှေဝါကို မှောက်ဖို့ဝေးစွ တုန်ခါအောင်ပင် မလုပ်နိုင်ချေ။ သင်္ဘောပေါ်တွင် စားသောက်ခန်း၊ ကလေးကစား ကွင်း၊ မီနီဘောလုံးကွင်း၊ မီနီဂေါက်ကွင်း၊ ရေကူးကန်များ မီနီမါးကတ်ကလေးများ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထား သည်သာမက အထပ်ငါးထပ်၏ အပေါ်ဆုံးနှစ်ထပ်တွင် ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်များတွင်ပေးသည့် ခမ်းနားမှုထက် မညံ့လှသည့် နှစ်ယောက်အိပ်ခန်း၊ မိသားစုအိပ်ခန်းများ၊ တစ်ယောက်ခန်းများလည်း ရှိနေပြန်သည်။
ခေါင်မိုးထက်တွင်မူ လေညှင်းခံရန် ပက်လက်ထိုင်ခုံများ ချပေးထားသည်။ မည်သည့်နေရာကို ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုမှ အခပေးငှားရမ်းထားသ ဖြင့် အမ်ပီတီ 4G နက်ဝါ့ခ်ကို သုံးစွဲနိုင်သည့်အပြင် သင်္ဘောမှ အခမဲ့ပေးထားသော မြန်နှုန်းမြင့် ဝိုင်ဖိုင်စနစ်ကို လည်း အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်သေးသည်။ ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့် ဖုန်းမှ စာဖတ်နိုင်သလို စာအုပ်ငှားရမ်းဖတ်ရှုလိုပါကလည်း သင်္ဘောလက်မှတ် စမတ်ကတ်ဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အများသူငါ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည် ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော် ဇိမ်ခံသင်္ဘော ဖြစ်သဖြင့် ဇိမ်ခံနိုင်လောက်သည့် လူတန်းစားများသာ လိုက်ပါစီးနင်း နိုင် ပေသည်။ ရန်ကုန် ကော့သောင်း အသွားအပြန်ခရီးစဉ်က သင်္ဘောခချည်း တစ်ယောက် ငါးသိန်း ပေးရသည်ကိုး။ အစားအသောက်ကလည်း ကောင်းသလောက် ဈေးနှုန်းမြင့်မားလှသည်။ သင်္ဘောအကြောင်းကို အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်မှာ ရှည်လျှားလွန်းနေပြီ။ ထို့ကြောင့် အဓိက ဇာတ်လမ်းပိုင်း ကို ဆက်ကြပါစို့။ သင်္ဘောဆိပ်တွင် လူစည်ကားလွန်းလှသည်။ သင်္ဘောပေါ်တက်သည့်သူ ပြန်ဆင်းသည့်သူများ ပျားပန်း ခတ်မျှ ဖြစ်နေသည်။ သင်္ဘောပေါ်လိုက်သည့် လူများသည်လည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံလှ ပေသည်။ အပျော်စီးနင်းသူ၊ အပန်းဖြေလိုသူ၊ စာရေးရန် ကုန်ကြမ်းရှာသူ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ဓာတ်ပုံဆရာ စသည် စသည်ဖြင့် မျိုးစုံလှသည်။
ဘော်…… ဆိုသည့် ခန့်ညားထယ်ဝါလှသည့် ဥသြသံကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ခရာသံများ တရွှီရွှီ ထွက်လာကာ သင်္ဘော၏ ဦးကြိုး၊ ပဲ့ကြိုး၊ ခါးကြိုး၊ ဂုတ်ကြိုးများအား သင်္ဘောဝန်ထမ်းများမှ ဖြည်နေပြီ။ ထိုစဉ် အထုပ်အပိုး တပွေ့တပိုက်နှင့် အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး ပြေးဆင်းလာသည်။ သင်္ဘောမှာ ကမ်းမှ စခွာရန် တာစူနေပြီဖြစ်ရာ ကုန်းပတ်နှင့် ဗောတံတားမှာ သုံးပေခန့်ကွာနေပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ထိုလူငယ်မှာ သင်္ဘောပေါ်သို့ ချောချောမွေ့မွေ့ ခြေချနိုင်လိုက်သည်။ သင်္ဘောပေါ် ရောက်သည်နှင့် သင်္ဘောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက လူငယ်၏ လက်မှတ်နှင့် လူငယ်၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ပါ မပါ စစ်ဆေးနေသည်။ ထို့နောက် လူငယ်အား သူစီးနင်းရမည့် အထပ်သို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်လေတော့သည်။ ထိုလူငယ်ကား ကျွန်ုပ်၏ ဇာတ်လမ်းတွင် အဓိက သရုပ်ဆောင်မည့် လင်းကိုကို (ခ) ကိုလင်း ဖြစ်ပေတော့သည်။
သင်္ဘော ကပ္ပတိန်ဖြစ်သူ ဦးအောင်မြတ် သူ့အခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး သင်္ဘော၏ ခေါင်မိုး အရှေ့ပိုင်း ရှိ ကယ်ဗင်ခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင် သင်္ဘောမောင်းနှင်သက်တမ်း ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သော ဦးမိုးကြိုး က ပဲ့ကိုင်ဘီးကို ကျင်လည်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းကျောင်းနေသည်။ ကယ်ဗင်ခန်းနှင့် ကပ်လျှက်တွင် ပင်မ ထိန်းချုပ် ခန်း၊ မြေပုံခန်း၊ လမ်းပြအခန်းတို့ရှိကာ သက်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများက စက်အားညှိခြင်း၊ လမ်းကြောင်း တွက်ချက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ သင်္ဘောကြီးသည်ကား ရန်ကုန်မြစ်ဝသို့ ရောက်နေပေပြီ။ ဦးအောင်မြတ် သူ့သင်္ဘောကြီးအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်နေပုံရသည်။
မြစ်ဝရောက်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ပင်လယ်ထဲ သို့ဖြတ်သန်းရန် မိုးလေဝသ အင်ဂျင်နီယာအား အခြေအနေမေးလိုက်ရာ အခြေအနေကောင်းကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ ဦးအောင်မြတ်က သင်္ဘောကြီးအား စက်ကုန်ဖွင့်မောင်းနှင်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်လေတော့ သည်။ လက်ထောက်ကပ္ပတိန် ဦးသော်ဇင်ထွန်းက ကြေးနန်းမောင်းတံကို Full ဆိုသည့်နေရာသို့ ဆွဲချလိုက်ရာ စက်ခန်းအင်ဂျင်နီယာက တစ်နာရီ ရေမိုင် သုံးဆယ်ခန့် မောင်းနှင်နေရာမှ တစ်နာရီ ရေမိုင် ခြောက်ဆယ်သို့ ဒိုင်ခွက်များကို စစ်ဆေးကာ စက်ကုန်ဖွင့်လိုက်တော့သည်။ သင်္ဘော၏ နောက်ခြမ်းဆီမှ ရေမြှုပ်တို့ကလည်း ယခင်ကထက် နှစ်ဆလောက် ဆူပွက်လာကာ သင်္ဘောမြန်နှုန်းမှာ သိသိသာသာ ထိုးတက်လာတော့သည်။ သို့ သော် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပင်လယ်ကြီး ပတ်လည်ဝိုင်းနေသဖြင့် ခရီးသည်များကတော့ မြန်လားနှေးလား မမှန်း တတ်ပေ။ အချို့ကလည်း ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေကြသည်။
အချို့ကလည်း လေသာဆောင်တွင် လေညှင်းခံနေကြသည်။ ရေကူးကန်တွင်လည်း ဘီကီနီကိုယ်စီ အလှပဂေးလေးများ ရေကူးနေကြပေပြီ။ သင်္ဘောပေါ်မှဟု မထင်ရလောက်အောင် တည်ငြိမ်လွန်းလှသည်။ မနက် ၈ နာရီကနေ စထွက်လာလိုက်သည် မှာ ဘာလိုလိုနှင့် ညနေစောင်းနေပါပြီကော။ နေလုံးကြီးသည်လည်း အနောက်ဂေါယာကျွန်းသို့ ယွန်းလုပြီ။ Sun Set ကို ကြည့်ချင်သူများက အမိုးပေါ်တွင် အပြည့်နေရာယူထားကြသည်။ အချို့ကလည်း ကင်မရာဖြင့်၊ အချို့ကလည်း ပန်းချီဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ နေလုံးနီနီကြီးသည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာရာမှ မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းကြီးအောက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ငုပ်လျှိုးသွားလေပြီ။ သင်္ဘောတွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်မီးများမှာ အလင်းရောင်အာရုံခံစနစ် တပ်ဆင်ထားသဖြင့် အလင်းရောင်နည်းသွားသည်နှင့် အလိုလို လင်းလာခြင်း ဖြစ် သည်။
ထိုအချိန်တွင် တစ်နေကုန် တိတ်ဆိတ်နေသော ထမင်းစားဆောင်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များမှာ လူစည်ကားသော အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလေတော့သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးနောက် ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် ကြို့တို့ကျဲတဲ သွားလာလမ်းလျှောက်နေကြသည်။ အချို့က သင်္ဘောရုပ်ရှင်ရုံတွင် ရုပ်ရှင် ဝင်ကြည့်ကြသည်။ သင်္ဘော၏ နောက်မြီးပိုင်းတွင် ၁၈ နှစ်အရွယ် မိန်းမချောလေးတစ်ဦး ထိုင်နေသည်။ သူများတကာတွေ အဖော်များနှင့် လျှောက်သွား ပျော်ပါးနေသည်က သူမနှင့် ဆိုင်ပုံမရချေ။ အနောက်တွင် တဖွားဖွားထနေသော ပန်ကာဒလက်ရေစီးကြောင်းများဆီသို့သာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ငေးကြည့်နေလေသည်။ သူမ၏ အမည်ကား ဖူးပွင့်ဝေ။ သူမတွင် ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်သက်မက ဆယ်သက်ပင်စားမကုန်သည့် စည်းစိမ်ချမ်းသာများကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ သည်။
သူမ၏ ဖခင်က နိုင်ငံတကာတွင် လှည့်လည်နေသည့် ကျောက်မျက်ကုန်သည်ကြီးဖြစ်သလို သူမ၏ မိခင် ကလည်း ရန်ကုန်တွင် နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် သူမလိုချင်သည်ကား ထို စည်းစိမ်ချမ်းသာများ မဟုတ်ချေ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပင်ဖြစ်သည်။ ရတာမလို လိုတာမရ ဆိုသကဲ့သို့ သူမ၏ ဖခင် ဖြစ်သူမှာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချို့၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း မိန်းကလေးများ ဝိုင်းဝိုင်းလည်ကာ သမီးဖြစ်သူကို ဂရုမစိုက်နိုင်သလို မိခင်လုပ်သူမှာလည်း လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေရသည်နှင့် အချိန်ကုန်ရာ သမီးဖြစ်သူမှာ အိမ် တွင်းပုန်းရင်းသာ အချိန်ကုန်နေရလေတော့သည်။ သူမအား စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြပ်နေသည့် မိန်းကလေး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကြောင့် အပြင်ထွက်ရန်လည်း မစွမ်းသာပေ။
သို့နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူကို အသည်းအသန်ပူဆာ ရာမှ ဒီသင်္ဘောနှင့် အပန်းဖြေခရီးသွားခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းမလေး နှစ်ယောက်ကို အတင်းထည့်ပေးလိုက်သေးသည်။ ကံကောင်းသည်က ထိုဝန်ထမ်းများမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသဖြင့် ဖူးပွင့်ဝေက သူမတို့နှစ်ဦးကို ငွေနှစ်သိန်းစီ ထုတ်ပေးကာ သူမနောက်သို့မလိုက်ရန်နှင့် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှသာ ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကာ ချော့မော့ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ လူအမျိုးမျိုး သောကအထွေထွေ မဟုတ်ပါလား။ သင်္ဘောကြီး၏ မိုးလေဝသအရာရှိ ကိုဇော်ကြီးတစ်ယောက် မိုးလေဝသခန်းထဲတွင် ကောင်းကောင်းကြီး အိပ်ငိုက်နေသည်။ ဒီလို မိုးလေဝသကောင်းမွန်သည့်ကာလတွင် ခရီးထွက်ရရာ သူ့အတွက်တော့ ပျင်းစရာကြီး ဖြစ်နေပေသည်။ သူ့ရှေ့တွင် လေတိုက်နှုန်း၊ လေဖိအား၊ ရေစူး အစရှိသည်တို့ ညွှန်ပြသည့် စကရင်နှင့်အတူ ရေပြင်အထက်မှ အရာအားလုံးကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် ရေဒါစကရင်နှင့် ရေအောက်မှ သင်္ဘောပျက် အစရှိသည့် အရာအားလုံးကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည့် ဆိုနာစကရင်တို့က သူ့အလုပ်သူလုပ်နေသည်။ မိုးလေ၀ သ ကောင်းမွန်နေသဖြင့် သူစိတ်ချလက်ချ အိပ်ငိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဒီသင်္ဘောကြီးက တော်ရုံတန်ရုံ မုန်တိုင်းလောက်ကို မဖြုံသည်ကိုလည်း သူသိသည်။ သူအိပ်ငိုက်နေစဉ်မှာပင် သင်္ဘောကြီး၏ ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲစေမည့် တစ်စုံတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်နေသည်ကိုကား သူမသိရိုးအမှန်ပါ။ အစိမ်းရောင် မျဉ်းကြောင်းက ပတ်ပတ်လည် လှည့်ပတ်နေရာမှ ဆိုနာစကရင်ပေါ်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား အရာတစ်ခု ဗဟိုသို့ ချဉ်းကပ်နေပြီး ရေဒါစကရင်တွင်မူ မှိန်ပြပြ အရာတစ်ခုက ဆိုနာရှိအရာနှင့် တစ်နေရာ တည်းဆီမှ ချည်းကပ်လာနေသည်။ အိပ်ပျော်နေသည့် ကိုဇော်ကြီးကတော့ မသိရှာပေ။ ထိုအရာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရသည်က သင်္ဘောရေကြောင်းပြ အင်ဂျင်နီယာ ကိုသန်းစိုး။ ကိုသန်းစိုးလည်း အစက ရှေ့ကို မကြည့်မိပါ။ သင်္ဘောက လမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်း သွားနေသည်ကို သံလိုက်အိမ်မြှောင်ဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ရာ စိတ်ချရသည်ပဲ။
သူ့လမ်းပြမျှော်စင် အောက်ဘက်ရှိ ရေကူးကန်တွင် ရေကူးနေကြကုန်သော လှပျိုဖြူများ၏ တင်ပါး၊ ရင်သားများကိုသာ ဘီကီနီထုတ်ချင်းပေါက်မတတ် ဂလုနေလေတော့သည်။ ထိုအချိန် တွင် သူချောင်းနေသည်ကို မြင်သည့် လှပဂေးလေးတစ်ယောက်က နှာဘူးကြီးရေ ဟု လှမ်းအော်စလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ သင်္ဘောဦးဘက်သို့ ပြန်လှည့်လိုက်သည်။ ထိုစဉ် ဆာ့ခ်ျလိုက်များ ထိန်နေအောင် ထိုးထားသည့် အလင်းရောင်တွင် ရိပ်ကနဲ တွေ့လိုက်သည်က ဖြူဖြူအရာတစ်ခု။ သေချာအောင် မှန်ပြောင်းနှင့် ရှေ့သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ညကြည့်မှန်ပြောင်းအတွင်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရသည်က ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခု၏ အစွန်းပေတည်း။ ကိုသန်းစိုး ဆံပင်ထောင်သွားသည်။ ကိုက် ၅၀၀ ခန့်သာ လိုတော့သည်လေ။ ဒီနှုန်းထားအတိုင်း ဆက်သွားနေလျှင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဝင်တိုက်မိတော့မည်။
ကိုသန်းစိုး ကမန်းကတန်း အိုင်ကွန်ဖြင့် လှမ်းအော်ရသည်။ ပဲ့စင်ပေါ်မှ ဦးမိုးကြိုးက ချက်ချင်းတုန့်ပြန်သည်။ သန်းစိုးဘာတွေ့သလဲ တဲ့။ ကျောက်ဆောင် ကျောက်ဆောင် ဘယ်ကွေ့ ဘယ်ကွေ့ဟု အသံကုန် ဟစ်လိုက် သည်။ ဦးမိုးကြိုး ထိတ်လန့်တကြားဖြင့် ပဲ့ထိန်းဘီးကို ဘယ်ဘက်သို့ ကမန်းကတန်း ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ ပါဝါ စတီယာရင် စနစ်ဖြစ်သဖြင့် သုံးပတ်မျှလှည့်ပြီးတော့ ပဲ့ဆုံးသွားပြီ။ သင်္ဘောက သွားနေသည့်အရှိန်များနေ သဖြင့် မကွေ့သေး။ ဦးမိုးကြိုး စက်ခန်းသို့ Reverse Signal ပို့လိုက်သည်။ ကလင်ကလင်ဟုမြည်ကာ မျှားတံ က Reverse နေရာသို့ညွှန်နေသဖြင့် စက်ခန်းအင်ဂျင်နီယာ အံ့သြသွားသည်။ သို့သော် သင်္ဘောသွားနေစဉ် ကပ္ပတိန်အမိန့် ပြီးလျှင် ပဲ့ထိန်းသူ၏ အမိန့်က အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ပါလား။
စက်အားလုံး၏ လောင်စာစနစ် အားလုံး ဖြုတ်ချလိုက်သည်။ သင်္ဘောကြီး၏ စက်မကြီး ပိတ်သွားသည့်အကြောင်း မီးအနီလေးက ပြနေသည်။ မီးအနီလင်းလာသည်နှင့် နောက်ပြန်ဂီယာပြန်ထိုးကာ စက်ပြန်နှိုးလိုက်ပြီး စက်ကုန်ပြန်ဖွင့်လိုက်သည်။ သို့သော် နောက်ကျသွားပေပြီ။ ပင်လယ်ပြင်တွင် ထီးတည်းထိုးထွက်နေသည့် ကျောက်တောင်အစွန်းက သင်္ဘော၏ ဝမ်းဗိုက်ကို ထိုးခွဲသွားသည်သာမက ပန်ကာရွက်များကိုပါ ဖြတ်ချသွားသဖြင့် နောက်ပြန်မဆုတ် နိုင် တော့ပေ။ ထိန်းချုပ်ခန်းအတွင်း ရေဝင်သည့်သင်္ကေတမီးများ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး လင်းလာရာ ရေလုံခန်းများ ပိတ်ရန် ခလုတ်များကို အနားရှိမျဉ်းလုံးဖြင့် တပြိုင်တည်းဖိချလိုက်သည်။ မရတော့ပါ။ ရေဝင်သွားသဖြင့် ရေလုံ ခန်းတံခါးအချို့ အလုပ်မလုပ်တော့ချေ။ ရေများက ဝမ်းထဲသို့ ဥဒဟို ဝင်လာတော့သည်။
သင်္ဘောပေါ်မှာ ရေကူးနေသော လှပျိုဖြူကလေးများကလည်း ရေများဘောင်ဘင်ခတ်ကာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အခန်းများသို့ ဝင်ပြေးကုန်ကြလေပြီ။ လှေများချသူက ချနေပြီ။ တိုင်တန်းနစ်မှာလို လှေမလောက် မှာတော့ ပူစရာမလိုပေ။ သင်္ဘောမထွက်ခင်ကတည်းက သက်ဆိုင်ရာက လာရောက်စစ်ဆေးထားပြီးသားဖြစ် သည်။ လူအင်အားထက် ပိုလျှံသည့် အသက်ကယ်လှေအရေအတွက်ကို ယူဆောင်လာပြီးဖြစ်သည်။ လူအကုန် အသက်ကယ်လှေများဖြင့် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သင်္ဘောကြီးမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း နစ်မြုပ်သွားလေတော့သည်။ အပြောကျယ်လှသည့် ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲတွင် ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်လမ်းမမြင် ဘဝကြီးကို ဖြတ်သန်းရမည့် လှေများ မနည်းမနောပါလား။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လှေများ စုဝေးနေရာမှာ တစ်စီးနှင့် တစ်စီး ဝေးကွာသွားတော့သည်။ လှေများတွင် အသက်ကယ်စားစရာများ အချက်ပြမီးများ ရေများ ထည့်သွင်း ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကံဆိုးပေစွ။ ပင်လယ်ပြင်သည်ကား အမြဲအစိုးရနေသည်မဟုတ်ပေ။
ခုန ကြည် လင်နေသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးသည် ရုတ်ချည်းပင် မဲမှောင်လာကာ လှိုင်းကြီးများ ကြီးလာတော့သည်။ လှေပေါ် ရှိ ခရီးသည်များသည်လည်း လှေပေါ်က လွင့်မကျရေး လှေပေါ်ရှိကြိုးများဖြင့် လက်ကောက်ဝတ်ကို ချည်နှောင် ကာ အသက်လုကြလေတော့သည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လေပြင်းသာတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပင် သူမဟုတ်သလို ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားသည့် ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာ ဆန်းကြယ်ပေစွ။ ကိုလင်း ခေါင်းထဲတွင် မူးဝေနောက်ကျိနေသည်။ ပါးစပ်ထဲမှလည်း အလွန်ငံလှသည့် အရသာကြီးက ကြီးစိုးနေသည်။ ကိုယ်တွေလက်တွေတစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲနေသည်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်ကို ရောက်လို့ ရောက် နေမှန်းလည်း မသိ။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ပူခြစ်တောက်နေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ကောင်းကောင်း သတိရလာ တော့မှ သူ သောင်ပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေသည်ပဲ။
သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ညကလား ဟိုတနေ့ညကလား မသေချာ။ သင်္ဘောမြုပ်သည်။ အသက်ကယ်လှေနှင့် လူအပြည့်ပါလာသည်။ မုန်တိုင်းတိုက်တာလားဘာလားမသိ။ တချို့ ကျကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တချို့ လှေကိုဖက်တွယ်ထားသည်။ သူတို့တွေရော ဘယ်မှာလည်း မသိ။ ဘေးဘီကို သတိထားကြည့်တော့ ပစ္စည်းတချို့ တစ်စစီ ပြန့်ကျဲနေသည် ကိုသာ တွေ့ရသည်။ အင်း ကျွန်းတစ်ခုခုပေါ် ရောက်နေတာလား၊ ဘယ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲမှာလဲ၊ ကမ်းရိုးတန်း လား မသေချာ။ လောလောဆယ် ဗိုက်တအားဆာနေသည်။ ဘာစားလို့ရမလဲ စဉ်းစားသည်။ ကျွန်းဆိုတော့ အုန်းပင်ကတော့ ပေါသည်။ အုန်းသီးစားပြီးအသက်ဆက်လို့ ရနိုင်သည်ပဲ။ အသက်တော့ မသေလောက်ပေ။ ဒါနဲ့ပဲ အားယူပြီးထလိုက်သည်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ စုတ်ပြဲပေရေနေပြီ။ အို ကျွန်းပေါ်မှာ လူရှိတော့ လည်း တောင်းဝတ်တာပေါ့၊
မရှိတော့လဲ မဝတ် ဘာဖြစ်တာမှတ်လို့။ ရှက်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒီလိုမျိုး တွေး လိုက်သည်။ သူနဲ့အတူ ကျွန်းပေါ်ရောက်လာသည့် ပစ္စည်းများထဲမှ အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းများ ပါလေမလား လိုက်ရှာကြည့်သည်။ အမှိုက်ကောက်သမားလို ရှိသမျှပစ္စည်း အကုန်ယူသည်။ အသုံးမတည့်လောက်သည့် ဘရာစီယာလိုဟာမျိုးတော့ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဆီမှာ ပစ္စည်းအချို့ပိုင်ဆိုင်သွားသည်။ အသုံးအတည့်ဆုံးက ၉ မမ လူဂါပစ္စတို တစ်လက်နှင့် ကျည်ဆန် ၁၀၀ ခန့် ပါသည့် အိတ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ အိတ်က ရေထဲနစ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အသက်ကယ်အင်္ကျီနှင့် ချိတ်နေသဖြင့်သာ လှိုင်းပုတ်ကာ ဒီနေရာသို့ လာတင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဓားမြှောင် တစ်လက်၊ ခပ်စုတ်စုတ် မှန်ပြောင်းတစ်လက်၊ လေပေါက်ထွက်သွားသည့် အသက်ကယ်လှေ တစ်စီးတို့ပင် တည်း။
အသက်ကယ်လှေက တစ်ချိန်ချိန်မှာ အသုံးတည့်လာနိုင်သည်။ အသက်ကယ်လှေတွင် လေအိုးတစ်လုံး တွဲလျက်ပါသော်လည်း လေက တစ်ခါသုံးဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွားပေပြီ။ တွဲလျှက် တပ်ဆင်ထားသော Survival Kit အတွင်းမှ စည်သွတ်အလုံပိတ်ထားသည့် သောက်ရေသန့်ဘူးအချို့၊ အရည်ပျော်နေသည့် သကြားလုံး အထုပ် အနည်းငယ်လည်း တွေ့ရသည်။ အသုံးအတည့်ဆုံးမှာ မီးကျည်တွဲ ဖြစ်သည်။ အကယ်လို့သာ အနီးအနားမှ သင်္ဘော တစ်စီးစီး ဖြတ်သန်းသွားသည်ရှိသော် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ် ရပ်တည်ပေးမည့် ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ စားစရာကတော့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီ။ ရှိသမျှအားအင်ကို စုစည်းကာ အုန်းပင်ခြေရင်းသို့ ဒယိမ်း ဒယိုင် လျှောက်သွားလိုက်မိတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ အုန်းသီးအကြွေများကို တွေ့ရသည်။ ဓားမြှောင်ဖြင့် ဖောက်ကာ တဝကြီး စားပစ်လိုက်ပြီး သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။
အိပ်ရာက နိုးလာတော့ ကိုလင်း အနည်းငယ် လန်းဆန်းလာသည်။ သို့နှင့် ပစ္စတိုကို ကျည်ထိုးကာ ခါး တွင် တပ်လိုက်ပြီး ကျွန်းပတ်လည် လျှောက်ကြည့်မိသည်။ ကျွန်းက အတော်အသင့်ကြီးသည့် ကျွန်း ဖြစ်ဖို့များ သည်။ အပေါ်က စီးမိုးနေသည့် ကျောက်တောင်များကို မြင်ရသည်။ ဆယ်မိနစ်ခန့် လျှောက်လိုက်ရာ ကမ်းစပ် တွင် တစ်စုံတစ်ခုကို တွေ့လိုက်သည်။ လူလား ပစ္စည်းတစ်ခုခုလား မသိ။ ထို့ကြောင့် သေနတ်ကို အသင့်ချိန် ကာ အနားကပ်သွားတော့ သေချာစွာ မြင်လိုက်ရသည်က လူ။ အသက် နှစ်ဆယ် မပြည့်လောက်သေးသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ အသားအရေက ဖြူနုနေသည်။
ကိုလင်း အသက်ရှူ မှားမတတ် ဖြစ်သွားရသည်။ ထို မိန်းကလေးက ဒူးဆစ်လောက်သာရှိမည့် စကတ်တိုလေးနျင့် အင်္ကျီ လက်တို လည်ဟိုက်ကို ဝတ်ဆင်ထား သည်။ စကတ်မှာ လေတိုက်သဖြင့် အထက်သို့လန်နေရာ တင်ပါးလုံးလုံးလေးများကို မလုံ့တလုံ ဖုံးထားသည့် ပင်တီ အပြာရောင်လေးကို အထင်းသား မြင်နေရသည်။ အသက်ရောရှိသေးရဲ့လား မသိ ။ သေသွားလျှင် နှမျောစရာ ဂလု။ ကိုလင်း သေချာအောင် နှာခေါင်းနားကို လက်ဖြင့် စမ်းကြည့်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်ကြော ကို စမ်းကြည့်သည်။ အသက်ရှူသေးသည် နှလုံးခုန်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုမိန်းကလေးကို ကျောတွင်ပိုးကာ သူ့ပစ္စည်းများ စုပုံထားရာနေရာသို့ ခေါ်သွားလိုက်သည်။ မိန်းကလေးက သတိမရသေး။ ထို့နောက် မိန်းကလေးကို ရေဘူးထဲမှ ရေဖောက်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ လောင်းချပေးလိုက်သည်။ ရေအေးအေး ပါးစပ်ထဲသို့ ဝင်သွားသောအခါ မိန်းကလေး အနည်းငယ်လူးလွန့်လာသည်။
သူမ သတိ ကောင်းကောင်းရလာသောအခါ သူမဘေးတွင် ထိုင်နေသော ကိုလင်းကို ကြည့်ကာ ထိတ်လန့်တကြားဖြင့် “ဟင် ရှင် ရှင် ဘယ်သူလဲ ရှင် အနားမကပ်နဲ့နော် ကျွန်မ အသက်ချင်းလဲပစ်လိုက်မှာ´´ ဟု အော်လေတော့သည်။ ရော် ခက်တော့ ခက်ပေ ပြီ။ သူ့အသက်ကို ကယ်ခဲ့သည်ကိုမှ မထောက်လေခြင်းဟု ကိုလင်း ဒေါဖောင်းသွားသည်။ “ဒီမယ် ဒီမယ် အမိ စွတ်ပြောမနေနဲ့ မင်း ဟိုဘက်နားက ကမ်းစပ်မှာ မေ့နေတာတွေ့လို့ ငါထမ်းလာတာကွ။ ငါက သင်္ဘော နစ်ပြီး ဒီကို ရောက်လာတာ။ မင်းကရော ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ´´ ထိုမိန်းကလေး အနည်းငယ် အချိုး ပြောင်းသွားသည်။ “ အို မသိလို့ပြောမိတာပါရှင် ကျွန်မလဲ သင်္ဘောနစ်ပြီး ရောက်လာတာပါ၊ သင်္ဘောနစ်ပြီး မုန်တိုင်းကျတာပဲ ကျွန်မမှတ်မိလိုက်တယ်´´ ကိုလင်း အနည်းငယ် သနားသွားသည်။ သူလည်း ဒုက္ခသည် ကိုယ်လည်း ဒုက္ခသည် ဖြစ်နေသည်ကိုး။
“ ဒါဆိုရင် ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိနေတာလား၊ တခြားလူတွေ ရှိနေ သေးလား မသိဘူး။ လိုက်ရှာကြည့်ရအောင်´´ “ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို ကျွန်မနာမည်က ဖူးပွင့်ဝေပါ ဖူးဖူးလို့ ခေါ်ပါ တယ် အစ်ကို့နာမည်က…´´ “အစ်ကို့နာမည်က လင်းကိုကို အားလုံက ကိုလင်းလို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်´´ “ ဟုတ်´´ သူမမျက်နှာမှာတော့ စိုးရိမ်စိတ် အပြည့်နဲ့ပါ။ ကျွန်းတစ်ကျွန်းထဲမှာ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက် တည်းဆိုတော့ ကြောက်ရှာမှာပေါ့လေ။ သူမကိုယ်သူမ ငုံ့ကြည့်တော့လည်း စကတ်တိုလေးက အောက်နား တွေ စုတ်ပြတ်နေပြီး ပေါင်လယ်အထိ ပေါ်နေပြီ၊ အပေါ်ပိုင်းကတော့ ပြောပလောက်အောင် မဆိုးသေး။ ကိုလင်း ဖောက်ကျွေးသော အုန်းသီးများကို အဝစားလိုက်ကာ ကျွန်းပတ်လည် လိုက်ကြည့်သည်။ ဘာမှ မတွေ့။ အချိန် က ညနေစောင်းနေပြီ။ ထို့ကြောင့် အိပ်ရာပြင်ရသည်။
အိပ်စရာ စောင်လည်းမရှိ ခေါင်းအုံးလည်း မရှိ။ ဒါ့ကြောင့် အုန်းလက်ခြောက်တွေကို စုပုံကာ ကျောက်ခဲနှစ်လုံး ခတ် မီးရှို့ရသည်။ မီးရှို့ရသည်ကလည်း လွယ် သည်တော့ မဟုတ်။ နာရီဝက်လောက် ကြိုးစားလိုက်မှ မီးပုံတစ်ပုံ ဖြစ်လာသည်။ မီးပုံဖိုထားသဖြင့် အနားမှ သင်္ဘောများ ဖြတ်သွားလျင်လည်း မြင်သာမည်လေ။ ကျွန်းပေါ်မှာ တောရိုင်းသတ္တဝါများ ရှိလျင်လည်း အကာ အကွယ်ရမည်၊ အနွေးဓာတ်လည်း ရမည်။ ထိုအချိန်ကျမှ ပြဿနာအကြီးအကျယ် တက်တော့သည်။
မီးပုံဘေးမှာက ဖိုနှင့် မ နှစ်ယောက်တည်း။ ဒီနေရာမှာ ကိုလင်းက ဖူးဖူးကို အဓမ္မကြံစည်လိုက်ရင်တောင် ဘာမှမတတ်နိုင်။ မာန်လျှော့ရမည်သာ။ သို့သော် ကိုလင်းက မုဒိန်းသမားမဟုတ်။ ဒီလိုတော့ မလုပ်ဝံ့။ ဒါ့ကြောင့် ဆူဝေလာသည့် သွေးများကို မနည်း အေးအောင် ထိန်းနေရသည်။ ကိုလင်းက ကင်းစောင့်ကာ ဖူးဖူးကို ဘေးတွင် အိပ်စေရသည်။ ဖူးဖူး တော်တော် နှင့် အိပ်မပျော်ပေ။ သို့သော် များမကြာမီ အိပ်ပျော်သွားသည်။ တော်တော်ကြာတော့ ကိုလင်းလည်း မစောင့်နိုင်တော့ ။ ဖူးဖူးဘေးမှာပင် လှဲအိပ်လိုက်ရသည်။ ဖူးဖူး အိပ်မက်လိုလို တကယ်လိုလို ဖြစ်နေသည်။ သူမကို လူတစ်ယောက် ဖက်ထားသည်။ သူမ အိပ်ရာမှ လုံးလုံးလျားလျား နိုးလာသည်။ သူမကို ဖက်ထားသည်က ကိုလင်း။ သူက ဖက်ထားရုံမျှမက သူမ၏ ညာဘက် ရင်သားတစ်ဖက်ကို ကိုလင်းလက်က အုပ်ကိုင်ထားသည်။ ပထမ သူမရုန်းမလို့ ကြံစည်သေးသည်။
သို့သော် ကိုလင်းက ကိုင်ရုံသာ ကိုင်ထားပြီး ဟောက်သံထွက်ကာ အိပ်ပျော်နေသူပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ သူမ မရုန်းတော့ပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးသာ ဆက်နေလိုက်မိတော့သည်။ သူမရင်ထဲတွင်လည်း ရင်ခုန်သံ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်။ သူမ၏ ဘယ်ဖိုသတ္တဝါမှ မထိဖူးသေးသည့် ရင်သားနုနုလေးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အုပ်ကိုင်ကာ အိပ်ပျော်နေသူကား သူမ၏ အသက်သခင် ကိုလင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ ရင်ထဲမှာ အမည်မဖော်ပြနိုင်သော ဝေဒနာတစ်ရပ်က ကြီးစိုး နေသည်။ သူမ၏ ပေါင်ကြားက မီးတောင်ဝကလေးမှလည်း ချော်ရည်များ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေပြီ။ ကိုလင်းကတော့ သိပုံမရ။ သူမ လက်ကလေးကို ပေါင်ကြားထဲထည့်ကာ ပွတ်နေမိသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဟုတ်သဖြင့် အဆင်မပြေလှ။ သူမ တစ်ချက်တစ်ချက် တုန်ခါသွားမိသော်လည်း ကိုလင်း နိုးသွားလျှင် သူမ ဘာလုပ်နေသည်ကိုလည်း သိသွားမည်စိုးရိမ်နေမိသည်။ ထို့ကြောင့် သူမ မသိမသာလေးသာ ပွတ်နေမိသည်။ တစ်ခါမှ ဒီလိုမပွတ်ဖူး။ ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ အမည်ဖော်မရသည့် အရသာတစ်ခုကြီးစိုးနေသည်ကိုတော့ သိသည်။
မနက်မိုးလင်းတော့ စောစောစီးစီး အုန်းရည်သောက် အုန်းသီးစားလိုက်ကြပြီး ကိုလင်း၏ ဦးဆောင် မှု ဖြင့် ကျောက်တောင် မြင့်မြင့်ကြီးများပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်။ ကိုလင်းလက်ကို ကိုင်ကာ လိုက်တက်ရသည်။ လွယ်တော့ မလွယ်လှ။ ချော်မကျအောင် မနည်း သတိထားနေရသည်။ မည်မျှပင် သတိထားစေကာမူ တစ်ချက် တော့ ချော်ကျသွားလိုက်သေးသည်။ ကိုလင်းက သတိရှိသည်။ ဖူးဖူးလက်ကို လုံးဝမလွှတ်ဘဲ ချက်ချင်း ဖမ်းဆွဲ လိုက်သည်။ ပြီးနောက် အားယူကာ ဆွဲတင်လိုက်ရာ ကိုလင်းရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်သွားတော့သည်။ ကိုလင်းက ခါးကို ခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားရာ သူမ၏ ထွားထွားနုနု ရင်သားတစ်စုံနှင့် ကိုလင်း၏ ရင်အုပ်ကားကားကြီးတို့ ရင်တိုက်မှုဖြစ်သွားသည်။ သူမ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်သွားသလို ကိုလင်းမှာလည်း အောက်က တင်းမာလာ တော့သည်။ သို့သော် သူတို့ရောက်နေသည့်နေရာက တောင်ပေါ်ကို ခဲရာခဲဆစ် တက်နေရသည့် လမ်းကြောင်းမှာ။
တဖြည်းဖြည်း တက်သွားရာ တောင်ထိပ်ရောက်သွားတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စီးမိုးကာ မြင်နေ ရသည်။ တောင်မှာ နှစ်ခြမ်းဖြစ်နေပြီး အလယ်မှာ ချောက်တစ်ခု ခံနေသည်။ ကျွန်းသည် သိပ်မကျယ်လှသလို သိပ်လည်း မကျဉ်းလှပေ။ သို့သော် သုံးမိုင်လောက် ရှည်လျားမည့် ကျွန်းတန်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တွင်လည်း ကျွန်းများမတွေ့ရ။ လူရိပ်လူခြေလည်း မမြင်ရ။ တောအုပ်ကဲ့သို့ စိမ်းစိုနေသည့် ဒီရေတောတစ်ခု ရှိ နေသည်။ တောရှိလျင် မျောက် တော့ အနည်းဆုံး ရှိမည်ထင်သည်။ သတိတော့ လက်လွှတ်လို့မရ။ အန္တရာယ် လည်း ရှိနိုင်သည်။ သောက်သုံးရေချိုတော့ ရဖို့မသေချာ။ ပတ်လည်က သောင်ပြင်ဖြစ်နေသည်။ ချောက်ကမ်းပါး အောက်မှာ ရှိနေရင်တော့ မပြောတတ်။ ချောက်ထဲဆင်းရန် လမ်းရှာကြည့်တော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာ ချောက်ကမ်းပါးတွင် ပေါက်နေသည့် အပင်များကို တွယ်ဆင်းလျင် ရနိုင်သည်ကို သတိထားမိသွား သည်။ ထို့ကြောင့် ချောက်ကမ်းပါးထဲသို့ တွယ်ကပ် ဆင်းရန် ပြင်ဆင်ရတော့သည်။
ကိုလင်းက ခြေလျင် တောင်တက် အသင်းဝင်ဖူးသူမို့ ပြဿနာမရှိလှ။ ဖူးဖူးက အဆင်ပြေပါ့မလား။ မတတ်နိုင်ပါ။ သူ့ကို တောင် ထိပ်မှာ ထားခဲ့ရအောင်ကလည်း တခုခု ဖြစ်လျှင် သူအမြန်ပြန်တက်ကယ်ဖို့ မလွယ်ကူလှ။ ထို့ကြောင့် သူမကို မရ ရအောင်ခေါ်ရတော့သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းကြည့်တော့ ချောက်က သိပ်မနက်လှပါ။ ပေ ၇၀ လောက်သာ ရှိသည်။ အောက်ရောက်တော့ အပြင်မှာလောက်တော့ မလင်းပေ။ မြင်ရသည်ဆိုရုံမျှသာ ရှိသည်။ ဖူးဖူးက မှောင်နေသဖြင့် ကြောက်လန့်နေသည်။ ချောက်ထဲသို့ရောက်တော့ ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ရှာကြည့်မိသည်။ ဂူပေါက်တစ်ခု။ သေချာအောင်ကြည့် သည်။ ဟုတ်သည်။ ဂူပေါက်တစ်ခု။ ဂူပေါက်ထဲသို့ ဝင်ရန် အလင်းရောင်က မရှိ။ ဒါနဲ့ လှေက ဖြုတ်ယူလာ သော Survival Kit ထဲ ဓာတ်မီးတစ်လက်လောက်များ ပါလေမလား ထပ်ရှာကြည့်သည်။ တွေ့ပါပြီ။ ဓာတ်မီး အပြင် မီးခြစ်နှင့် ရေလုံထုပ်ထားသည့် ရေနံဆီမီးခွက်တစ်ခု။ အင်း အဆင်တော့ပြေပြီ။ ရေနံဆီမီးခွက်ကတော့ ဂူထဲမှာ အောက်စီဂျင်မရလျင် အသုံးမတည့်သည့်အပြင် ဒုက္ခပါ ပေးနိုင်သည်။ မနေ့က အလောတကြီး သေချာ မရှာဘဲ ကျောက်တုံးနှင့် နာရီဝက်လောက် မီးခတ်လိုက်ရသဖြင့် သူ့နဖူး သူရိုက်မိသည်။
ဂူထဲသို့ ဓာတ်မီးဖြင့် ထိုးဝင်လိုက်သည်။ သေနတ်ကိုတော့ အသင့်ချိန်ထားရသည်။ ဘာကောင်တွေ ရှိ နေမည်ဆိုတာ မသေချာ။ ဖူးဖူးက သူ့အင်္ကျီစကို တင်းတင်းဆွဲကာ အနောက်မှ လိုက်လာသည်။ သေချာစွာ သတိထားနေရသည်။ ဂူပေါက်က အဝင်ဝ လူတစ်ကိုယ်စာမျှသာ ရှိသော်လည်း အထဲရောက်တော့ အတန်အသင့် ကျယ်ဝန်းလာသည်။ အောက်စီဂျင် ကောင်းစွာရလို့ထင်သည်။ မီးကမငြိမ်း။ ဒါဆို ပြသနာ မရှိ။ ကျယ်ဝန်းသည့်နေရာက မြေပြန့်လေး။ အင်း ဒီနေရာမှာ လူနေလို့ရမလားပဲပေါ့။ ဟိုဘက်ကို ဆက်ထွက်သည့် အပေါက် တစ်ခု ရှိနေသည်။ ထိုအပေါက်ဖက်ကို ဆက်သွားလိုက်သည်။ ကိုင်ထားသည့် မီးခွက်က ဒီအတိုင်းပင်။ သွားရင်း လမ်းပိတ်သွားပြီ။ သို့သော် ဒီအတိုင်း အပိတ်မဟုတ်။ ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးက ပိတ်ဆို့နေသည်သာ။ ကျောက်တုံးကို တွန်းဖွင့်လျှင် လမ်းရှိလေအုံးမလား။
ကိုလင်း တစ်ချက်တွန်းကြည့်သည်။ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်။ ခပ်ပြင်းပြင်း ထပ်တွန်းကြည့်တော့ အနည်းငယ် လှုပ်သွားသည်။ ကိုလင်း နည်းနည်း အား တက်သွားသည်။ ဖူးဖူးကလည်း ဝိုင်းတွန်းသည်။ တစ်ခါ….. နှစ်ခါ…. သုံးခါ…. ပိုပိုပြီး လှုပ်လာသည်။ ခဏနား လိုက်သည်။ ထို့နောက် ထပ်တွန်းသည် တစ်ခါ….. နှစ်ခါ….. သုံးခါ….. ….. …. ……… ဆယ့်ငါးခါမြောက်တွင် ကျောက်တုံးကြီးသည် လမ်းအတိုင်း လိမ့်ဆင်းသွားလေတော့သည်။ သြော် ဆင်ခြေလျောပဲ။ ဓာတ်မီးနှင့် ကျောက်တုံးကြီး လိမ့်သွားရာဘက်သို့ လိုက်ထိုးကြည့်နေရင်း လင်းကနဲဖြစ်သွားကာ လေအေးများ ဝုန်းကနဲ ဆောင့်ဝင်လာသည်။ အေးမြသွားသည်။ ကိုလင်း အားတက်သရော ဆင်ခြေလျောအတိုင်း ဆင်းလိုက်သွားရာ ဂူပေါက်ဝမှ ပင်လယ်စပ်သို့ ပြန်ရောက်သွားလေတော့သည်။
ကိုလင်း ထခုန်မတတ် ဝမ်းသာသွားသည်။ ဒီအ ပေါက်ကနေ အပြင်ကို ထွက်လို့ ဝင်လို့ရသည်ပဲ။ နှစ်ယောက်သား အပြင်ရောက်သွားတော့မှ လေအေးအေးကို အဝရှူလိုက်ရတော့သည်။ ရှေ့ဆက် ပြီး ပတ်ကြည့်တော့ နောက်ထပ် ဂူပေါက်တစ်ပေါက် သွားတွေ့သည်။ တကယ့် ဂူပေါက်ပါပဲ။ သို့သော် အထဲသို့ ပေ ငါးဆယ်လောက်သာ ဝင်သည်။ အပိတ်။ ထိုထဲသို့ ပင်လယ်ရေ က ဝင်သည်။ ရေတက် ရေကျ ရှိသည်။ သူ တို့နှစ်ယောက်သား ပင်ပန်းလှပြီ။ ပြန်လာလိုက်သည်။ ဖူးဖူးကို တစ်နေရာတွင် ထိုင်ခိုင်းထားပြီး ကိုလင်းက ရေ စပ်သို့ဆင်းကာ ဂုံးခရုများ ကောက်သည်။ ကြားတော့ ဖူးဖူးပါ မနေနိုင်တော့။ သူမပါ ဝင်ကောက်တော့သည်။ အတော်များများ ရပါသည်။
ဖူးဖူးက ကိုလင်းရှေ့မှ ကုန်းကုန်းကွကွနှင့် ကောက်နေရာ ကိုလင်းလည်း ဝါသနာ အရ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ကြည့်လိုက်သည်။ အောက်စများ ဖွာနေသော စကတ် တိုတိုကြောင့် ကုန်းလိုက်ရာတွင် ပင်တီအပြာရောင်လေးကို ထင်းကနဲ မြင်နေရသည်။ ကိုလင်း စိတ်တွေ ထလာသည်။ သို့သော် ပြန်ထိန်း လိုက်ရသည်။ ဒုက္ခသည် အချင်းချင်းပဲလေ။ ပင်လယ်စပ်မှာပင် ခရုများကိုခွာကာ အုန်းလက်တံများဖြင့် သီပြီး မီးကင်ရသည်။ စားလည်းစားသည်။ နေ့ဖို့ညစာလည်း ချန်ထားသည်။ ပြီးနောက် သူတို့ဆင်းလာသော လမ်းကြောင်းမှ ဂူထဲ ပြန်ဝင်သွားတော့ သည်။ ဂူထဲကို ဝင်တော့ ဓာတ်မီးသုံးစရာ မလိုတော့။
သူတို့ နားနေမည့် အကွေ့လေးထားအထိ လင်းနေ သည်။ အထဲကို ကွေ့ဝင်တော့မှ မီးထိုးရသည်။ ဒီညတော့ မီးခွက်ရှိသည်ပဲ။ မီးပုံဖိုစရာလည်း ထင်းက ပါမလာ။ နောက်နေ့အပြင်ထွက်ရင်တော့ ထင်းပါ ရှာယူရမည်။ အိပ်ရမည့်နေရာ ကြည့်တော့မှ စိတ်ညစ်သွားသည်။ ကျောက်သားဖြစ်သဖြင့် အေးကလည်းအေးသလို ညီညီညာညာလည်း မရှိ။ အိပ်ပျော်မည့်ပုံ မပေါ်။ အောက်ကိုပြန်ဆင်းကာ အုန်းလက်ခြောက်များ နိုင်သလောက် သယ်လာရသည်။ အုန်းလက်များ ထူထူ ခင်းလိုက်တော့မှ အကောင်းစားမွှေ့ရာဖြစ်သွားတော့သည်။ ကိုလင်းက “ ဖူးဖူး ဒီညတော့ ဖူးဖူးဘေးမှာ ကိုလင်း အိပ်မယ်နော်´´ ဟု ပြောရာ ဖူးဖူးက “ ဟွန့် ညကရော မအိပ်တာကျနေတာပဲ´´ ဟု ပြန်ပြောလိုက် သည်။ ကိုလင်း ဖူးဖူးနားတွင် လှဲအိပ်လိုက်သည်။ ဖူးဖူးဘက်သို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှက်။ ထို့နောက် ဘာမပြော ညာမပြော ဖူးဖူး၏ နာမည်နှင့်လိုက်အောင် လှပအိစက်နေသည့် နှုတ်ခမ်းလှလှကလေးကို စုပ်ကာ နမ်းပစ်လိုက် သည်။ ဖူးဖူး တွန့်သွားသည်။ မထင်မှတ်ထားသည်ပဲလေ။
မျက်လုံးလေး မှေးစင်းသွားသည်။ ပြီးတော့မှ ကိုလင်းကို “ကိုလင်း လွန်ပြီကွာ သူ့ရည်းစားလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူကို လာနမ်းနေတယ် မကောင်းဘူး´´ “ချစ် လို့ပါ ဖူးဖူးရယ် ကိုလင်းလေ ဖူးဖူးကို စတွေ့တဲ့နေ့ကတည်းက ချစ်နေမိပြီသိလား၊ ဒုက္ခသည်အချင်းချင်းဆို တော့ ပြောရမှာ အားနာလို့ပါ အခု ပြောပြီနော် ကိုလင်း ဖူးဖူးကိုချစ်တယ်´´ “ကိုလင်းကလည်း ဖူးဖူးကို တွေ့ တာတောင် နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ် တန်းပြီး ချစ်သွားရောလား စဉ်းစားပါရစေအုံး´´ “ ဖူးဖူးရယ် ဘယ်လောက် စဉ်းစားအုံးမှာလဲ အခုဆို ဒို့နှစ်ယောက်လုံး လူမရှိသူမရှိ ကျွန်းပေါ်မှာ နှစ်ယောက်တည်းလေ၊
ကိုယ့်ရပ်ဌာနေ ကို ပြန်ဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူး ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူး´´ “ကိုလင်းရယ်… ´´ ဖူးဖူး တွေဝေသွားသည်။ ဘယ်နေ့ဘာဖြစ်မယ်မှန်းမှ မသိတာ ဆိုတာထက် ကျွန်းပေါ်မှာ ဘယ်လောက်တောင် သောင်တင်နေအုံးမည်မသိနိုင်သည့် ဖိုနှင့် မ လူသားနှစ်ဦးတည်း ဖြစ်နေတာကို တွေးမိကာ ရင်ခုန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုလင်းက သူမမျက်နှာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေသည်။ သူမ ကိုလင်းကို ပြန်ပြောလိုက်မိ သည်။ “ဒါဆို ကိုလင်း ဖူးဖူးကို ကတိပေးရမယ်နော် ဖူးဖူးအလိုဆန္ဒမပါဘဲ ဖူးဖူးကို ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိ´´ ။ ကိုလင်းလည်း မြန်မြန်ထက်ထက် ကတိပေးလိုက်သည်။ သူမ အလိုတူရင်တော့ ဖြစ်နိုင်သည်ပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီညကတော့ စောစောအိပ်ပျော်အောင်သာ ကြိုးစားရတော့သည်။ သူရော သူမပါ စောစော အိပ်ပျော်လိမ့် မည်တော့ မထင်။ ဖူးဖူးကလည်း သက်ပြင်းများ အကြိမ်ကြိမ်ချလျှက်။ ည သန်းခေါင်ကျော်တော့ နည်းနည်း အေးလာသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ စောင်မရှိ။ ချမ်းလာသဖြင့် ဖူးဖူးက ကိုလင်းဘက်ကို တိုးလာရာ ကိုလင်း ပေါင်ကြားမှ မာနေသည့် ဒုတ်နှင့် ဖူးဖူး တင်ပါးများ မိတ်ဆက်လေတော့သည်။ ကိုလင်းကလည်း အလောသုံး ဆယ် မလုပ်ရဲ။ ကိုလင်း၏ ဒုတ်က ဖူးဖူး တင်ပါးနှစ်လုံးကြားထဲသို့ ကျကျနန ထောက်မိနေသည်။ အိပ်မပျော် သော ဖူးဖူး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။
သို့သော် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဒူးကို ရှေ့သို့ ကွေးအိပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ကိုလင်း၏ ညီတော်မောင်မှာ ဖူးဖူး၏ ညီမလေးဆီသို့ ကျကျနန သွားမိတ်ဆက် လေတော့သည်။ စကတ်တစ်ထပ် ပင်တီတစ်ထပ် ခံနေသဖြင့်သာ ဝင်မသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖူးဖူး အသက်ရှူသံ ပြင်းလာသလို ကိုလင်းလည်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ “ကိုလင်း ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ဖူးဖူး မနေတတ်တော့ ဘူးကွာ´´ ဖူးဖူးက ကတုန်ကရင်အသံလေးဖြင့် ပြောလာသည်။ ကိုလင်း နည်းနည်းတော့ရင်ထိတ်သွားသည်။ သူက ဖူးဖူး လက်မခံဘဲနဲ့တော့ အတင်းမလုပ်ချင်။ ဒါနဲ့ “ဖူးဖူးကို ကိုယ် လက်ထပ်ပါရစေ´´ “ကိုလင်းရယ် စဉ်းစားပါအုံး ဒီလို လူမရှိသူမရှိ ကျွန်းကြီးထဲမှာမှ လက်ထပ်ခွင့်လာတောင်းနေသလားလို့´´
“ဖူးဖူးရယ် လက် ထပ်တယ်ဆိုတာ လူကြီးမိဘစုံရာနဲ့ တောင်းရမ်းလက်ထပ်သင့်တာကို ကိုယ်သိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့ဘ၀ က ဒီအခက်အခဲက ဘယ်အချိန် လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာ ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေလေ၊ ကိုယ်သိတာက ကိုယ် ဖူးဖူးကို ချစ်မိနေပြီ လက်ထပ်ချင်တယ်ကွာ၊ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရပ်ဌာနေ ပြန်ဖြစ်ရင်လည်း မိဘတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်မယ်လေ ခွင့်ပြုပါနော်´´ “ကိုလင်းရယ်…. ´´ “ဖူးဖူးလဲ ကိုလင်းကို ချစ်မိနေပြီဆိုတာ ဝန်ခံပါတယ် ဒါပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့အထိတော့ မစဉ်းစားမိသေးဘူး ကိုလင်းရယ်´´ “တကယ်လား ပျော်လိုက် တာ ဖူးဖူးရယ် ဖူးဖူးရဲ့အချစ်ကို ရသွားတာ ကိုလင်းကံကောင်းလွန်းတယ်နော်´´“ကဲပါ ကိုလင်းသဘော ဟုတ် ပြီလား လက်ထပ်မယ်နော် ဒါပေမဲ့ ဒီည ဖူးဖူးကို ဘာမှမကျူးလွန်ပါနဲ့နော် ဖူးဖူး အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ပါ ပြီး တော့ ဖူးဖူးရော ကိုလင်းပါ ညစ်ပတ်နံစော်နေတာပဲလေ နောက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ပြီးမှ အတူနေကြမယ်နော်´´ ကိုလင်း မျက်နှာကြီး မအီမလည် ဖြစ်သွားသည်။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ။
ဖူးဖူးရဲ့ ဖောင်းအိနေတဲ့ တင်နှစ်လုံးကြားထဲက ထောက်ထားရလို့ ငပဲက မတ်နေအောင် ထောင်နေတာ အေးလေ ရှိစေ တော့ ရှိစေတော့ မနက်ဖြန်ကျမှ တွေ့မယ်။ ဒါနဲ့ ဖူးဖူးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး အိပ်လိုက်သည်။ ဖူးဖူး၏ နှုတ်ခမ်း အိအိလေးကို နမ်းမိသည်၊ ရင်သားနုနုလေးကို ကိုင်မိသည်။ ဘာမှမပြော။
လက်က အောက်ကို ဆက်ဆင်းမယ် ကြံရင် အတင်းပြန်ဖယ်သည်။ ဒီလိုနဲ့သာ မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ရသည်တည်း။ မနက်လင်းတော့ ထုံးစံအတိုင်း စားဖို့သောက်ဖို့က အရင်ရှာရသည်။ အုန်းသီးနှင့် အုန်းရည်က ပေါ များလှသည် မှန်သော်လည်း ဘယ်သူမျှ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မစားနိုင်။ အသားလေး ငါးလေး ရလိုရငြား လိုက်ရှာ ကြရသည်။ ဟော တွေ့ပါပြီ။ မနေ့က ကြည့်ခဲ့သည့် အပြင်က ဂူပေါက်ထဲက ရေကြည်ကြည်ထဲမှာ ကျောက်ပု ဇွန်များ ကူးခတ်နေသည်။ အကောင်သိပ်မကြီးသော်လည်း စားလို့ဝနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုလင်း သူ့အင်္ကျီချွတ်ကာ ပုဇွန်ခပ်သည်။ ပိုက်ကွန်လို မဟုတ်သဖြင့် သိပ်တော့ အဆင်မပြေ။ သို့သော် လေးငါးခါလောက် ကြိုး စားလိုက်လျှင် တစ်ကောင်လောက်တော့ ရသည်။
ဖူးဖူးကတော့ ပုဇွန်တစ်ကောင်ရတိုင်း ကလေးတစ်ယောက် လို ခုန်ပေါက်မြူးတူး အားပေးရှာသည်။ နှစ်နာရီလောက် ကြိုးစားပမ်းစား ဖမ်းလိုက်တော့ ပုဇွန် တော်တော်များ များ ရလိုက်သည်။ ပြန်ထွက်လာရာတွင် ကံဆိုးသည့် ဂဏန်းတစ်ကောင်ပါ ပုဇွန်များနှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သွား တော့သည်။ ထိုရှေ့နားတွင် ပုဇွန်နွာခြင်း မီးကင်ခြင်း အလုပ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖူးဖူးက ရေချိုးချင်ကြောင်း ပူဆာသည်။ ရေချိုးတာက ရသည်။ သို့သော် ရေချိုးပြီးလျှင် လဲစရာ အဝတ်က မရှိ။ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ချိုးရန်ကျတော့လည်း ဖူးဖူးက သဘောမတူပြန်။ သို့သော် နောက်ဆုံး တစ်ယောက် ရေချိုးလျှင် တစ်ယောက်က တစ်ဖက်လှည့်နေပေးကြေးဖြင့် အပေးအယူတည့်သွားသည်။ ကိုလင်းကို အရင် ချိုး ခိုင်းသည်။ ကိုလင်းကတော့ ယောင်္ကျားလေးပဲ ဘာရှက်စရာရှိတာမှတ်လို့။ ပါတဲ့ ဘောင်းဘီချွတ်ပစ်ကာ မိမွေး တိုင်း ဖမွေးတိုင်း ပင်လယ်ထဲ ဆင်းချသွားသည်။
ရေချိုးတော့ ပင်လယ်ဘက်ကိုလှည့်မချိုး၊ ကုန်းပေါ်တွင် တစ် ဖက်လှည့်ရပ်နေသော ဖူးဖူးဘက်သို့ လှည့်ချိုးသည်။ ဖူးဖူး သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ကိုလင်းကို စကားပြောရန် လှည့်လိုက်မိသည်။ ကုန်းပေါ်က ဖူးဖူးကို နောက်ကကြည့်ကာ လောင်တီးနေသော ကိုလင်းကို ဘွားဘွားကြီး မြင်လိုက်ရသောအခါ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ကြောင်ကြည့်နေပြီး “အာ ကိုလင်းကွာ အရှက်မရှိဘူး ဟို ဘက် လှည့်ချိုးပါလားလို့´´ ပြောပြောဆိုဆို မျက်နှာကို အတင်းအုပ်ကာ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေတော့သည်။ “ဟင်း ဘယ်သူက ကြည့်ခိုင်းတာကျလို့ သူ့ဘာသာ ဟိုဘက်မလှည့်ဘဲ လာခိုးကြည့်ပြီး ဟဲဟဲ ကောင်မလေး ကရော် ကရော်´´ ကိုလင်းက မရှက်သည့်အပြင် ကရော်ကရော်ပင် ပြန်လုပ်လိုက်သေးသည်။ ကိုလင်းချိုးပြီး အဝတ်လဲပြီးမှပဲ ဖူးဖူး ရေချိုးရန်ပြင်ဆင်တော့သည်။
ဖူးဖူး အဝတ်ချွတ်နေချိန်တွင် ကိုလင်းက တစ်ဖက်သို့ လှည့်နေပေးသည်။ အကြောင်းရှိသည်။ မလှည့်နေပေးလို့ ရေမချိုးတော့ဘူး လုပ်နေ ရင် ပြဿနာ။ ဖူးဖူး အဝတ်လဲသံ၊ ရေထဲဆင်းသွားသံ၊ ရေထဲမှာ တဘွမ်းဘွမ်းကူးသံကြားတော့ ကိုလင်း လှည့် ကြည့်လိုက်သည်။ ဖူးဖူးက သူ့အရှိန်နဲ့သူ ရေကူးနေတုန်း။ ကိုလင်းကြည့်နေသည်ကို သတိမရ။ နောက်မှ ကမ်း ပေါ်ကို လှမ်းကြည့်တော့ ကိုလင်းက သူမကို ကောင်းကောင်း ကြည့်နေသည်။ ဖူးဖူး တအားရှက်သွားသည်။ ကို လင်းကို ရေနှင့် လှမ်းပက်ကာ သူမ၏ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသော စနေနှစ်ခိုင်နှင့် တြိဂံနယ်မြေကို အသည်း အသန် ကာကွယ်သည်။ လက်သေးသေးလေးက ဘယ်လိုများ လုံနိုင်ပါမည်နည်း။ တစ်ခုဖုံးလျှင် တစ်ခုပေါ် သည်သာ။ ကိုလင်း ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ရေထဲသို့ ဆင်းသွားလိုက်သည်။ ရေထဲတွင် ဟိုဖုံး ဒီဖုံး လုပ်နေ သည့် ဖူးဖူးကို အတင်း ဝင်ဖက်လိုက်သည်။
“ဖူးဖူးရယ် ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ´´ “အို ကိုလင်း ဘာလုပ် တာလဲ မလုပ်ပါနဲ့ ဖူးဖူးရှက်တယ်´´ “ဖူးဖူးရယ် မရှက်ပါနဲ့ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ ကိုလင်းနဲ့ ဖူးဖူး နှစ်ယောက်ပဲ ရှိ တာလေ ကိုလင်းက ဖူးဖူးရဲ့ ချစ်သူပဲ ဖူးဖူး ကိုယ့်ကို အလိုမလိုက်ရင် ရေထဲက ပြန်မတက်တော့ဘူးနော်´´ “ ကိုလင်း မဆိုးနဲ့ကွာ နော် နော် ညကျမှ ကိုလင်းသဘော နော်´´ ကိုလင်း အာမခံချက် ရသွားပြီဆိုတော့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ဖူးဖူးလည်း ကြာကြာမချိုးတော့၊ ကမန်းကတန်း ပြန်တက်ပြီး အဝတ်ပြန်ဝတ်တော့ သည်။ ပြီးတော့ အချမ်းပြေ နေဆာလှုံရင်း ပုဇွန်ကင်နှင့် အုံးရည်သောက်ကာ ဇိမ်ကျနေကြသည်။ သို့သော် ပင်လယ်ရေ အစွမ်းပြပြီ။ ဓာတ်ဆားပေါင်းစုံ ပျော်ဝင်နေသော ပင်လယ်ရေက သူတို့အသားအရေကို စေးကပ် ကပ် ဖြစ်နေစေသည်။ အနေရခက်လှသည်။
နေကပူလာတော့ ဆားတွေပါ ပွင့်လာသည်။ မဖြစ်ချေတော့ ရေချို ရှာရတော့မည်။ ဟုတ်ပြီ ချောက်ထဲမှာရေချိုအိုင်များလားပဲ သွားကြည့်အုံးမှပါ။ သူတို့ ရေချိုးဖို့ ရေသောက် ဖို့ ရေချို မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေသည်။ နှစ်ယောက်သား ဂူထဲ အသည်းအသန်ပြန်ဝင်ကာ ချောက်ဖက်သို့ ပြန်ထွက် သည်။ ချောက်ကြီးထဲရောက်တော့ ရေအိုင်ကို ကမန်းကတမ်းပြေးကာ ပါးစပ်ဖြင့် သောက်ကြည့်သည်။ ရင်ထဲ အေးမြသွားလိုက်သည် ဖြစ်ချင်း။ ရေချိုမှ ရေချိုစစ်စစ်။ သူတို့ ရောက်သည့်အချိန်ကစလို့ အခုထိ အသက်ကယ်အိတ်မှ ရေဘူးများကိုသာ သောက်သုံးနေကြသည်။ အုန်းရည်သောက်နေရတော့ ရေမဆာတာ လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ရေက ဒီအတိုင်းပဲ အသေလား အရှင်လား ပြန်ကြည့်သည်။ အရှင်ဗျ၊ အရှင်။ မြေကြီးထဲမှ အလိုလို စိမ့်ထွက်နေကာ ဟိုဘက်က ရေထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးဆင်းနေသည်။ ထို ရေထွက်ပေါက်ကတော့ ဘယ်နေရာနှင့် ဆက်နေသည်လည်း မပြောတတ်ပေ။ ဖူးဖူးရော ကိုလင်းပါ အဆင်ပြေ သွားသည်။ ချိုးရေရော သောက်ရေပါ ရပြီ။ ရောက်ကတည်း ဖောက်ဖောက်သောက်ပြီး လွှင့်ပစ်ထားသော ဘူး ခွံများ အသုံးဝင်ချေတော့မည်။ နောက်နေ့ ပြန်ယူလာပြီး ရေအပြည့် ဖြည့်ထားရမည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဖူးဖူးကို ဦးစားပေးလိုက်သည်။ ဖူးဖူးက အရင်ဆင်းချိုးသည်။ ကိုလင်းပါ လိုက်ဆင်းတော့ ဖူးဖူး ဘာမှမပြောတော့ပေ။ ကိုလင်းကလည်း ဖူးဖူး ညကျရင် ကိုလင်းသဘောဆိုတာကို ယုံစားကာ လောင်တီး နေရုံမှ တပါး ဘာမှ မလုပ်ရဲ။
ညကျမှ လက်မခံတော့ရင် ငတ်မှာစိုးလို့။ နှစ်ဦးသား ရေချိုးလိုက်တော့ လန်းပြီး သန့်ရှင်းသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ရေအဝသောက်ကာ ဂူပေါက်ထဲမှ ဝင်ကာ ကမ်းခြေသို့ ပြန်ဆင်းလာ ခဲ့သည်။ ကမ်းခြေမှာ ဂဏန်းကောက်လိုက်၊ အုန်းရေသောက်လိုက် တော်ကီဖုတ်လိုက်နှင့် အပန်းဖြေခရီးသွား နေရသလို ခံစားလိုက်ကြသည်။ ညနေစောင်းတော့ ကမ်းစပ်မှာပဲ အပေါ့အလေးကိစ္စ ဖြေရှင်းရသည်။ မဟုတ်ရင် အထဲရောက်မှ ပြန်ဆင်းရတာ တော်တော် မလွယ်လှ။ ဟိုတစ်နေ့ညကတော့ ဖူးဖူး ညအိပ်ကာနီးမှ အိမ်သာတက်ချင်သည် ဆို သဖြင့် ပြန်ဆင်းပို့လိုက်ရသည်။ နီးနီးလေးဆိုသော်လည်း အတက်အဆင်းနှင့် အတော်လေး မောသည်။ ကိစ္စ ဝိစ္စများ ပြီးတော့ ဖူးဖူးကို လက်ဆွဲကာ ဂူထဲ ပြန်ဝင်သွားလိုက်သည်။
အိပ်ရာထဲ ရောက်ကာနီးတော့ ဖူးဖူး တွန့် ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် အတင်းတော့ မရုန်းပါ။ ထွက်ပြေးလို့ မရသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။ နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာထဲ နေရာယူပြီးချိန်မှာ ဖူးဖူးရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ကိုလင်း ပါးစပ်ဖြင့် ငုံကာ အသာ စုပ်ယူလိုက်သည်။ ဖူးဖူး ကိုလင်း လက်မောင်းကို အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်ထားသည်။ သို့သော် တုန့်ပြန် ကာ စုပ်ယူရုံမှတပါး လျှာ မကစားတတ်သေး။ ကိုလင်း သင်ပေးရအုံးမည်။ ပါးစပ်ခြင်း တိုက်စစ်ဆင်နေရာမှ ကို လင်း လက်တစ်ဖက်က ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ လျှောဆင်းသွားသည်။ သူမ၏ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်လိုက်သည်။
ဖူးဖူး မငြင်းဆန်တော့ပေ။ အလိုက်သင့်ပင် လက်ကလေး မြှောက်ပေးသည်။ ကိုလင်း အားတက်သွားသည်။ သို့သော် ဘရာစီယာလေးကို ချွတ်မှပင် ပြဿနာ တက်တော့သည်။ ကိုလင်း ဘရာစီယာချိတ်ကို ရှာမတွေ့။ ခက်တော့ နေချေပြီ။ ဖူးဖူးက ကျောလေးကြွပေးသည်။ အဆင်မပြေသေး။ ဖူးဖူးက တမင်ညစ်ကာ ချွတ်မပေး ဘဲ တခစ်ခစ် ရယ်နေသည်။ ကိုလင်း စိတ်ညစ်သွားသည်။ နောက်တော့မှ လက်လျှော့လေဟန် ချွတ်ရန်မကြိုး စားဘဲ အပေါ်မှသာ အုတ်ကိုင်တော့သည်။ ဖူးဖူး သနားသွားပုံရသည်။ သူ့ဘာသာ ချွတ်ပေးတော့လည်း လွယ် လွယ်လေးပဲ။
အခုအချိန်ထိ ကိုလင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို တစ်ခုမှ မတားမြစ်သေး။ အင်း ဖူးဖူးလည်း အတွေ့အကြုံများပုံရသည်။ ကိုလင်း စကတ်ကိုတော့ မချွတ်တော့ဘဲ လှန်လိုက်ကာ ပင်တီလေးကိုသာ ပေါင်မှ လိပ်ကာလိပ်ကာဖြင့် ချွတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်ဖြင့် ရွှေကြိဂံနယ်မြေကို ကျူးကျော်တော့သည်။ ဖူးဖူး၏ အဖုတ်ကလေးမှာ ဖောင်းတင်းနေကာ အမွှေးအမြှင်လည်း ခပ်ပါးပါး နူးနူးညံ့ညံ့လေး ဖြစ်နေသည်။ အကွဲကြောင်းထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲနစ်နေပြီကော။ ဖူးဖူး စိတ်တွေထနေပုံရသည်။ အကွဲကြောင်း လေးကို လက်ခလယ်ထိပ်ဖျားဖြင့် စုန်ကာ ပွတ်သပ်ပေးတော့မှ ကြောင်ညည်းသလို ညည်းသံလေး ထွက်လာ သည်။ လက်ကလည်း ကိုလင်း လက်မောင်းကို တင်းတင်းလေး ဆုပ်ကိုင်လာသည်။ ကိုလင်းက အတွေ့အကြုံ များပြီးသားပါ။
လိုက်ဖျက်ဆီးသူ မဟုတ်သော်ငြား ထားဖူးသမျှ ရည်းစားတိုင်းသည် နယ်လွန်ပြီးကာမှ အသစ်တွေ့ရမည့် ဇာတာရှင်ဖြစ်သဖြင့် အဖုတ်နှင့် ဒုတ် စိမ်းသူမဟုတ်ပေ။ ထပ်ပြီး အစေ့လေးကို ရှာဖွေကာ ထိုးစစ်ဆင်လိုက်သည်။ ဖူးဖူး၏ ညည်းသံ ပိုကျယ်လောင်လာသည်။ အရည်တွေလည်း ပိုရွှဲလာသည်။ ကိုလင်း လက်ခလယ်ကို အကွဲကြောင်းထဲသို့ နည်းနည်း ထိုးထည့်ကြည့်တော့ ဖူးဖူး ကိုလင်းကို တအားကုတ်ဖဲ့ကာ အသားကုန်ညည်းသည်။ ဂူထဲဆိုတော့ ညည်းသံ အသက်ရှူသံများက ဟိန်းထွက်နေသည်။ ကြပ်လှချည်လား။ အတွေ့အကြုံရှိရင်တောင်မှ အတော်လေး အကြိမ်ရေနည်းပါးမည်ထင်သည်။ အရည်တွေ တအား ထွက်လာကာ ကိုလင်း လက်ကို ပေပွနေတော့သည်။
ကိုလင်း လုပ်ငန်းဆက်သင့်နေပြီ။ ဖူးဖူးခြေထောက်ကို ကားထုတ်လိုက်ပြီးမှ တက်ခွလိုက်သည်။ ကိုလင်း လီးက တအားတောင်နေပြီဖြစ်ရာ ဖူးဖူး၏ စောက်ပတ် အ၀ လေးကို တေ့ကာတေ့ကာနှင့် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ အစေ့လေးကို လီးထိပ်ဖျားနှင့် လေးငါးချက်လောက် ထိုးဆွပေးလိုက်သည်။ ဖူးဖူးမှာတော့ လူးလွန့်ကော့ပျံနေရှာလေပြီ။ ကိုလင်း အလစ်အငိုက်ယူကာ ဒစ်အဖျားကို စောက်ပတ်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “အား ကိုကို နာလိုက်တာ´´ ဖူးဖူး ခပ်တိုးတိုးလေး အော်သည်။ ခဏ အနားပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ရှေ့ ကို ဆက်ထိုးလိုက်ရာ တစ်ခုခုနှင့် ပိတ်ဆို့ကာ ဒုတ်ကနဲရပ်သွားပြီး ဖူးဖူးလဲ အီးကနဲ အော်သွားသည်။
ကိုလင်း ထင်မြင်ချက် တက်တက်စင်အောင် လွဲလေပြီ။ ဖူးဖူးက အပျိုစင်စစ်စစ်ကလေးပါလား။ ဒါဆို ကိုယ့်ကို ချစ်လွန်း လို့ ဘာမှ မငြင်းဆန်ဘဲ အကုန် လိုက်လျောနေခြင်းဖြစ်နေတာပေါ့။ ကိုလင်း ဝမ်းသာသွားသည်။ နောက်ကို တစ်ချက် ဆုတ်လိုက်ပြီး အားကုန် ထိုးသွင်းလိုက်ရာ ထုတ်ကနဲ အထိအတွေ့နှင့်အတူ တစ်ဆုံးဝင်သွားတော့ သည်။ “အား….. ကိုကို .. ကိုကို.. နာလိုက်တာကိုကိုရဲ့…. အီးဟီး…. ဖူးဖူးဟာလေး ပြဲသွားပြီလားမသိဘူး´´ ဖူးဖူး၏ အာခေါင်ခြစ်ငိုယိုသံက ဂူထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်သွားတော့သည်။
ကိုလင်း ခဏငြိမ်နေပေးလိုက်သည်။ ဖူးဖူး မျက်လုံး အောက်ခမ်းစပ်ကို လက်ဖြင့် စမ်းကြည့်လိုက်ရာ မျက်ရည်များ စီးကျနေသည်။ သြော် အပျိုစင် စစ်စစ် ကလေးဆိုတော့လည်း နာရှာမည်ပေါ့လေ။ အတော်လေးကြာတော့ ဖူးဖူး အငိုတိတ်သွားသည်။ “ဖူး နာသေးလား´´ “ဟင့်အင်း နာတော့ဘူး ကိုကို အထဲမှာ ကြပ်ပြီး တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်နေတယ်´´ “အာ့ဆို ကိုယ် နည်းနည်းလောက် လှုပ်ကြည့်မယ်နော် ဖူးဖူး မနာအောင်လုပ်ပေးမယ် အစမို့ပါ နောက်ဆို မနာတော့ ပါဘူး´´ ဖူးဖူး ကိုယ်လေး ငြိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ခေါင်းငြှိမ့်လိုက်သည် ဖြစ်မည်။ အမှောင်ထဲမို့မမြင်ရ။ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျားတွေက ဒီလိုပါပဲ။ ဒါမျိုးကျ ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးတတ်တာပေါ့ ဟဲဟဲ။ အဲဒါနဲ့ နည်းနည်း အထုတ်အသွင်း လုပ်ကြည့်သည်။ ကြပ်ထုပ်နေသည်။
ဖူးဖူးကလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ညှစ်ထားတာက ပို ကြပ်နေသလိုပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရည်တွေ ထွက်လာတော့ ဖူးဖူးလည်း သိပ်မနာတော့။ နာတာကို ကောင်း တာက ဖုံးသွားလေပြီ။ တစ်ချက်ဆောင့် တစ်ချက်ညည်း ဖြစ်လာသည်။ ပထမ ဖြည်းဖြည်း ဆောင့်ပေးရာမှ နည်းနည်း အရှိန်တင်လိုက်သည်။ ဖူးဖူး ဘာမှ မကန့်ကွက်။ ညည်းသံသာစိတ်လာသည်။ အမြန်နှုန်း တဖြည်း ဖြည်း မြင့်လာသည်။ ဖူးဖူးသည်း ကိုလင်း ကျောကို လက်ဖြင့် အသားကုန် ဖက်ထားသည်။ ဖက်ထားရာမှ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်လာပြီး “ကိုလင်း ကိုလင်း ဘယ်လိုကြီးဖြစ်လာလဲ မသိဘူး အား အာ့ဟာ အား…. အမေ့….. ရှီး….. အင်းးး အ အား………… ´´ အော်သံနှင့်အတူ စောက်ဖုတ်ကလေးက လီးကို တဇစ်ဇစ်နှင့် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ညှစ်ကာ ကော့တက်လာပြီးနောက် ငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်။ ကို လင်းလည်း ဖူးဖူးပြီးသွားမှန်းသိသဖြင့် သုက်ရည်များကို စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ ဒရဟော ပန်းထည့်ပေးလိုက် ရာ ဖူးဖူးမှာ အရသာကောင်းလွန်းလှသဖြင့် မေ့မျောမတတ် ဖြစ်သွားရသည်။
ထိုညတော့ ငတ်မပြေသည့် ကာမ ဆားငံရေကို တက်ညီလက်ညီ သောက်လိုက်ကြသည်မှာ သုံးခါ လေးခါပင် မကတော့။ ဖူးဖူးလည်း စောက်ပတ်ပူထူလာပြီး ကိုလင်းလည်း လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျိန်းလာသဖြင့် သာ အိပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိပ်တော့လည်း တွင်းစိမ်ရင်း အိပ်ရသည်မှာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပေ။ မိုးလင်းကာ နီးတော့ တွင်းထဲမှ မြွေက ခေါင်းထောင်နေသဖြင့် လင်းဆွဲလေးတော့ ဆွဲလိုက်သေးသည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ရေချိုအိုင်သို့သွားကာ ကိုယ်လက်ဆေးကြော မျက်နှာသစ်လုပ်ရသည်။ မလုပ် လို့ မဖြစ်။ တစ်ညလုံး ဗွက်ပေါက်သွားရာ မလုပ်လျှင် ခြောက်ကပ်ကုန်တော့မည်။ ပြီးနောက် ထုံးစံအတိုင်း ကမ်းစပ် ဆင်းသွားကြတော့သည်။ ကမ်းစပ်သို့ ရောက်သောအခါ ထူးခြားမှုကို တွေ့ရသည်။ ဧည့်သည်တွေ ရောက်နေ ချေပြီ။ ကမ်းစပ်သို့ သေနတ်အသင့်ချိန်ကာ သွားကြည့်လိုက်သည်။
ရာဘာလှေတစ်စီး၊ အကောင်းပကတိ၊ လှေ ထဲတွင် ကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက်၊ အသက်တော့ မရှိတော့ချေ။ ပုတ်စော်ပင် နံနေပြီ။ သရဲကြောက် တတ်သူဆိုလျင် လိပ်ပြာလွင့်နိုင်သည်။ လက်တစ်ဖက်က ငါးစားလို့ ကုန်ပြီ၊ အပုတ်ရည်တွေ တတောက် တောက် စီးကျကာလှေဘေးသို့ တွဲလောင်းကျနေသည်။ ကိုလင်း လှေထဲသို့ ဆင်းလိုက်သည်။ လှေထဲတွင် ဖိနပ်က သုံးရံ၊ လှေ၏ ဖောင်းကြားတွင် ညပ်နေသည်။ ဒါဆို လူလေးငါးယောက် စီးလာသည့် အသက်ကယ်လှေမှ ကျန်သူများ ပင်လယ်ထဲတွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးနှင့် ကျကျန်ခဲ့လေပြီ။ ဒီလူကလည်း ကျမကျန်ခဲ့ဘဲ လှေပေါ်မှာ အသက်ကုန်သွားပုံ ရ သည်။ ကိုလင်း မကြောက်နိုင်တော့။ လှေပေါ်သို့ တက်ကာ အသုံးဝင်သည့် ပစ္စည်း ရှာယူလိုက်သည်။
ရေစို အဝတ်အစားများပါသော အထုပ်နှစ်ထုပ်၊ စောင်ထူတစ်ထည်၊ ဆေးဝါးများ ပါသည့် အိတ်တစ်အိတ်၊ ဓာတ်မီး တစ်လက်နှင့် လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး တွေ့ရသည်။ လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်တော့ အမျိုးအစား သိပ် အကောင်း ကြီး မဟုတ်၊ ဒါပေမဲ့ ရေလုံနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ဝမ်းသာသွားသည်။ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ နာရီ မလိုအပ်သော် လည်း ရက်စွဲများကြည့်နိုင်သေးသည်လေ။ လိုတာတွေ အကုန် ယူပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ထိုအလောင်း ကြီးကို ပင်လယ်ထဲ မျှောဖို့ စဉ်းစားသည်။ မဖြစ်နိုင်။ ဒီနေရာမှာတင် ဝဲလည်ဝဲလည်ဖြစ်နေမည်။ လှေကို အကောင်းအတိုင်း ရသဖြင့် ပြန်သုံးလို့ ရနိုင်သေးသည်ပဲ။ လိုရမယ်ရ လေလျှော့ပြီး သိမ်းထားရမည်။ ဒါလဲ မဟုတ်သေး။ ဒီလှေအမျိုးအစားက လေလျှော့လို့မရ။ ရသော်လည်း ပြန်ဖြည့်မရ။ လှေတွင် ကပ်လျက်ပါသော လေအိုးက တစ်ခါသုံးလေအိုး။ ဒီအတိုင်းပဲ ဟိုဂူပေါက်ထဲမှာ ထည့်ထားရမည်။
သဲပေါ်မှာ ထားရင်တော့ သဲကိုက်သွားမည်။ အုန်းလက်ဖြင့် ကျင်းတစ်ကျင်း တူးလိုက်သည်။ သိပ်အကျယ်ကြီးလည်း မတူးနိုင်။ အုန်းလက်ဖြင့် တူး ရတော့ သဲသောင်ပြင်ဖြစ်သော်လည်း ခရီးမတွင်။ ကြိုးစာပမ်းစားတူးလိုက်တော့မှ ကျင်းတစ်ကျင်း ဖြစ်လာသည်။ ခုနက လှေပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ဖိနပ်များကို မြှုပ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ကိုယ့်ဘာသာ သရဏဂုံ တင်ပေးလိုက်သည်။ သေသူတွေကတော့ ဘယ်ဘာသာဝင်တွေလဲမသိ။ ဖူးဖူးက ကြောက်လို့ ဟိုးဝေးဝေးမှာ ထိုင်နေသည်။ တစ်ဖက်ကို လှည့်ထားသည်။ သူမ မကြည့်ရဲသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ကိစ္စများ ပြီးတော့မှ ဖူးဖူးကို ခေါ်ကာ ကျွန်းကမ်းခြေတစ်လျှောက် လျှောက်ကြည့်သည်။ ရေစီးကြောင်း သင့်သဖြင့် ရောက်လာသည့် ပစ္စည်းအချို့ တွေ့ရသည်။ အချို့ကလည်း ရေဝင် ပျက်စီးသွားပြီ။ ရေမဝင် မပျက်စီးသည့်အရာများကို တစ်နေရာကိုပုံထားကာ ဂူဝသို့ ကဲ့ယူရသည်။ သိပ်များများစားစားလည်း မဟုတ်ပါ။ အဖိုးဘယ်လောက်တန်တန် ဒီနေရာမှာ အသုံးမတည့်ရင် တန်ဖိုးမရှိပါ။
ရွှေလိုမျိုးဟာဆို တစ်မျိုးပေါ့။ ကံကောင်း လို့ ကုန်းပေါ်ပြန်နိုင်ရင် သုံးလို့ရနိုင်သည်။ တစ်ခြားဟာတွေကတော့ သိပ်မမက်မောလှ။ သယ်လာသော ပစ္စည်းများထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးထုတ်ကြည့်သည်။ ပစ္စတို တစ်လက် ကျည်အပြည့်ဖြင့် ပါလာသောကြောင့် ဖူးဖူးကို ပေးထားသည်။ အကြောင်းရှိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်လို့ ရ အောင်လို့။ ကိုလင်းသေနတ်ကကျည်နှင့်က မတူ။ ဒါ့ကြောင့် ကျည်အပိုပါမလာသည့် ဖူးဖူးသေနတ်ကို မသုံးဘဲ ကိုလင်းက သူ့သေနတ်ကိုသုံးကာ ဖူးဖူးကို သေနတ်ပစ်နည်း သင်ပေးသည်။ ပစ္စတိုဆိုသည့် အမျိုးက သေသေ ချာချာ လေ့ကျင့်သားမဝထားရင် ထိမှန်ဖို့မလွယ်လှသဖြင့် ကျည်ထိုး ကျည်ထုတ်တတ်ရုံ၊ ပစ်တတ်ရုံသာ သင် ပေးထားရသည်။ ပထမဆုံးကျည်တစ်တောင့်က သဲပြင်ပေါ်က လေးပေလောက် ဝိုင်းထားသည့်နေရာကို ပစ်ခိုင်း ရာ ဘာမဆီညာမဆိုင် ရှေ့လှမ်းလှမ်းက အုန်းသီးခိုင်ကို ထိကာ ကြွေကျသွားသဖြင့် ရယ်ရသေးသည်။
စနစ် တကျ ပြလိုက်တော့လည်း လက်ဖြောင့်သည်မဟုတ်တောင် ပေ သုံးဆယ်လေးဆယ်လောက်တော့ ထိအောင် ပစ်နိုင်သွားသည်။ ကျည်ငါးတောင့်တော့ ဖြုန်းလိုက်ရသည်။ မတတ်နိုင်ပါ။ ကိုလင်းသေနတ်က ၉ မမ ကျည် ဖြစ်နေသဖြင့် ကံကောင်းရင် ထပ်ရနိုင်သေးသဖြင့်သာ သုံးပစ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖူးဖူးအတွက်များ ဝတ်စရာအပိုလေးရမလား ရှာကြည့်သည်။ ကလေး အင်္ကျီတွေ။ ဖူးဖူးက မချိသွားဖြဲ လေး လုပ်ပြသည်။ ဆပ်ပြာမှုန့်လို ဆပ်ပြာဘူးလိုမျိုး တိုလီထွာလီတွေလည်း ပါသည်။ လက်ဖြင့်လှည့်ရသည့် မီးအိမ်တစ်ခု အကောင်းပကတိပါလာသည်က ကံကောင်းပေစွ။
ညကျရင်တော့ အသုံးတည့်ပြီပေါ့လေ။ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းပြီးတော့ ဖူးဖူးနှင့်အတူ ဂူထဲ ပြောင်းထည့်သည်။ ဆပ်ပြာမှုန့် ရရင်ဖြင့် ဖူးဖူးအဝတ်တွေ လျှော်၊ ကိုလင်းအဝတ်တွေလည်း လျှော်ပေါ့။ ပစ္စည်းတွေ ဂူထဲထည့်ပြီးတော့ အဝတ်လျှော်ချင်လျှော်ရအောင် ဖူးဖူးကို ပြောရသည်။ ဖူးဖူးကလည်း လျှော်ချင်နေသည်။ နှစ်ယောက်လုံး အဝတ်အစားက ငပိစော်နံနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေ လျှော်ထားတုန်း ဘာသွားဝတ်မလဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဖူးဖူးက ညကတည်းက ရှိသမျှအရှက်တွေ ပေးလိုက်ပြီပဲ ကိုကိုရယ် ချွတ်လိုက်ပါ တော့။ ဖူးတို့နှစ်ယောက်ကို မြင်မဲ့သူလဲ မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်းသာ နေကြတာပေါ့ ဟုပြောလိုက်ရာ ကိုလင်း အကြီးအကျယ် အံ့သြသွားရတော့သည်။ ညကမှ အပျိုစင်ဘဝလေးကို စွန့်ပေးခဲ့သည့် သူ့ချစ်သူတဖြစ်လည်း ဇနီးအသစ်စက်စက်ကလေးက ဒီလိုမျိုး ပြောသည်ဆိုတော့ အံ့ဖွယ်သရဲပေပ။ နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ယောက်လုံး အဝတ်ဗလာနှင့် ဖူးဖူးက နှစ်ယောက်လုံးစာ အဝတ်ကို လျှော်ကာ သောင်ပြင်မှာ အုန်းလက်ခင်း လှန်းထားရ သည်။
အခုမှပဲ အာဒမ်နှင့် ဧ၀ လိုလို၊ ကျောက်ခေတ်လူသားလိုလို ဖြစ်ရတော့သည်။ ပထမတော့ တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် ကြည့်ကာ ရယ်ချင်သလိုလို ဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း ဖူးဖူး၏ ချစ်စဖွယ် စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကလေးကို မြင်ရသည့် ကိုလင်းက ခဏခဏ လောင်တီးနေသလို ဖူးဖူးကလည်း စိတ်တွေ နိုးကြား နေသည်သာ။ အဝတ်တွေလှန်းပြီးတော့ ဂူထဲပြန်ဝင်ကာ နှစ်ယောက်သား ချစ်ပွဲဆင်ကြသည်။ တရေးအိပ်ကြသည်။ ညနေကျတော့ လှန်းထားသည့် အဝတ်တွေ ပြန်သွားရုပ်ရင်း ညစာရှာဖို့မေ့သွားသဖြင့် အုန်းသီး၀၀စားကာ ပြန် ဝင်ရတော့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်ကြသည်လေ။
ညဘက်ရောက်တော့ ကိုလင်းက အိပ်ရာထဲရောက် ရောက်ချင်း “ဖူးလေး ကိုကိုတို့နှစ်ယောက်မှာ အဝတ်က ဒီတစ်စုံပဲ ရှိတာနော်၊ ဒါချည်းပဲ လျှော်လိုက် ဝတ် လိုက်ဆိုရင် ကြာရင် စုတ်ပြတ်သတ်ကုန်မှာ ကယ်မဲ့သူရှိရင်တောင် အဝတ်မပါရင် ရှက်စရာကြီး၊ ဒို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတုန်း အဝတ်မဝတ်ဘဲ နေကြရင် မကောင်းဘူးလားလို့´´ “အင် ကိုကိုကလည်း ဉာဏ်ကြီးပဲနော် ဖူးဟာကို တစ်ချိန်လုံးမြင်ချင်တိုင်း မသိတာကျလို့ ကောင်းပါပြီရှင် ကိုကို့သဘောပါ ဟုတ်လား´´ “အဲဒါကြောင့် ဖူး လေးကို ချစ်ရတာ သိလား´´ အိပ်ရာထဲရောက်တော့ ကိုလင်းက ဖူးဖူးကို အရင်လိုပဲ လုပ်ပေးလိုက် ပြီးနောက် မသိမသာ ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းနှစ်လိုက်က ဖူးဖူး၏ စောက်ဖုတ်ကလေးကို ပါးစပ်ဖြင့် ငုံပစ်လိုက် သည်။
ဖူးဖူး ထင်မှတ်မထားသဖြင့် လန့်ဖြပ်ကာ ကိုလင်း ခေါင်းကို အတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ “အို ကိုလင်း အဲဒါဘာလုပ်တာလဲ ဘုန်းတွေ နိမ့်ကုန်ပါ့မယ် မလုပ်ပါနဲ့ အို အို ပြောလို့လဲမရဘူး ခက်တော့တာပဲနော်´´ ကိုလင်းကတော့ ဖူးဖူး ဘယ်လိုပင်တားစေကာမူ လုံးဝဂရုမစိုက် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲသို့ သူ့လျှာ ကြီးကိုသာ ဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် ထိုးထည့်လိုက်၊ စောက်စိလေးကို လျှာနှင့်ထိုးလိုက်၊ စုပ်ယူလိုက်နှင့် လုပ်ချင် သလို လုပ်နေသည်။ ဖူးဖူးမှာ တားချိန်ပင်မရ၊ သူ့ဘာသာသူ အသက်ရှူတွေမှားကာ ကော့ပျံလန်နေတော့ သည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုလင်း၏ လျှာစွမ်းအောက်တွင် အညံ့ခံကာ ဖူးဖူး၏ ညီမလေးမှာ မျက်ရည်တောက် တောက်ကျအောင် ငိုရသည့်အနေအထားသို့ ရောက်သွားတော့သည်။ ဖူးဖူးကို တစ်ချီပြီးအောင် မှုတ်လိုက်ရာ အရည်များ ရွှဲနေသဖြင့် ကိုလင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးသွင်းတာတောင် မအော်တော့ပေ။ ညည်းရုံသာ ညည်းပြီး ကော့ကော့ခံနေတော့သည်။ “ဖူးလေး ပြီးကာနီးရင် ပြောနော် ကိုကိုနဲ့ ဖူးနဲ့ အတူတူပြီးရအောင်´´ “အင် ကိုကို ဘာပြီးတာလဲ´´ သြော် ဒီငတိမလေးကလည်း ပြီးသာပြီးသွားတယ် ပြီးတယ်ဆိုတာဘာလဲ မသိသေး။ “ ဖူးလေး ခုနက ဖြစ်သလို တအားကောင်းသွားတာ ပြီးတာပေါ့ ဖူးလေးရဲ့´´ ရှင်းပြပြီးနောက် ကိုလင်း ရပ်တန့် သွားသော အရှိန်ကို ပြန်မြှင့်တင်လိုက်သည်။ ကိုလင်းလည်း တအားကောင်းနေသလို ဖူးဖူးလဲ သေမတတ် ကောင်းလွန်းနေသည်။ ဖူးဖူး ပြီးကာနီးတော့ ကိုလင်းစကား နားထောင်သည်။
ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ် ဆို သည်နှင့် ကိုလင်း အားကုန် အရှိန်မြှင့်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “အာ့ အာ့…. ´´ဆိုသည့်အသံလေးကြားသည် နှင့် ကိုလင်း သုက်ရည်နွေးနွေးများကို ဖူးဖူး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ပန်းထုတ်လိုက်ရာ “အား… ကိုကို့….. အိ….. အား ကောင်းလိုက်တာ အား……..´´ ဆိုသည့်အသံနှင့်အတူ ပြီးသွားလေတော့သည်။ ကိုလင်းကလည်း သူပြီးပြီးချင်း မရပ်ပစ်ဘဲ ကျန်နေသေးသည့် မာကျောမှုလေးဖြင့် ဆက်ပြီး ဆောင့်ပေးလိုက်သဖြင့် ဖူးဖူး တအား ကောင်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ လင်မယားဆိုတော့လည်း ဒီထဲကကို မထွက်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များကြ သည်သာ။ တစ်ညလုံး ချစ်ရည်လူးကြသည်။ သူတို့နေသည့်ဂူထဲမှာ သုက်ရည်ရော စောက်ရည်နံ့များဖြင့် လှိုင် နေသည်။
သူတို့ကတော့ ဒီအနံ့ရလေ တဏှာကြွလေဆိုတော့ ခပ်ကောင်းကောင်းပဲပေါ့လေ။ ဒီလိုနှင့်သာ ညဆိုလည်း နှစ်ချီသုံးချီ နေ့ဘက်လည်း တစ်ချီလောက်တော့ ဆွဲဖြစ်ကြသည်။ အစက သူတို့အိပ်သည့်နေရာကိုသာ သွားသည်။ လိုးကြသည်။ နောက်တော့ အိမ်ထောင်သက်က လေး ရက်ပိုင်းမျှရှိလာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကလွဲရင် ရှက်စရာလူ တစ်ယောက်မှ မရှိသဖြင့် နေ့ဘက် လီးတောင် စောက်ပတ်ယားလာလျှင်လည်း ဂူထဲသို့ ပြန်မဝင်ဖြစ်တော့။ အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင်သာ လိုး ကြသည်။ တစ်ခါတရံလည်း ပင်လယ်ထဲ ရေကူးရင်းနဲ့ မတ်တပ်ဆော်ပြစ်သည်။ တစ်ခါတရံလည်း သောင်ပြင် ပေါ်မှာ ဗျင်းကြသည်။ သောင်ပြင်ပေါ်မှာက သိပ်အဆင်မပြေလှ။ အောက်ကခံရသည့် ဖူးဖူးက ဖင်ကြားထဲ သဲ ဝင်သဖြင့် ကြမ်းရှရှ၊ အပေါ်က ကိုလင်းကလည်း ဒူးက သဲပွန်းသဖြင့် ကြာကြာမလုပ်နိုင်။
နောက်ဆုံးတော့ အကောင်းဆုံးနေရာ သွားတွေ့သည်။ သူတို့လှေဖွက်ထားသည့်ဂူပေါက်ထဲရောက်မှ နေရာကောင်းတွေ့သွား ခြင်း ဖြစ်သည်။ လှေက ရာဘာလှေဖြစ်သဖြင့် မွှေ့ယာသဖွယ် ဇိမ်ကျလှသည်။ သို့သော် ညဘက်တော့ မအိပ် နိုင်ချေ။ ပင်လယ်လေတဟူးဟူးနှင့် အေးလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်သည်မှာ သုံးပတ်ခန့်ရှိသည်။ ဒီနားပတ်လည် လမ်းလျှောက်လိုက်ကြ၊ ဟိုနားဒီနား သွားလိုက်ကြ၊ ကျွန်းအနှံ့ မရောက်သေး။ တစ်ရက်တော့ တောထဲ ဝင်ကြည့်သည်။ တောက သိပ်နက်လှသည် မဟုတ်ပေမဲ့ သစ်ပင်တော့ထူထပ်သည်။ တောထဲရောက်တော့မှ တောငှက်ပျောများ၊ အခြားအမည်မသိ အပင် များ ပေါက်ရောက်သည်ကို သတိထားမိသည်။ တိရစ္ဆာန်က တစ်ခြားတော့ မတွေ့။ တစ်ခါတလေ မြွှတွေ့သည်။ မျောက်များလည်း တခါတရံ တွေ့သည်။ မြွှကေိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ မသတ်ပါ။
တစ်ခါတော့ ဖူးဖူးရပ်နေသည့် အပင်ပေါ်မှ လျှောဆင်းလာသည့် မြွေတစ်ကောင် တွေ့သဖြင့် မလွဲမရှောင်သာ ပစ်ချလိုက် ရသည်။ မြွေသားကင်တော့ ဖူးဖူးက မစားရဲသဖြင့် မစား၊ မျောက်သားတော့ စားသည်။ မျောက်ဖျက်သည့် အချိန်တွင် အနားမှာ မနေတော့။ လူကလေးနှင့် တူသဖြင့် သနားလို့တဲ့။ တောထဲ လေးငါးရက် လျှောက်သွားကြည့်တော့ လမ်းဖြစ်လာသည်။ နေရာတွေလည်း မှတ်မိလာသည် ဘယ်နားဘာအကောင်ရှိတတ်တာလည်း သိလာသည်။ ကိုလင်း တောထဲထွက်တိုင်း ဖူးဖူးက အမြဲတမ်း ပါသည်။ တောထဲတွင် အမဲပစ်လိုက်၊ စိတ်ထန်လာလျှင် တွေ့တဲ့နေရာတွင် မိုးတိုးမတ်တပ်ရော ပိုးလိုးပက်လက်ပါ လိုးလိုက် ဆော်လိုက်နှင့် သာယာနေကြသည်။ အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ပင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်လာတော့သည်။
ဖူးဖူးလည်း အတော်များများ ကျွမ်းလာသည်။ တစ်ရက်တော့ ဖူးဖူးက တောထဲသွားနေရင်း “ကိုကို ခဏမျက်စိမှိတ်ပေးနော်´´ ဟု ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုလာသဖြင့် မျက်စိ မှိတ် ပေးလိုက်သည်။ ဖူးဖူးက ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကိုလင်း ဒုတ်ကို ထောင်လာအောင် ဆွပေးသည်။ ဒါဆို ကိုလင်းသဘော ပေါက်လိုက်သည်။ ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဖူးဖူးက တောင်လာသောလီးကို လက် ဖြင့် အရင်းမှ ကိုင်ကာ ဒစ်ကို ပါးစပ်ဖြင့် ငုံလိုက်သည်။ အိုး…. ကောင်းလိုက်သည့်အရသာ။
ဖူးဖူးက ကိုလင်း ရှုံ့ မဲ့သွားသော မျက်နှာကို မျက်လုံးလှန်ကြည့်ကာ ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်တော့သည်။ သိပ်ကြာကြာ မခံလိုက်။ ပြီးချင် လာသည်။ ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လည်း ပါးစပ်ထဲကပြန်မထုတ်ပေး။ ထွက်လာသမျှ အကုန်လုံးကို မျိုချ လိုက် တော့သည်။ ပြီးသွားတော့မှ “ကိုကိုက ဖူးဟာလေးကို ညတိုင်း လျက်ပေးတယ်၊ စုပ်ပေးတယ်၊ အရမ်းကောင်း တယ် ကိုကိုရယ်၊ ကိုကို့ကို ပြန်လုပ်ပေးချင်တာ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ၊ လုပ်လဲ မလုပ်ရဲဘူး၊ အခု တော့ ဖူး ကောင်းသလို ကိုကိုလည်း ကောင်းမလားလို့ လုပ်ပေးကြည့်တာ ကောင်းလားဟင်´´တဲ့။ ကိုလင်း အလွန် ကြည်နူးသွားသည်။ သူ ဖူးဖူးကို စပြီးပါကင်ဖောက်သည့် နောက်နေ့မှစကာ နေ့တိုင်း ဂျာပေးသော် လည်း ဖူးဖူးကို မစုပ်ခိုင်းရက်။ သူမကိုသာ ကောင်းစေချင်သည်လေ။ နောက်တော့ ညတိုင်းလိုလို သူမက အရင် စုပ်ပေးသည်။ ကိုလင်းကလည်း ဂျာပေးသည်။ ပြီးတော့မှ လိုးကြသည်။
အချိန်မရွေး လိုးနိုင်သည့် အနေအထားမို့ လောဘတကြီး တစ်ည လေးငါးချီ မလုပ်ဖြစ်ကြ တော့။ တစ်ည နှစ်ချီလောက်သာ လုပ်ဖြစ်တော့သည်။ မိုးလင်းကာနီး လင်းဆွဲလေးလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဆွဲဖြစ်သည်။ “ဖူးလေ ကိုကိုတို့လေ မြောက်ကျွန်းကိုများရောက်နေလားမသိဘူးနော်´´လို့ ကိုလင်းကပြောတော့ ဖူးဖူးက နားမလည်သောအကြည့်နှင့် “ဘာမြောက်ကျွန်းလဲ ကိုကို ဖူး တကယ်မသိဘူးနော်´´ဟု ပြန်ပြောသည်။ ကိုလင်းက “ဒီလိုလေ ဖူးရဲ့၊ ဟိုးအရင်တုန်းက ကမ္ဘာကြီးက ပြားတယ်လို့ ယူဆတုန်းက ကျွန်းကြီးလေးကျွန်း ပဲရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲမှာမှ မြောက်ကျွန်းမှာ ပဒေသာပင်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့၊ အဲဒီပဒေသာပင်ကနေ လိုသမျှ အကုန် ခူးယူစားသုံးနိုင်တယ်တဲ့၊ ဘယ်သူကမှ လောဘမတက်ကြဘူးတဲ့၊ ပြီးတော့ အဲဒီမြောက်ကျွန်းမှာ ကာမ ဆက်ဆံချင်ရင် လိုးချင်ရင် ဘယ်နေရာမှာမဆို လိုးလို့ရတယ်တဲ့၊ အဲဒီနေရာမှာ ခုနစ်ရက်ခုနစ်လီ လိုးကြတယ် တဲ့။
အဲဒီအချိန်ကျ သူတို့ဘေးပတ်လည်ကနေ သစ်ပင်တွေက အုပ်မိုးပေးထားတယ်တဲ့၊ အခုလည်း ကိုကိုတို့ အဲလို ဖြစ်နေသလိုပဲလေ၊ လိုးချင်တဲ့အချိန်လိုးတယ်၊ စားချင်တဲ့အချိန် စားချင်တဲ့ဟာယူစားတယ် ဘာထူးလဲ နော့´´ “သိဘူးကိုကိုရယ် ဖူးကတော့ ကိုကိုနဲ့အတူနေရတာ ပျော်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကိုလည်း ပြန်ချင် တယ်။ ကိုကိုနဲ့ ဖူးနဲ့ အိမ်မှာ ပျော်ပျော်နေကြရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ´´ ဖူးဖူးက ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေး ပြောတော့ ကိုလင်းလည်း အိမ်ကိုသတိရသွားသည် ဖူးဖူးကိုလည်းသနားသွားသည်။ သူတို့ ရောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်လကျော်ခဲ့ပြီ။ တစ်ရက်တော့ ဖူးဖူးက ကိုကို့ကို ပြောစရာရှိလို့ ဆိုကာ ဘယ်သူမှမရှိသည်ကိုသိသိနှင့် နားနားကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသည်။ ဖူးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီတဲ့။ ကိုလင်း တအား ပျော်သွားသည်။
ဒါဆို သားလေးရတော့မယ်ပေါ့။ ဟုတ်သေးပါဘူး။ သမီးလေးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ် ချင်တာဖြစ် သားဖြစ်ဖြစ် သမီးဖြစ်ဖြစ် ချစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သားလေးမွေးမွေး သမီးလေးမွေးမွေး ဒီကျွန်းပေါ်မှာ အဆင်ပြေပြေ မွေးနိုင်ပါ့မလား။ ဆရာဝန်မရှိ၊ ဆေးမရှိ။ သို့ပေသိ ကျောက်ခေတ်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ မွေးကြ တာပါပဲလေဟုသာ စိတ်ဖြေလိုက်ရသည်။
မိခင်လောင်းဖြစ်သည့် ဖူးဖူးက အပျော်ဆုံးပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကစလို့ သုံး လ ရှောင်ရသည်ဆိုသဖြင့် စိတ်ကို ချုပ်တည်းရသည်။ ဖူးဖူးက အလိုက်သိသည်။ ပါးစပ်ဖြင့် နေ့တိုင်း လုပ်ပေး သည်။ လက်ဖြင့်လည်း လုပ်ပေးသည်။ အလိုက်သိတတ်လွန်းသော ဇနီးလေးကို အချစ်ပိုရသည်။ သူမကို အာဟာရဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ကျွေးရတော့သည်။ ငှက်ဥလည်း နှိုက်ကျွေးသည်။ ခရု၊ ငါး၊ ပုဇွန် ပေါပေါများများ ရအောင် ရှာကျွေးသည် ။ မိခင် ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်မှ ကလေးကို ဆရာဝန်မဲ့ မွေး နိုင်မည် မဟုတ်ပါလား။ သုံးလလောက်နေတော့ တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ဖြစ်ကြသေးသည်။ သို့သော်လည်း အရင်လို နည်းပေါင်းစုံ မလုပ်တော့။ အညင်သာဆုံးနည်းဖြင့် လိုးကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်မာလာတော့ မလုပ်ဖြစ်တော့ပါ။
မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတော့ လင်လုပ်သူ ကိုလင်း စုရဆောင်းရပြီ၊ ကလေးအဝတ်ကလေးတွေက အသုံးဝင်လာသည်။ မိဘတွေ အဝတ်မဝတ်ဘဲနေရင်တောင် ကလေးကိုတော့ နွေးအောင်ထားရမည်။ ဒီလိုနှင့် ကိုးလ လွယ်လို့ ဆယ်လ ဖွားမည့်အချိန်သို့ ရောက်လာသည်။ တစ်ရက်တော့ ဗိုက်နာသည် ဆိုသဖြင့် ပင်လယ်စပ်မှာ မွေးလို့မဖြစ်နိုင်လို့ ချောက်အတွင်းမှ ရေချိုအိုင်သို့ ထမ်းပြေးရသည်။ ရေချိုအိုင်နား မှာ သစ်ရွက်ထူထူ ခင်းပေးရသည်။ ဖူးဖူးက တစ်ခါမှ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖူးသဖြင့် အတင်းညှစ်နေသည်။ တအား နာမှ ညှစ်ရန်လည်း ပြောပေးရသေးသည်။ တကယ်တော့ ကိုလင်း လက်တွေ့မမြင်ဖူးပါ။ အရင် တုန်းက You Tube မှ စပ်စပ်စုစု လျှောက်ကြည့်ထားသည့် ကလေးမွေးသည့်ဗီဒီယိုများက အသုံးတည့်နေသည်။
ကိုလင်း စိတ်တအား ပူနေသည်။ အဆင်မှ ပြေပါ့မလား။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ဖူးဖူး ဒုက္ခဖြစ်ရင် ကိုလင်းတစ် ယောက်တည်း ကျွန်းပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့မှာ။ ဒါဆိုရင်တော့ အသက်မရှင်လိုတော့။ ပစ္စတိုဖြင့် အဆုံးစီရင်ပြီး ဖူးဖူး နောက် လိုက်မည် စသည်ဖြင့် တောင်တောင်အီအီ လျှောက်တွေးနေသည်။
ဖူးဖူး၏ အော်သံ တအားကျယ် လာပြီ။ ကိုလင်းလက်ကို ကိုင်ထားသည်။ လက်ကို ပြတ်ထွက်မတတ် ညှစ်ထားသည်မှာ သူမ ဝေဒနာကို ဖော် ကျူးနေသည့်နှယ်။ တစ်ချက်တော့ တအား ညှစ်လိုက်သည်။ ကံကောင်းပေစွ။ အနေအထား မပျက်ယွင်းသည့် ကလေးငယ်သည် ယောနိဝမှ ခေါင်းပြူလာသည်။တစ်ကိုယ်လုံးထွက်လာပြီးနောက် အချင်းပါ ထွက်ကျ လာသည်။ ရေမွှာတောင် မပေါက်လိုက်သေးသည်လားမသိ။ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ရေမွှာမပေါက်ဘဲ ကလေးမွေးစရာ မရှိ။ ရေမွှာရည်မရှိဘဲ ကလေးအသက်မရှင်နိုင်။ ခုနက သူထမ်းပြေးတုန်းက ရွှဲကုန်သည်မှာ ရေမွှာပေါက်သည် ဖြစ်လိမ့်မည်။ နာလွန်းလို့ သေးပေါက်ချသည်ထင်လိုက်သောကြောင့် သတိမထားမိခြင်းဖြစ်သည်။ ချက်ကြိုးကို ဖြတ်ရန် ဓားကို ပြင်ပြီးမှ သတိရသဖြင့် မီးဖြင့် ဓားတစ်ချောင်းလုံးကို ကင်လိုက်ပြီးမှ အေး အောင် ရေနှင့် အမြန်စိမ်ကာ ချက်ကြိုးဖြတ်ပြီး ခပ်တင်းတင်းလေး ထုံးလိုက်သည်။
ဖူးဖူးကတော့ အားအင်ကုန် ခမ်းကာ ယဲ့ယဲ့မျှသာ ရှိတော့သည်။ ကလေးက သမီးလေး။ သြော် သမီးလေး ကံကောင်းပေစွ။ လူမရှိသူမရှိ ကျွန်းပေါ်မှာ ဒီလို အဆင်ပြေပြေ မွေးနိုင်သည်မှာ နည်းသည့်ကုသိုလ်မဟုတ်။ သမီးလေး၏ အသံစာစာလေး ကြောင့် မှိန်းနေသော သူ့အမေ ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ အားယူ ထထိုင်လိုက်ပြီး သမီးလေးအား နို့ချို တိုက် ကျွေးလိုက်သည်။ အိမ်မှာသာဆို ဆေးရုံမှာ လူနာလာကြည့်သူတွေ စည်ကားနေရော့မည်။ သမီးလေးမျက်နှာ ကို မြင်ရသည့် မိခင်လုပ်သူ ဖူးဖူး မျက်နှာမှာ ခုနက ပင်ပန်းနာကျင်မှုတွေ တစ်စက်မျှပင် မရှိလေတော့။ သွေးနုသားနု မိခင်များ ရှောင်ကျဉ်ရမည့်အရာများ ကိုလတ်က ဆရာလုပ်သည်။ နနွင်းတက်လည်း မရှူ နိုင်၊ နွားမြီးလည်း ပြုတ်မတိုက်နိုင်၊ မီးတွင်းလည်း မဝင်နိုင်၊ သို့သော် ကံတရား၏ ဖေးမမှုဖြင့် သမီးလေး ကျန်း မာပါသည်။
သမီးလေး ခုနစ်ရက်သမီးအရွယ်တွင် ကိုလင်းက ကင်ပွန်းတပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနေ့တွင် အုန်း သီးများ စိတ်ကာ တောထဲမှ မျောက်များကို သွားဝေသည်ဆိုပဲ။ မျောက်ကတော့ မြင်တာနဲ့ပြေးသည်ပေါ့။ ကို လင်းကတော့ သမီးကင်ပွန်းတပ် အလှူလုပ်သည်ဆိုကာ မျောက်ကို အုန်းသီးစိတ် သွားကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ နာမည်ကိုတော့ အဏ္ဏဝါဟုသာ ပေးလိုက်သည်။ မွေးရပ်ဇာတိနှင့် လိုက်ဖက်ညီသည်သာမက နာမည်လည်း လှပါသည်။ သမီးလေး လေးဆယ့်ငါးရက်ပြည့်တော့ ကိုလင်းကပင် တောင်းဆိုစရာမလို၊ ဖူးဖူးက အလိုက်တသိ ပင် တောင်းဆိုလာပါသည်။ သမီးကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းက ကောင်းကောင်းမလုပ်ရတာကြာနေပြီကိုကိုရယ် ဖူး စိတ်တွေတအားလာနေတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ သမီးကို အရိပ်အောက်မှာ ထားပြီး နှစ်ယောက်သား လှေပေါ်မှာ သွား လိုးကြတော့သည်။ ငတ်နေလို့လားမသိ ချိုနေတာပဲ၊ အဲ မဟုတ်ပါဘူး အရသာရှိတာကို ပြောတာ။ နှစ်ချီ သုံးချီ ဆက်တိုက်ဆွဲလိုက်တယ်။ သမီးတစ်ယောက် မွေးထားပေမဲ့ ကျယ်မသွားပါဘူး။ မဆိုသလောက် ညှစ်အား လျော့သွားပေမဲ့ အရင်လို ကောင်းတုန်းပါပဲ။ နောက်တော့ သမီးလေး နှစ်လသမီးအရွယ်လောက် ရောက်တော့ ကိုလင်းက တောစပ်မှာ အိမ်လေး တစ်လုံး ဆောက်သည်။ တောထဲမှရသည့် သစ်၊ မျော၊ ဝါးများဖြင့် လုပ်ထားရာ အိမ်ကလေးကတော့ သေးသေး လေးပေမဲ့ ကိုလင်းတို့ လင်မယားအတွက်တော့ နတ်ဘုံနတ်နန်းလေးပါပဲ။ ဂူထဲကို သိပ်မသွားဖြစ်တော့။ တစ်ခါ တစ်လေ မိုးသည်း လေထန်ရင်တော့ ဂူထဲပြေးရသည်။
လေကတော့ ကာပါသည်။ ကျောက်ဆောင်အကွယ်ထဲ ဆိုတော့ လေတိုက်ရိုက်မခတ်နိုင်ပါ။ လေဆင်နှာမောင်းဆိုရင်တော့ မတတ်နိုင်။ အလုံးလိုက်ကျွတ်သွားမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လဲ ပြန်ဆောက်မှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေ လတွေ တစ်လပြီး တစ်လ ဖြတ်ကျော်လာသည်။ သူတို့ကို ကယ်ဆယ်မည့်သူ မပေါ် သေး။ သမီးလေးလည်း စကားမပြောတတ်သေးတာတောင် ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ လုပ်တတ်လာသည်။ ဝူးဝါးဝူးဝါး စကား ပြောသင်နေပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါလည်း စိတ်အားငယ်မိသည်။ သမီးလေးမျက်နှာက ခွန်အားဖြည့်ဆေးဖြစ်သည်။ မိဘတောင် စိတ်အားငယ်မှတော့ သားသမီးက ဘယ်လိုအားရှိပါ့မလဲဟု ကိုလင်းက စိတ်ကိုတင်းထားနိုင်သည်။ ဖူးဖူးကတော့ တခါတရံငိုသည်။ ဖူးဖူးငိုလျှင် သမီးလေး အဏ္ဏဝါက လိုက်ငိုသည်။ ကိုလင်းက ပြန်ချော့ရသည်။ တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီပဲ။ တစ်ရက်တော့ ဖူးဖူးက ကိုကို ဒီနေ့ ဖူးရောကိုကိုရော အဝတ်တွေ ပြန်ဝတ်ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်၊ ညဘက်သာ တခါတခါ အေးလို့ဝတ်ဖြစ်တာ၊ သိပ်မဝတ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ အဝတ်ဝတ်ချင်စိတ် ပေါက်နေတယ် ဟုပြောလာသည်။
သူစိတ်ချမ်းသာအောင် အဝတ်တွေ ဂူထဲသွားယူကာ ဝတ်လိုက်ကြသည်။ ဖူး ဖူးကလည်း အရင်လို စကတ်ကလေးနဲ့ အပျိုလေးနဲ့ပြန်တူသွားသည်ဟု ကိုလင်းကပြောသဖြင့် ဖူးဖူးက တခစ် ခစ်ရယ်တော့ သမီးလေးက ဘုမသိဘမသိ လိုက်ရယ်သည်။ ကိုလင်းလည်း ရယ်နေရင်း ပင်လယ်ဘက် အမှတ် မထင် လှမ်းကြည့်မိလိုက်သည်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအောက်မှာ မီးခိုးတန်းတစ်ခု၊ ကိုလင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ် သွားသည်။ ဂူထဲသို့ ဝင်ကာ မှန်ပြောင်းပြေးယူသည်။ မှန်ပြောင်းဖြင့် သေချာစွာကြည့်သည်။ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောတစ်စင်းများလား။ ထပ်ကြည့်သည်။ ဟုတ်သည်။ သင်္ဘောတစ်စင်း။ သူတို့ဘက်ကို ဦးတည် လာနေ သည်တော့ မဟုတ်ပေ။ ကိုလင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ဂူထဲတွင် သိမ်းထားသော မီးကျည်များ သွားယူသည်။ မီးကျည် အဖြူတစ်လုံး ပစ်ဖောက်သည်။ ဖောင်းကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ထိန်သွား သည်။ သမီးလေးက လန့်ငိုသည်။ မထူးခြား။ မီးကျည် အဖြူဆိုတော့ မြင်ပုံမရ။
မီးကျည် အနီက ခြောက်လုံး တည်းသာ ပါသည်။ တစ်လုံး ဖောက်လိုက်သည်။ ရွှီးကနဲ တက်သွားကာ ကောင်းကင်ယံတွင် နီရဲ တောက်ပစွာ ပေါက်ကွဲသည်။ တစ်လုံး မထူးခြားသေး။ နှစ်လုံး မထူးခြားသေး။ သုံးလုံးမြောက်တွင် သင်္ဘောမှ မီးကျည် အစိမ်း တစ်လုံး တက်လာသည်။ ကိုလင်းရော ဖူးဖူးပါ အတိုင်းမသိ ပျော်သွားသည်။ ဖူးဖူး ဒီနေ့ အဝတ်တွေ ဝတ်ကြည့် ချင်သည်မှာ ဒီနိမိတ်များလား မသိတော့ချေ။ ကိုလင်း မှန်ပြောင်းနှင့် ထပ်ကြည့်သည်။ သေချာပြီ။ သင်္ဘောဦး ပြန်လှည့်လာချေပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နီးသထက်နီးလာရာ သင်္ဘောမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သင်္ဘောတော့ မဟုတ်။ ငါးဖမ်းသင်္ဘောလည်း မဟုတ်။ ကျွန်း နှင့် ခပ်ဝေးဝေးမှာ ကျောက်ချကာ ကျွန်းဘက်သို့ ရာဘာလှေဖြင့် ကူးလာသည်။
ကိုလင်းရော ဖူးဖူးပါ ကျန်ခဲ့ သည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်ယူရန် စိတ်မကူးတော့။ ရာဘာလှေကလေး ကမ်းသို့ကပ်လာရာ လှေပေါ်တွင် ယောင်္ကျားနှစ်ယောက်နှင့် မိန်းမတစ်ယောက်ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဖြစ်ဖို့များသည်။ တူညီဝတ်စုံ များနှင့် ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးက ဖူးဖူးနှင့် သမီးကို လက်ဖြင့် ကူညီဆွဲတင်သည်။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က ကိုလင်းကို ဆွဲတင်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး အဝတ်အစားများက လျှော်ထားသဖြင့် သန့်ရှင်းနေသော်လည်း စုတ်ပြတ် နေပေပြီ။ သင်္ဘောကြီးပေါ်တက်လိုက်တော့ ကပ္ပတိန်က စောင့်နေသည်။ တက်လာသော သူတို့နှစ်ယောက် ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကာ နှစ်လိုဖွယ် အပြုံးဖြင့် ဆီးကြိုကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နှုတ်ဆက်သည်။ ကိုလင်းက အင်္ဂလိပ်လို အနည်းငယ်ပြောတတ်သဖြင့် ကံကောင်းသွားသည်။ ကိုလင်းက ပြန်နှုတ်ဆက်ကာ အကြောင်းစုံ ပြောပြသည်။ မြန်မာလူမျိုးမှန်းသိသွားသောအခါ ကပ္ပတိန်က သင်္ဘောသားထဲတွင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ပါ သည်ဟုဆိုကာ ခေါ်ပေးသည်။
သူမနာမည်က ဒေါ်နှင်းပွင့်ဝေ။ အရပ်ရှည်ရှည် အသက်(၃၀)လောက် ရှိမည်။ သူမက ဖက်လှဲတကင်း မိတ်ဆက်သည်။ နောက်တော့ စားစရာသောက်စရာများ ချကျွေးသည်။ အဝတ်အစား များလည်း ထုတ်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးမှ သိရသည်မှာ သူတို့ကိုလာကယ်သည့် သင်္ဘောသည် NGO တစ်ခုမှ သင်္ဘောဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းလောက်က ပျောက်ဆုံးသွားသည့် သင်္ဘောကို ရှာဖွေရင် ဒီနားသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်းကို မြင်ရသော်လည်း လူမနေဟု ယူဆက ပြန်လှည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ မီးကျည်ဖောက်ပြလို့သာ လူရှိမှန်းသိသဖြင့် လှည့်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သူမတို့လည်း ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသဖြင့် ပြန် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူမတို့အဖွဲ့က စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူသို့ သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စင်ကာပူ ရောက်လျှင် မြန်မာသံရုံးသို့ အပ်နှံပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောတော့သည်။
ဒီကျွန်းသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ရေပိုင်နက်အတွင်းရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီး မြေပုံပေါ်တွင် မပါရှိကြောင်း သင်္ဘောများ ဒီလမ်းကြောင်းမှလည်း တော်ရုံ ဖြတ်လေ့မရှိကြောင်း ပြောပြသည်။ တစ်နေကုန် သင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်တွင်နေရင် ကျွန်းပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းရသမျှ ဘဝအတွေ့အကြုံများ ကို ပြောကြသည်။ ဒေါ်နှင်းပွင့်ဝေအပါအဝင် ကျန်သည့် သင်္ဘောသား တော်တော်များများလည်း လာနားထောင် ကြသည်။ သမီးလေး အဏ္ဏဝါကို မွေးနိုင်ခဲ့သည့် ဖူးဖူး၏ သတ္တ္တိကို ချီးကျူး မဆုံးတော့ပေ။ ကိုလင်းကိုလည်း ချီး ကျူးသည်။ မြင်ဖူးသမျှ ဒုက္ခသည်များသည် ဒီလိုမျိုးမဟုတ်၊ ပိန်လှီခြောက်ကပ်ကာ အရိုးပေါ်အရေတင်ဖြစ်နေ သော်လည်း အခု ကယ်ခဲ့ရသည့် မိသားစုမှာ လူမရှိ သူမရှိ ကျွန်းပေါ်တွင် တစ်နှစ်ကျော် နေလာခဲ့ရသော်လည်း ဝဖြိုးစိုပြေနေသည်မှာ ယောင်္ကျားလုပ်သူ၏ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟူ။ ဖူးဖူးက ကြည်နူး ပြုံး ပြုံးသည်။
ကိုလင်းက ရှက်ပြုံးပြုံးသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းတစ်ခန်း ပေးထားသည်။ ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းပေါ်မှာ အခြေကျလာသော သူတို့နှစ်ယောက်အဖို့ သင်္ဘောပေါ်မှ အိပ်ခန်းကပင် အနည်းငယ် စိမ်းနေသည်။ နွေးထွေး သလိုတော့ ခံစားရသည်။ သမီးတော်ကလည်း နေရာသစ်ဆိုတော့ တော်တော်နှင့် မအိပ်၊ သူ့အအိပ်ကို စောင့် ရသေးသည်။ သမီးလေး အိပ်သွားတော့ လုပ်ငန်းစတော့သည်။ ဖူးဖူးက သင်္ဘောက ပေးသည့် ပစ္စည်းများကို သုံးက အပြတ် ရွှိုင်းထားပြီးပြီလေ။ ကိုလင်း ရေသွားချိုးသည်။ ပြန်လာတော့ ဖူးဖူးက စပန့်သား ဂါဝန် အပျော့ လေးကို ဝတ်ထားသည်။ ကိုလင်း ဖူးဖူး တစ်ကိုယ်လုံးကို တပ်မက်မောစွာ ကြည့်သည်။ ဂါဝန်လေး ပေါက်ထွက် မတတ်ပင်။
ကိုလင်း အိပ်ယာပေါ်တက်လိုက်သည်။ မွှေ့ယာက စပရိန်မွှေ့ယာဖြစ်သဖြင့် အိစက်ညက်ညော လှသည်။ ဖူးဖူး၏ ဂါဝန်လေးကို ခေါင်းမှ လျှိုကာ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားသော ဖူးဖူး၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာစုပ်နမ်းလိုက်ကာ လက်တစ်ဖက်မှ ဖူးဖူး၏ ရင်သားလေးများကို ရွရွလေး ကိုင် တွယ် ဆော့ကစားပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဖူးဖူးပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ခေါင်းဝင်ကာ စောက်ဖုတ်ကလေးကို အသာလေး လျှာနှင့် တို့ ကြည့်လိုက်သည်။ ဆပ်ပြာတိုက်ထားသဖြင့် မွှေးပျံ့နေသည်။ လျှာပြားလိုက် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကို စုန်လျက်လိုက်ပြီး အစေ့လေးကို လျှာထိပ်ဖျားဖြင့် ဖိကာ ပွတ်လိုက်သည်။ ဖူးဖူး အရည်တွေ ရွှဲနစ်နေပြီ။ လုပ် ငန်း စချိန် တန်ပြီ။ ခါးတွင်ပတ်ထားသော မွေးပွတံဘက်ကြီးကို ဖြေထုတ်လိုက်ရာ ဒုံးပျံကြီးမှာ ပစ်ရန်အသင့် အနေအထားသို့ ရောက်နေပြီ။ ဖူးဖူး၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အသာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ တအိအိ ဝင်သွားသော အရသာကို ကိုလင်းခံစားနေလိုက်သည်။
ဖူးဖူးလည်း ထို့အတူပင် ငြိမ်ငြိမ်လေး ဇိမ်ခံနေလိုက်သည်။ ထို့နောက် အသွင်းအထုတ်ကို နှေးတခါ မြန်တ လှည့် လုပ်ပေးနေရာမှ ဖူးဖူး ပြီးကာနီးဖြစ်ကာ တုန်တက်လာသဖြင့် ဆက်တိုက် အားကုန်ဆောင့်တော့သည်။ ဖူးဖူးကလည်း တက်ကြွစွာ တုန့်ပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုလင်း သုက်ရည်ပူပူများကို သားအိမ်အတွင်း သို့ အရှိန်ပြင်းပြင်း ပန်းထုတ်လိုက်ချိန်မှာပင် ဖူးဖူးလည်း ပြီးသွားရလေတော့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် စပြီး ချစ် ခဲ့ချိန်မှ ကလေးတစ်ယောက်ရသည့်အချိန်အထိ ဒီအချိန်က အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာ စိတ်ဖိအားမှ မရှိ။ အိမ်အပြန်ခရီးလေ။ သုံးရက်လောက်သွားတော့ စင်္ကာပူကို ရောက်သည်။ စင်္ကာပူမှာ ဒေါ်နှင်းပွင့်ဝေက အကုန်လိုက်ပို့ သည်။ သြော် သင်္ဘောနစ်လိုက်ကာမှ စင်္ကာပူကို လေ့လာရေးခရီးတောင် သွားနေရပါပေါ့လား။
ပြီးတော့ သံရုံးကို လိုက်ပို့သည်။ သံရုံးကလဲ ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံသည်။ နောက်တစ်ပတ်လောက် သံရုံးမှာ အောင်းနေရ ပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လာခဲ့သည်။ လေဆိပ်တွင် ကြိုမဲ့သူ မရှိ။ ဖူးဖူးက ကိုလင်းအိမ်ကို အရင်ပြန်ပါဟု ပြောသည်။ ကိုလင်းအိမ်က ပုဇွန်တောင်မှာ။ မြို့ထဲသို့ ဘတ်စ်ကား စီးလာခဲ့သည်။ အရင်လို တော့ မဟုတ်တော့။ YBS စနစ်က အကောင်အထည်ပေါ်နေပြီဖြစ်ရာ အားရပါးရတက်စီးလာခဲ့သည်။ သိပ်တော့ လဲ မထူးပါ။ စပယ်ယာတွေကလဲ ဟောက်မြဲပါပဲ။ ကားတွေကလည်း လု မောင်းဆဲပါပဲ။ မော်တော်ပီကယ်ကလဲ ဖမ်းဆဲပါပဲ။
ပုံးထဲ ငွေထည့်ရတာနှင့် စပယ်ယာလာကောက်တာတော့ ကွာသည်။ အိမ်ရောက်တော့ ကိုလင်း မိဘတွေရော နှမတွေပါ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ကြောင်ကြည့်ကာ တစ်မိ နစ်လောက် စကားမပြောနိုင်။ ပြီးတော့မှ ကိုလင်းတို့ကို အိမ်ထဲသို့ ခေါ်သွင်းသည်။ အမေလုပ်သူက သူ့သား သေရွာပြန်ကြီးကို ပြန်တွေ့ရလို့ ငိုတော့သည်။ အဖေလုပ်သူကတော့ ကြည်နူးနေသည်။ ကိုလင်းက ဖူးဖူးနှင့် သမီးကို ပြကာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်။ အကြောင်းစုံကိုလည်း ရှင်းပြလိုက်တော့ သဘောပေါက်သွားကြ သည်။ မြေးကိုရော ချွေးမကိုပါ ချစ်ကြသည်။ ဖူးဖူးကို မေးတော့မှ ပိုအဆင်ပြေသွားသည်။ ဖူးဖူး၏ အဖေက ကိုလင်းအဖေနှင့် သင်တန်းတစ်ခု အတူတက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘီယာသောက်ဖော်များဖြစ်သည်။ အိမ်မှာတစ်ရက်နားခိုင်းကာ နောက်နေ့ကျမှ ကိုလင်းအဖေက ကားဖြင့် ဖူးဖူးတို့အိမ် လိုက်ပို့သည်။ ဖူးဖူးတို့အိမ်က မြောက်ဥက္ကလာမှာ။ ရောက်တော့ ကိုလင်းမိဘတွေလိုပင် ကြောင်ကြည့်နေကြသည်။
နောက် မှ ဆွမ်းသွပ်ပြီးတာ တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ သမီးရယ် ဟုပြောကာ ငိုကြလေတော့သည်။ နှစ်ယောက်လုံးငိုကြခြင်း ဖြစ် သည်။ နောက်မှ ကိုလင်းအဖေက ဦးဆောင်ကာ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြလေရာ ဖူးဖူး၏ ဖခင်ရော မိခင်ပါ ကျေနပ်သွားသည်။ သူ့သမီး မင်္ဂလာမဆောင်ဘဲ ယောင်္ကျားရသွားသည်ကိုလည်း စိတ်မဆိုးကြတော့ပါ။ သူတို့ သာဆိုရင် ဒီလို သမီးလေးတစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာ မွေးနိုင်မည်မထင်ကြောင်းပြောကာ ဖူးဖူးကိုရော ကိုလင်းကိုပါ ချီးကျူးသည်။ ထို့နောက် ကိုလင်းလက်ထဲသို့ သော့နှစ်ချောင်း ထည့်ပေးသည်။ လိပ်စာကဒ် တစ်ကဒ် ထည့်ပေးသည်။ ကိုလင်း ပထမတော့ ဘာမှန်းမသိ။ နောက်တော့မှ ဗဟန်းမှာ အိမ်တစ်လုံးရှိသည်တဲ့။ ထိုအိမ်ကို လက်ဖွဲ့သည်၊ အိမ်မှာ ကားဂိုထောင်ထဲ ကားတစ်စီးရှိသည်။
နောက်သော့တစ်ချောင်းက အဲဒီ ကားသော့ ဖြစ်သည်။ ကိုလင်း မယူလိုပါ။ သို့သော် ကိုလင်းအဖေက ယူလိုက်ပါသား အဖေ့သူငယ်ချင်းက အဲဒီ လောက်နဲ့ စီးပွားမပျက်လောက်ပါဘူးဟု ရယ်ကျဲကျဲပြောသဖြင့် ယူလိုက်ရသည်။ ဖူးဖူးအဖေက ကိုလင်းအဖေ ကို လက်သီးထောင်ပြသည်။ သြော် ကြည်နူးစရာကောင်းသော ဘဝတစ်ခုပါလား။ ကိုလင်း မိဘများကို ကိုလင်းကိုရော ဖူးဖူးကိုပါ သူတို့ပိုင်သော ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်တစ်ခုစီပေးသည်။ ရှယ်ယာတွေလည်း ခွဲပေးသည်။ ကိုလင်းတို့မှာ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်ကားပိုင် ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် ကျွန်းပေါ်မှာ တုန်းကလို လိုချင်တာ ချက်ချင်း မရနိုင်တော့ပေ။ ဝယ်ရသည်။ မှာယူရသည်။ ကျွန်းပေါ်က အရသာနှင့်တော့ မတူပါ။
ကျွန်းပေါ်မှာ အလိုဆန္ဒတွေ သိပ်မရှိလှ။ စားလို့နေလို့ရ တော်ပြီပေါ့။ ဒီရောက်တော့ မရတော့။ ကျား ကြီးလာလေလေ ခြေရာကြီးလာလေလေ ဖြစ်နေပါပြီ။ နှစ်ယောက်စလုံး ကျွန်းပေါ်တွင် အဝတ်ဗလာဖြင့် ကြိုက် တဲ့အချိန် ကြိုက်သလိုနေနိုင်သည့် အရိုင်းဆန်သည့် ဘဝလေးကို တစ်ခါတရံ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ပြောဖြစ်ကြ သည်။ သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာပြီ။ နောက်ထပ် သမီးလေးတစ်ယောက် ထပ်ထွန်းကားသည်။ သမီးငယ် ကိုတော့ ကောင်းကင်မေ ဟု ပေးလိုက်သည်။ အဏ္ဏဝါရဲ့အဖော်က ကောင်းကင် ဖြစ်ရမည်မဟုတ်ပါလား။ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်လာတော့ သူဖြစ်ချင်တာကို အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရသည်။ ကျွန်းကလေးကို တစ် ခေါက်ပြန်သွားချင်သည်။ စင်္ကာပူကို မိသားစုလိုက်ချီတက်သွားသည်။ လွယ်တော့မလွယ်။
သူလိုက်ပါလာသည့် သင်္ဘော ပိုင်ဆိုင်သည့် NGO ကို ရှာရသည်။ တွေ့တော့ သူတို့ပါလာသည့် သင်္ဘောက ယခု မသုံးနိုင်တော့။ ဒါနဲ့ သင်္ဘော၏ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရသည်။ သူလိုချင်သည်က ထိုရက်စွဲ တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ် အိမ်မြှောင်ညွှန်း။ ရခဲ့ပါသည်။ ငွေကုန်ခံနိုင်တော့ ကံလဲကောင်းလွန်းတော့ လိုချင်တာကို ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ သင်္ဘောတစ်စီး စင်းလုံးငှားရသည်။ ထို့နောက် ထိုကျွန်းကို တစ်ခေါက် ပြန်သွားသည်။ ဒီဘက်ခေတ် သင်္ဘောတွေ မြန်ဆန်လာသည်။ သုံးရက်လောက် မောင်းပြန်လာရသည့် ခရီးကို တစ်ရက် စွန်းစွန်းဖြင့် ရောက်သွားသည်။ ကျွန်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရတော့ အံ့သြသွားမိသည်။ ထိုကျွန်းတွင် ယခင်က သူတို့နှစ်ယောက်တည်းသာ။
အခုတော့ ကျွန်းပေါ်တွင် အိမ်ကလေးများ အစီအရီ။ သင်္ဘောလမ်းပြကြီးကို မေးကြည့်တော့ ဒီကျွန်းက ယခင်က လူမနေ။ နောက်တော့ လူနေအိမ်များ ရှိလာသည်။ အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေပြီ။ ဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်း ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ကျွန်းပေါ်သို့ တက်သွားတော့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သင်္ဘောပေါ်သို့ တက်စစ်သည်။ ကိုလင်း(ခ) ဦးလင်းကိုကိုက စင်္ကာပူသံရုံးမှ ထောက်ခံပေးလိုက်သော ထောက်ခံစာကို အပ်နှံလိုက်တော့မှ ကျွန်းပေါ်သို့ အသာတကြည် ခေါ် သွားသည်။
ကျွန်းက သေးသေးလေး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာ လူနေအိမ်ကလေးများ လှလှပပ ဆောက်ထားကြ သည်။ သစ်တောကြီးလည်း မရှိတော့။ တောင်ကြီးကတော့ ရှိနေသေးသည်။ ကိုလင်းက သူ ဒီထဲက ဂူထဲမှာ တစ်နှစ်လောက် နေဖူးကြောင်း၊ အထဲမှာ ချောက်ကြီးရှိကြောင်း၊ ဟိုဘက်မှာ ဂူပေါက်တစ်ပေါက် ရှိကြောင်း ပြောသည့်အခါမှ ကျွန်းစောင့်ရဲများ သြချယူရတော့သည်။ သူတို့ဒီထဲကို ရောက်တော့ ပစ္စည်းအချို့ တွေ့သည်။ တစ်ချိန်တုန်းက လူနေခဲ့သည်ကို တွေ့သည်။ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေသည်ဟုပြောသည်။ ထိုပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို အရှင်လတ်လတ် တွေ့ရသဖြင့် အံ့အား သင့်ကုန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်းစောင့်ရဲများနှင့် စကား ဖောင်ဖောင်ပြောရင် ကျွန်းပေါ်လှည့်ပတ်ပြသည်။
သြော် ဒီနေရာက ဘာလုပ်ခဲ့သည့်နေရာ၊ စသည်ဖြင့် ဇနီးသည်ကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတော့ ဇနီးသည် ဖူးဖူး ရှက်သွေးဖြာရသည်။ သမီးကြီး အသက် နှစ်ဆယ် ကျော်ပြီဖြစ်ရာ သူလည်း လေးဆယ်စွန်းစွန်း ဖြစ်နေပြီမဟုတ်ပါလား။ သမီးတို့ကိုလည်း သူတို့နေခဲ့သည့် နေရာများ၊ ရေထွက်အိုင်တို့ကို လိုက်ပြသည်။ ကျွန်းပေါ်မှာ တစ်ညနေရာ ကျွန်းစောင့်ရဲအဖွဲ့က ပင်လယ်စာများ ဖြင့် ကောင်းကောင်း ဧည့်ခံသဖြင့် တဝကြီး တွယ်လိုက်ကြသေးသည်။ နောက်တစ်နေ့ မနက်မိုးလင်းတော့မှ စင်္ကာပူသို့ ပြန်လာကာ ထိုမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာ ကြ တော့သည်။ နောင်တစ်ချိန် အဏ္ဏဝါနှင့် ကောင်းကင်မေက သူတို့ညီအစ်မ ဒီကျွန်းကို ရောက်အောင် ပြန်လာ အုံးမည်ဟု ပြောကြသည်။ သူတို့ သွားနိုင်ကြမှာပါ။ ကိုလင်းနှင့် ဖူးဖူးတို့ သားသမီးနှစ်ယောက် ထက်မြက်ကြ ပါသည်။ သမီးကြီးဖြစ်သူရော သမီးငယ်ဖြစ်သူပါ အိမ်ထောင်မပြုကြဘဲ အပျိုကြီးများဘဝဖြင့်သာ မိဘနှင့် အတူ နေကြရင်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည်….ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခုနဈရကျခုနဈလီ